prefrontal cortex တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်မှု၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခန္ဓာဗေဒထိုးထွင်းသိမြင်မှု (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
အဆိုပါ prefrontal cortex (2011) တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးများ၏အပြန်အလှန်သို့ခန္ဓာဗေဒထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
neuroscience Biobehav ဗျာ 2012 ဇန်နဝါရီလ; 36(1): 479-501 ။ 2011 သြဂုတ်လ 25 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2011.08.005
ရေဗက္ကာ Ray1 နှင့် ဒါဝိဒ်သည်အိပ်ချ် Zald2
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် neuroscience Biobehav ဗြာ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသန ပို. ပို. စိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များသိမှတ်ခံစားမှု၏အခြားရှုထောင့်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လေ့လာရေးသိမြင်မှုစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကျယ်ပြန့်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုများ၏စွမ်းရည်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိရန်အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးယန္တရားများသုံးစွဲဖို့လူသား၏စွမ်းရည်ကိုနှစ်ဦးစလုံးသရုပ်ပြပါပြီ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ဝေမျှသည်ဤ interaction ကတစ်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာပါသည်။ သို့သော်ဤ interaction ကအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသောအတွက်ထုံးစံသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း elucidated နေဆဲဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ကျနော်တို့ကခန္ဓာဗေဒ ventral နှင့် dorsal prefrontal ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုအဖြစ် limbic ဒေသများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြရန်။ prefrontal ဒေသများ၏တစ်ခုသာများအနက်အချို့သာလျှင်တိုက်ရိုက် amygdalar အပြောင်းအလဲနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စိတျပိုငျးဆိုငျရာစညျးမဉျြး၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မော်ဒယ်၏ prefrontal ထိန်းချုပ်မှု၏ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များအဖြစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်လမ်းကြောင်းမှသတ်ရပါမည်။ ငါတို့သည်လည်းထိုအဒေသများအကြား feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်ဆက်သွယ်မှုများ၏တိကျသောပုံစံသတင်းအချက်အလက် ventral နှင့် dorsal prefrontal ဒေသများအကြားစီးဆင်းမှုနှင့် amygdala ၏သဘောသဘာဝ dictate ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့အာရုံစိုက်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုဤပုံစံများစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအကြားဆက်သွယ်ရေး၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. တော်တော်များများလေ့ရှိပါကြောင်းယူဆချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။
keywords: dorsolateral, ventrolateral, orbitofrontal, functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း, အာရုံစူးစိုက်မှု, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်
သုတေသနစုဆောင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုသိမှတ်ခံစားမှု၏အခြားရှုထောင့်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပုံကိုကို examine ။ ထိုသို့သောအလုပ် (အစိတ်ပိုင်း valence သတင်းအချက်အလက်ကိုညွှန်ကြားနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ဘက်လိုက်မှုအာရုံကို elucidated ထားပါတယ်et al Ohman ။ 2001; အများစုမှာ et al ။ 2005; Mathews & ဝဲလ်, 1999), နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ (Knutson et al ။ 2008) ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ကြီးထွားလာစာပေ (ထိုကဲ့သို့သော reappraisal အဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များစိတ်ခံစားမှုတုန့်ပြန်ထိန်းညှိနိုင်မညွှန်ပြမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ 2000; Kim & Hamann, 2007; Ochsner et al ။ 2002; Ochsner, Ray, et al ။ 2004; Ray, Wilhelm & စုစုပေါင်း, 2008) ။ အမှန်စင်စစ်အစဉ်အလာတင်းကြပ်စွာသိမြင်မှုတင်းကြပ်စွာစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြားအပြန်အလှန် (ဥပမာကိုကြည့်ပါဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ဤဒိုမိန်းအကြားမကြာခဏအတုသွေးခွဲကိုခေါ်ဖို့လုံလောက်တဲ့သိသိသာသာရှိပါတယ် Pessoa, 2008) ။ သို့သော်သွေးခွဲကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အယူအဆရေးရာတန်ဖိုးကိုပေးစွမ်းသည်အာရုံစိုက်မှုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များဝိသေသလက္ခဏာများကွဲပြားခဲ့ကြပြီးမတူညီတဲ့ (တစ်ခါတစ်ရံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်ဆိုသော်ငြား) ကွန်ရက်မှာ instantiated ထားတဲ့အတွက်နည်းတူအခြားသိမြင် domains များအနေဖြင့်ခွဲခြားနိုင်စစ်ဆင်ရေး၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ဦးနှောက်ဒေသ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ် domains များအပြန်အလှန်ရသောထုံးစံ psychopathology ၏မော်ဒယ်များမှ ပို. ပို. အလယ်ပိုင်းဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏ Conceptual မကြာခဏ (ခြိမ်းခြောက်လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည်ဆန်တဲ့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆရာတော်, 2007; Cisler & Koster, 2010; Ouimet, Gawronski & Dozois, 2009; Williams က et al ။ 1996) ။ အလားတူပင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုထိပ်တန်းချလျှောက်ထားရန်မအောင်မြင်မှုများ ပို. ပို. အဓိကစိတ်ကျရောဂါကနေအထိစိတ်ရောဂါမမှန် (ဗဟိုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်Fales et al ။ 2008; ဂျွန်စ et al ။ 2007; Almeida et al ။ 2009; တေလာ Tavares et al ။ 2008), (နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါမှနယူး et al ။ 2008).
Prefrontal ဒေသများစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏အခြားရှုထောင့်အကြား Interface ကို၏ neurobiological မော်ဒယ်များရာ၌အရေးပါနိုင်သည်။ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသော prefrontal ဒေသများ၏ခန္ဓာဗေဒ features တွေမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များများ၏တရားဝင်မှုစဉ်းစားသာဤဇယားကိုတစေ့တစောင်းအာရုံကိုပေးအပ်ထားတယ်။ ခန္ဓာဗေဒထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်များသောအားဖြင့်သာထိုဒေသတွင်ထိုကဲ့သို့သော amygdala သို့မဟုတ် hypothalamus အဖြစ် limbic ဒေသများနှင့်အတူမည်သည့်တိုက်ရိုက် afferent သို့မဟုတ် efferent ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိ၏ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများမှာဆှေးနှေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤဆက်သွယ်မှုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤအဒေသဆိုင်ရာအပြန်အလှန်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) ထို posits ကြောင်းဥပမာ, မော်ဒယ် တိုက်ရိုက် က DLPFC အဆိုပါ amygdala ဖို့လုံလောက်သောတိုက်ရိုက်စီမံချက်များပို့ပေးကြောင်းသရုပ်ပြလျှင် amygdalar လှုပ်ရှားမှုသာသောအသံရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစီမံချက်များကျိုးနွံသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်လျှင်, ကြားခံဒေသများအပေါ်အားကိုးကြောင်းအခြားရွေးချယ်စရာမော်ဒယ်များ amygdalar တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အပြုသဘော DLPFC သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှင်းပြဖို့လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
ကွဲပြားခြားနားသော prefrontal ဒေသများနှင့်သူတို့၏ဆက်သွယ်မှု၏ laminar ပုံစံများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များကိုလည်း prefrontal cortex (PFC) ကကမကထပြုခဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအကြားအပြန်အလှန်သို့သိသိသာသာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုငျသညျ။ အထူးကွဲပြားခြားနားသော cortical တိုင်းဒေသကြီးများ၏ cytoarchitectural features တွေသူတို့သတင်းအချက်အလက်ကို process နှင့်အခြားဒေသများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရသောထုံးစံ dictate ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ဘို့သိသိသာသာသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်ပေမယ့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဤဒုတိယအဆင့်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု-သိမြင် interaction ကများ၏အာရုံကြောအလွှာ၏ဆွေးနွေးမှုများသို့ ဝင်. မထားပါဘူး။
ပစ္စုပ္ပန်စက္ကူခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ amygdala နှင့်အတူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော PFC ဒေသများအကြား Interregional ဆက်သွယ်ရေး၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ interaction ကဖျောပွဖို့ကြိုးစား။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့် (Orbital အကြားထူးခွားသညျ့အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များမှအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် orbitofrontal cortex (OFC) ၏ရှည်လျားသော-ရပ်တည်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏ PFC dorsolateralZald & Kim, 1996) နှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏အလုပ်အမှုဆောင်ရှုထောင့်မှ DLPFC ၏အလားတူနှစ်ရှည်လများအသင်းအဖွဲ့ (Fuster, 1989; Stuss & Benson, 1986) ။ တိုးမြှင့်ဒေတာသည်ဤဖွဲ့စည်းပုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏အခြားရှုထောင့်အကြားအရေးပါသော interface ကိုပေးညွှန်ပြအဖြစ်ငါတို့သည်လည်းဤ interaction ကအတွက် anterior cingulate (ACC) / medial တိုကျရိုကျအဆောက်အဦများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ပြရန်။
2 ။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် PFC ၏ cytoarchitectural features တွေ
အဆိုပါ PFC မကြာခဏ6ကျယ်ပြန့်ဒေသများ, dorsolateral, ventrolateral (VLPFC), frontopolar (လက်ဗွေ), OFC, ventromedial (VMPFC), နှင့် dorsomedial (DMPFC) သို့ခွဲခြား (ကြည့်ရှု ပုံ 1) ။ ဤအဒေသများအတိအကျမြေမျက်နှာသွင်ပြင်နယ်နိမိတ် variable သုတေသီများအားဖြင့်လျှောက်ထားကြသည်, သို့သော်ယေဘုယျ nomenclature အဆိုပါ PFC ၏ခန္ဓာဗေဒနဲ့ function ကိုနားလည်သဘောပေါက်များအတွက်ကျယ်ပြန့်စည်းရုံးရေးမူဘောင်အဖြစ်အသုံးဝင်သောသက်သေပြခဲ့သည်။
လူမှာ PFC ၏အထွေထွေဒေသများ။ အဆိုပါအရောင်ဒေသများ PFC ၏ကျယ်ပြန့်ဇုန်၏ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမြင် (လက်ဝဲ) နှင့် medial အမြင် (ညာ) နှစ်ဦးစလုံးမှာဒေသများa"ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင့်တက်" hemisphere အပေါ်မွမ်းမံလေ၏နေကြတယ် ...
Phylogeny နှင့် Cytoarchitecture
အဆိုပါ PFC (နှစ်ခုသီးခြားစီ, phylogenetically ကွဲပြား architectonic ခေတ်ရေစီးကြောင်းပါရှိသည်Barbas, 1988; Sanides, 1969; Yeterian & Pandya, 1991) ။ အဆိုပါ basoventral လမ်းကြောင်းသစ်အတွက် OFC မှတဆင့်အနေနဲ့ olfactory (allocortical) အမာခံထံမှချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် (Brodmann ဧရိယာ (BA) V46 အတွက်အဆုံးသတ်ရေး) ကို ventral တိုကျရိုကျတိုင်ဖို့, နောက်ပိုင်းတွင် VLPFC မှ anteriorly ပြန့်နှံ့။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, mediodorsal လမ်းကြောင်းသစ်သည် Corpus collosum တစ်လျှောက်တွင်စတင်အဆိုပါတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ medial အုတ်ရိုးဖြစ်စဉ်များ, ပြီးတော့ (BA D46 အတွက်အဆုံးသတ်ရေး) ကို DLPFC သို့ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏သာလွန်အစွန်းန်းကျင်ထုပ်။ ဤအခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုချင်းစီ granular အလွှာ IV ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကွာဟလာနေတဲ့အတွက်ထင်ဟပ် cortical ဗိသုကာ၏အဆက်ဆက်အဆင့်ဆင့်၏ပုံစံကိုပြသသည်။ အဆိုပါ evolutionarily အငယ်ဆုံးဒေသများတစ်ဦးသိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ် granular အလွှာရှိသော်လည်းဤအခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ evolutionarily အသက်အကြီးဆုံးအပိုင်းသဘာဝ agranular ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ basoventral လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်, ဒီ cortical တိုးတက်မှု (Carmichael နှင့်စျေး၏ဝေါဟာရများကို အသုံးပြု. posterior OFC (agranular insula အတွက်စတင်သည်Carmichael & စျေး, 1994ငါတဦးတည်း anteriorly သို့မဟုတ်နောက်မှလှုံ့ဆျောအဖြစ်ကွဲပြား granular အလွှာ IV နှင့်အတူ Cortex နှင့်နောက်ဆုံးမှာတစ်ဦးသိပ်သည်းအလွှာ IV နှင့်ခိုင်ခံ့သော supragranular နှင့်အတူ eulaminate II ကို cortex ရောက်ရှိ eulaminate ပြောင်းရွှေ့အဆိုပါ OFC ၏အလယ်ပိုင်းဒေသများအတွက်)) dysgranular အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် (ကိုအားနည်းစွာ granular) cortex, အဆိုပါတိုကျရိုကျတိုင်နှင့် ventrolateral ဒေသများ (ဆီသို့တဦးတည်းရွေ့လျားအဖြစ်အလွှာBarbas & Pandya, 1989; Carmichael & စျေး, 1994; Petrides & Mackey, 2006; စျေး, 2006a) ။ အဆိုပါ mediodorsal လမ်းကြောင်းသစ်အလားတူ cytoarchitectural တိုးတက်မှုပြသထားတယ်။ တထက်သာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus သို့ anteriorly အဆိုပါ medial မြို့ရိုးကိုလျှောက်တွင်သို့မဟုတ် superiorly လှုံ့ဆျောနှင့်နောက်ဆုံးမှာ elumaniate ဖြစ်လာအဖြစ်ငါ rostral Corpus collosum တလျှောက် periallocortex cortex နှင့်အတူစတင်ကာအဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ် (subgenual, pregenual နှင့် supragenual ဒေသများအပါအဝင်) ကို cingulate အတွက် dysgranular ဖြစ်လာ, eulaminate dorsolateral ဒေသများ (BA 8 နှင့် 46) တွင် II ကို။
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ဟူသောဝေါဟာရကို mediodorsal လမ်းကြောင်းသစ်၏အသုံးပြုမှုကိုကွပ်ထားတယ်အဆိုပါ DMPFC ဒေသနှင့်အတူရောထွေးမရသင့်ကြောင်းသတိပြုပါ ပုံ 1။ အဆိုပါ mediodorsal လမ်းကြောင်းသစ်အတွက် DMPFC လည်းပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်း VMPFC ဒေသများ 25 နှင့် 32, နှင့် medial မြို့ရိုးကိုလျှောက်တွင် BA ဘွဲ့ 10 ၏ဝေမျှ၏ nomenclature အတွက် (ဧရိယာ 10m ပါဝင်သည် Ongur et al ။ (2003); ပုံ 2).
အဆိုပါ basoventral နှင့် mediodorsal phylogenetic ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ နှစ်ဦးစလုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ, cortex တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးထူးခြားဖြစ်လာသည်။ ကနေခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အဆင်ပြေအောင်ပုံ Barbas နှင့် Pandya 1989။ အတိုကောက်: Pro ကို proisocortex; PAII limbic periallocortex; : D dorsal; ...
II ကို cortex eulaminate မှ agranular ထံမှတဦးတည်းရွေ့လျားအဖြစ် cytoarchitectural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံစံတွင် neuron များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်က (ဆဲလ်သိပ်သည်းဆ), အလွှာ II နှင့် V ကိုအတွက်ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေ၏အရွယ်အစားနှင့် myelination ၏အဆင့်ကို (အတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကိုBarbas & Pandya, 1989; Dombrowski et al ။ 2001; ပုံ 3), အတူတကွကွဲပြားခြားနားသောဒေသများဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်များအပြောင်းအလဲနဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်ရာ။ prefrontal ဒေသများအကြားအခြားအဓိကခြားနားချက်များကိုမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသော interneuron features တွေထင်ဟပ် histological အစွန်းအထင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပေါ်ထွန်း။ Carmichael နှင့်စျေးနှုန်း (Carmichael & စျေး, 1994) (မြင်မျောက်များ OFC ကိုဝေနှင့်ထိုကဲ့သို့သော features တွေအပေါ်အခြေခံပြီးမျိုးစုံငျဒသေသို့ PFC medial ကိန်းဂဏန်း 4), နှင့်ဤအင်္ဂါရပ်များအများအပြားလူသားတွေအတွက်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ် (Ongur et al ။ , 2003) ။ prefrontal ငျဒသေအနှံ့မြင်ပြီ differential ကို interneuron features တွေ prefrontal ငျဒသေဖွငျ့ပွညျ့စုံသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဝိသေသလက္ခဏာများ impact (ဝမ် et al ။ , 2004; Zald, 2007), ဒါပေမဲ့ဒီစက္ကူ၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ကြသည်။ ပြင်းထန်စွာ, PFC ၏ဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ်ကွဲပြားမှုဟာ PFC အတွင်းနှင့်အခြား cortical နှင့် subcortical ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးဆက်သွယ်မှု၏သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအားအပိုင်။
အဆိုပါ PFC အတွင်း cortical အလွှာအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများအဆက်ဆက်အဆင့်ဆင့်။ granular cortical အလွှာ IV ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူဆဲလ်များ၏သိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုးအဲဒီမှာဖြစ်ပြီး, အလွှာ III ကိုနှင့် V. ပုံထဲမှာပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏အရွယ်အစားခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အဆင်ပြေအောင် ...
ယင်းမျောက်များအတွက် PFC ၏ cytoarchitectural ကွဲပြားခြင်းဖေါ်ပြခြင်း flat မြေပုံ။ ဒီပြားမြေပုံကိုယ်စားပြုမှုမှာ cortex နိယာမ sulcus (အောက်ခြေနှင့်နှစ်ဦးစလုံးကိန်းဂဏန်းများထိပ်လိုင်း) မှာဖြတ်သည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကနေအဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ် Carmichael နှင့်စျေး, ...
အဲဒီမှာသိသာ homology ဟာတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွင်းမျောက်နှင့်လူ့ cytoarchitecture အတွက်ဖြစ်ပြီး, အထွေထွေ phylogenetic ခေတ်ရေစီးကြောင်းမျောက်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး shared နေကြသော်လည်းအများအပြားအခက်အခဲများလူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်ဒေတာများအကြားရွေ့လျားအတွက်ပေါ်ထွန်း။ ပထမဦးစွာလူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများမကြာခဏ (Brodmann ဒေသများရည်ညွှန်းBrodmann, 1914), ဒါပေမယ့် cytoarchitectural ဒေသများနှင့်နီးပါးရာစုနှစ်တစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့ Brodmann ရဲ့ရှေ့ဆောင်အလုပ်ကတည်းကဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီ areal နယ်နိမိတ်များ၏မှတ်ပုံတင်အတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ကြဘူး။ ဒုတိယအချက်မှာဤနယ်မြေတံဆိပ်များများ၏လျှောက်လွှာကိုမကြာခဏ (ထို Talairach Atlas အပေါ်အခြေခံထားတယ်Talairach & Tournoux, 1988cytoarchitectural ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် Atlas ၏အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ဦးနှောက်အပေါ်ဖျော်ဖြေမခံခဲ့ရကတည်းက), ဒါပေမဲ့ဒီ Atlas မှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုအကြမ်းဖျင်းပါပဲ။ တတိယ, ventral တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်တိရိစ္ဆာန်တံဆိပ်များနှင့်လူ့တံဆိပ်များအကြားတစ်ဦးမတိုက်ဆိုင်တိရစ္ဆာန်ဒေတာ Walker က (ကတီထွင်အဆိုပါတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအပေါ်မျိုးကွဲအသုံးချကြောင်းထဲမှာရှိWalker က, 1940), အချို့သောစာရေးဆရာများယခုလူသားတိုးချဲ့ခဲ့ကြရသော (Petrides & Mackey, 2006; Ongur et al ။ , 2003), အရှိဆုံး neuroimaging သုတေသီများနေဆဲ Brodmann တံဆိပ်များအသုံးချနေစဉ်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံရသောအခါ system ကို neuroimaging သုတေသီများကိုးကားထားတဲ့တံဆိပ်ကပ်ခြင်းတခါတရံတွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ဒါဟာလူ့သုတေသီများမကြာခဏ BA ဘွဲ့ 47 ရည်ညွှန်းရှိရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC / VLPFC အတွက်အထူးသဖြင့်မရေရာဒွိဟ, ထုတ်လုပ်ပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်စာပေဧရိယာ 12 ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤဒေသ၏ medial နယ်နိမိတ်ဦးဆောင် neuroanatomists နေဖြင့်အငြင်းပွားဖြစ်နေပေမဲ့တံဆိပ် 47 / 12 ယခု (လူသားများအတွက်ဒီဧရိယာကိုဖော်ပြရန်အချို့ neuroanatomists ကမွေးစားဖြစ်ပါတယ်Petrides & Mackey, 2006; Ongur et al ။ , 2003) ။ အလားတူပင် 13 နှင့် 14 ရှင်းလင်းစွာမျောက်နှင့် homologous ဒေသများရှိသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်ဒေသများလူသားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်, ဒါပေမယ့် posterior နှင့် medial OFC ၏ anterior အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးမှဧရိယာ 11 တစ်ယေဘုယျတံဆိပ်လျှောက်ထားသူကို Brodmann သို့မဟုတ် Talairach ကဖမ်းမိကြသည်မဟုတ်။ လူ့ neuroimaging data တွေကိုဖော်ပြတှငျကြှနျုပျတို့ယေဘုယျအားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့ကျယ်ပြန့်တံဆိပ်ကပ်မှုစနစ်ကိုးကား Petrides နှင့် Mackey (2006), အစား nonhuman မျောက်လေ့လာမှုများကနေအချက်အလက်များ၏အားသာချက်ယူနိုင်ရန်အတွက် Talairach Atlas ထက်။
3 ။ connections
prefrontal ဆက်သွယ်မှုအပေါ်အများစုကရှိပြီးသားဒေတာတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, (မျောက်ဝံများဖြတ်ပြီး cytoarchitectural homology ပေးထားPetrides & Mackey, 2006; Ongur et al ။ , 2003), ကယေဘုယျအားဖြင့်ဤဒေသများ၏ဆက်သွယ်မှုအကြီးအကျယ်မျောက်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းယူဆနေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်လူသားတွေအတွက်ချိတ်ဆက်မှုအကဲဖြတ်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ် nonhuman မျောက်စာပေသုံးစွဲဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ amygdala-PFC ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော PFC ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုဤနေရာတွင်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားများအာရုံစိုက်ပါ။
PFC မှ Amygdalar input ကို
PFC အဆိုပါ amygdala ကနေသိသိသာသာ input ကိုလက်ခံရရှိအဆိုပါ OFC နှင့် medial (Amar et al ။ , 1992; Carmichael & စျေး, 1995; Barbas & Zikopoulos, 2006) ။ ဒါက amygdala ကနေအနည်းငယ်မျှသာတိုက်ရိုက်စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံသော DLPFC မှချွန်ထက်မတူဘဲဆိုလိုတာပါ။ စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု ventral မှစီမံကိန်းအချို့နှင့် PFC medial (မူရင်း၏နျူကလိယသို့မဟုတ် subnucleus ပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြောင်းညွှန်ပြAmaral & စျေး, 1984; Barbas & De, 1990; Amar et al ။ , 1992; Carmichael & စျေး, 1995) ။ သို့သော်ဤအသေးစိတျကိုဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအားကြီးသောအလုံအလောက်ရုပ်ပုံဆက်သွယ်မှုပုံစံများအထွေထွေဆွေးနွေးမှုအကြောင်းကြားဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအရေးပါအနှံ့ပေါ်ထွက်လာ။ ပုံ5အဆိုပါ Carmichael နှင့်စျေး nomenclature သုံးပြီးဟာ Macaque ဦးနှောက်၏ medial နှင့် ventral မျက်နှာပြင်သို့ amygdalar Project (တော်တော်များများ amygdalar အရေးပါမှပေါ်ပေါက်) ၏အထွေထွေသိထားဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းမျက်နှာပြင်ဟာ amygdala နှင့်အတူ၎င်း၏ afferent ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဝတ်စုံမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားစေသည်။ အထူးသမှတ်စု၏ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဒေသများ 13m, 13l, 12m, 11l နှင့် 10o သို့သိသိသာသာ input ကို၏ဆွေမျိုးမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ medial မြို့ရိုးကိုလည်းသိသိသာသာ amygdalar input ကိုလက်ခံရရှိ, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်မဧရိယာ 10m မဟုတ်သလိုဧရိယာ9သိသိသာသာ amygdalar input ကိုလက်ခံရရှိသည်အတိုင်း, ယူနီဖောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းမျက်နှာပြင်၏ Cytoarchitectural မြေပုံ။ ကနေအဆင်ပြေအောင်ဟာတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ Cytoarchitectural တံဆိပ်ကပ်ခြင်း Brodmann (1914) (ညာ), Ongur, ကူးတို့နှင့်စျေးနှုန်း (2003) (အလယ်) နှင့် Petrides နှင့် Mackey (2006)(လက်ဝဲ) ။ အတွင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမှတ်ချက် ...
နှစ်ဦးကကောက်ချက် input ကိုကဒီပုံစံကနေရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ PFC သို့ amygalar input ကို architectonically သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး cytoarchitecturally ဖွံ့ဖြိုးသောဒေသများအတွက်အာရုံစိုက်နေပါတယ်။ ဤသည်ကယေဘုယျအား OFC အပေါငျးတို့သဆက်ဆံပါသို့မဟုတ်က amygdala ဖို့အကြီးအကျယ်ချိတ်ဆက်ဖြစ်လျှင်အဖြစ် PFC medial တစ်ဦးအမှားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြသည်။ ယင်းအစားအဆိုပါ OFC အတွင်းတည်နေရာမှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် PFC amygdalar ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းကိုအခြဆွဲမတိုင်မီအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ် medial ။ ဒုတိယ, DLPFC နှင့်လက်ဗွေအလွန်အမင်းအားနည်းတိုက်ရိုက် amygdalar input ကို (အမှန်ကိုသာအများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခု amygdalar input ကိုအထောက်အထားပြပါ) လက်ခံရရှိသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, DLPFC နှင့်လက်ဗွေအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ် amygdalar လွှမ်းမိုးမှုသွယ်ဝိုက်ဖြစ်များပါတယ်, ဖြစ်စေသည့် cingulate သို့မဟုတ် posterior OFC ဒေသများ (သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော neurotransmitter စနစ်များမော်ဂျူကဲ့သို့သောအခြားပိုပြီးယေဘုယျယန္တရားများမှတဆင့်) မှတဆင့်ကူးစက်ခံရ။
အဆိုပါ amygdala မှ Prefrontal output ကို
အဆိုပါ amygdala ဖို့ PFC များ၏အကျိုးရလဒ်များ (လည်းဒေသတွင်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်စျေး, 2006b; Ghashghaei et al ။ , 2007; Stefanacci & Amaral, 2002; Stefanacci & Amaral, 2000) ။ (ဥပမာ DLPFC နှင့်လက်ဗွေကဲ့သို့) အများအပြား amygdalar input ကိုမခံမယူကြဘူးကြောင်းဒေသများအတွက် amygdala ဖို့မှာအကောင်းဆုံးအားနည်းစီမံချက်များရှိနေစဉ်။ ယေဘုယျခုနှစ်, amygdala ကနေစီမံချက်များလက်ခံရရှိကြောင်း prefrontal ဒေသများသည် amygdala ပြန်စီမံချက်များပေးပို့ စီမံကိန်း၏သိပ်သည်းဆအကြီးအကျယ်ပိုပြီးဖွဲ့စည်းပုံ eulaminate isocortex ဖွံ့ဖြိုးဖို့ agranular ဒေသများထံမှတဦးတည်းရွေ့လျားအဖြစ် projection သိပ်သည်းဆတစ်ဦးအားနည်း gradation အတူ cytoarchitectonics ထင်ဟပ်။ ဒီပုံစံ isocortical ဒေသများ (DLPFC နှင့်လက်ဗွေ) က amygdala ကျော်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမပေးနိုငျကွောငျးညွှန်ပြနေပြီး, သူတို့က amygdala ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကျင့်သောအတိုင်းအတာအထိလွှမ်းမိုးမှုသွယ်ဝိုက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒီအမျိုးစုံလေ့လာမှုများအမှန်ပင်ဧရိယာ9နှင့် 46 (ထံမှတိုက်ရိုက်စီမံချက်များလေ့လာတွေ့ရှိကြပါပြီအဖြစ် amygdala ဖို့ DLPFC ထံမှမျှတိုက်ရိုက် Project, ရှိပါတယ်ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးStefanacci & Amaral, 2002; Aggleton et al ။ , 1980; Amaral & Insausti, 1992) ။ ယင်းအစားစီမံကိန်းယေဘုယျအား amygdalar အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကျယ်ပြန့်စည်းမျဉ်းများကိုလည်းအလင်းဖြစ်ကြ၏။
ယေဘုယျ cytoarchitectonics amygdala-prefrontal ဆက်သွယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အားကြီးသောစည်းရုံးရေးကျောင်းအုပ်ကြီးများကိုပေမယ့်, သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ၏ဆွေမျိုးဒေသဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူး (အချိုးကျမဟုတ်ပါဘူးGhashghaei et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ amygdala မှအကြီးဆုံးအထွက်သည့် posterior subgenual cingulate ဒေသ (BA 25) နှင့် dorsal anterior cingulate (BA 24 ၏ဝေမျှပေါ်ထွန်း, သော်လည်းအထူးသ, အ PFC သို့အမြင့်ဆုံး amygdalar input ကိုက, posterior OFC လျှောက် agranular နောက်ကျနေခဲ့သည်ဒေသတွင်တည်ရှိသည် ) ။ posterior OFC ဒေသများ output ကိုထက်ပိုမိုမြင့်မား input ကိုရှိသော်လည်းယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များ၌, medial မြို့ရိုးအဒေသများသည် amygdala ကနေ input ကိုထက်မှပိုမိုမြင့်မား output ကိုရှိသည်။ ပုံစံ VLPFC အတွင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာပိုမိုကျဲပါးချိတ်ဆက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC, DLPFC ဒေသများ (BA 8,9နှင့် dorsal 46), output ကိုထက်ကနေ amygdala ပိုမို input ကိုဝင်စား။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်မှတ်ချက်၏, ထို VLPFC အတွင်းဧရိယာ 12l ၏ posterior ဒေသက amygdala မှသိသိသာသာကိုတိုက်ရိုက် input ကိုအတူသာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC ဒေသအောင်, အ amygdala မှအလယ်အလတ်စီမံချက်များပေးပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤစီမံချက်များ input ကိုထက်ဒေသများ output ကို၏ 12l ရဲ့ သာ. ကြီးမြတ်အချိုးအစားကိုမျှဝေပေးသော anterior Orbital ဒေသများအတွက်ကိုတှေ့မွငျသောအရာကိုထက်ပိုမိုအားကောင်းသော်လည်း, ဧရိယာ 12l ထက်ဆက်သွယ်မှု၏ယေဘုယျအားဖြင့်အားနည်းအဆင့်ဆင့်ကိုပြသ။
ကွဲပြားခြားနားသော amygdala subnuclei ၏အရေအတွက်ကို PFC input ကိုလက်ခံရရှိသည်။ အဆိုပါ Basal နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း Basal နှင့် medial အရေးပါသည့်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဗဟိုနှင့် cortical အရေးပါ PFC စီမံချက်များခံယူစဉ်အခါ, densest စီမံချက်များခံယူအဖြစ် PFC တိုင်းဒေသကြီးများ၏အကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းထဲကနေစီမံချက်များလက်ခံရရှိ, ဒါပေမယ့်တစ်လျော့နည်းသိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့် level မှာ (Stefanacci & Amaral, 2002) ။ BA ဘွဲ့ 25 သတိပြုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ကြောင့် amygdala ဖို့ densest စီမံချက်များပို့ပေးမသာသော subnucleus အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်တိုင်း amygdala BA ဘွဲ့ 25 ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိကြောင့်လည်း, အရေးပါ၏အကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းရန်စီမံချက်များပေးပို့သည်။ ၏ကော်လံ B ကိုအတွက်အလင်းကဲ့သို့ထင်ရှားကျော်ကြားသောပေမယ့် ပုံ 6ဒါကြောင့် BA ဘွဲ့ 32 အဆိုပါ amygdala မှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းမွန်စွာဖော်ပြထားစီမံချက်များပေးပါဘူးသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ များစွာသောအရိုအသေခုနှစ်တွင် BA32 (ကြွက်များတွင် prelimbic cortex မှ homologous ပေါ်လာသောစျေး, 2006a) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ basolateral နှင့်ဗဟိုနျူကလိယ၏ဝေမျှဖို့ကြွက်, prelimbic cortex စီမံကိန်းများတွင် (Vertes, 2004) ။ nonhuman မျောက်ဝံများခုနှစ်, စီမံချက်များကိုလည်း (ထိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Basal နျူကလိယတစ်ဦး discrete သောအဘို့ကိုမှ BA ဘွဲ့ 32 ကနေလေ့လာတွေ့ရှိပြီChiba et al ။ , 2001) ။ BA ဘွဲ့ 25 ထံမှစီမံကိန်းထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်, BA ဘွဲ့ 32 ရွေးချယ် amygdalar ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်အနေအထားထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ PFC ၏ Amygdala လက်ခံရရှိသူဒေသများ။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းဟာ Basal နျူကလိယ, ဆက်စပ်ပစ္စည်း Basal, medial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala အရေးပါ၏ဝေမျှအတွက်ထိုးဆေးအောက်ပါမျိုးစုံသဲလွန်စလေ့လာမှုများကနေပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ မီးခိုးရောင်အတွက်ဒေသများသိသိသာသာ input ကိုလက်ခံရရှိ ...
Barbas နှင့် Zikopoulos (2006) အဆိုပါ amygdala ဖို့ medial prefrontal နှင့် OFC လက်ငင်း amygdalar လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါငြင်းခုန်။ အဆိုပါ medial မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် BA25 အလှည့်အတွက် hypothalamus မှ excitatory စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုးပေးသော amygdala ၏ basolateral ဝေမျှဖို့အထူးသဖြင့်ကြံ့ခိုင် excitatory output ကိုပေးပါသည်။ ဆနျ့ကငျြ, OFC agranular အဆိုပါ posterior သိသိသာသာအဆိုပါ Basal နျူကလိယ (ကိုကြည့်ပါဝန်းရံသော intercalated ထု innervates သဖန်းသီး။ 7) ။ အဆိုပါ intercalated ထုဗဟိုနျူကလိယသို့တစ်ဦး inhibitory input ကိုပေး။ နှိုးဆွသောအခါ, intercalated ထုအရှင် hypothalamus တစ် disinhibition ဖြစ်စေတဲ့, ဗဟိုနျူကလိယမှအ hypothalamus တစ်ဦးလုပ်သူများ inhibitory လမ်းကြောင်းရပ်တန့်။ ပိုမိုပေါ့ပါး excitatory စီမံချက်များလည်း, ထို posterior OFC ကနေတိုက်ရိုက်အလယ်ပိုင်းနျူကလိယကိုရောက်ရှိနှစ်ဦးစလုံးတိုးဖို့ OFC ခွင့်ပြုသို့မဟုတ် Central နျူကလိယပစ်ခတ်ရန်လျော့ကျသွားသည်။
A) ကို PFC သို့ Amygdala input ကို; အဆိုပါ amygdala မှခ) Prefrontal output ကို; နှင့် C) output ကို vs. ထံမှ amygdala မှ input ကို၏အချိုး။ ကိန်းဂဏန်းများအားဖြင့်တံဆိပ်ကပ်သိပ်သည်းဆလေ့လာမှုများကနေရယူထားခြင်း Ghashghaei et al ။ (2007)။ Projection သိပ်သည်းဆနှင့်အချိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပေါ်ပြသနေကြတယ်, ...
အဆိုပါ hypothalamus နှင့် brainstem မှ Prefrontal စီမံချက်များ
အဆိုပါ OFC ဒေသများတွင်နှင့် hypothalamus နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ brainstem / periaqueductal မီးခိုးရောင်ဒေသများ (ရန် amygdala လည်းပုံမှန်အားဖြင့်စီမံကိန်းစီမံချက်များပိုင်ဆိုင် PFC medialတစ်ဦး et al ။ , 1998; Barbas et al ။ , 2003; စျေး, 2006b; Rempel-Clower & Barbas, 1998), (ကြည့်ရှုစိတ်ခံစားမှုကို output နဲ့ဆက်စပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ effector ဒေသများတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့တိုက်ရိုက်နိုင်စွမ်းပေး ပုံ 8) ။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေပိုပြီး medial မြို့ရိုးကိုအဆောက်အဦများအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့ပေါ်လာပေမယ့်လည်း amygdalar input ကိုသိသိသာသာပင်ဖြစ်သည်ရှိရာ Orbital မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဧရိယာတူလခြမ်းအထဲကပေါ်ထွန်း။ အဆိုပါ amygdala တိုက်ရိုက် access ကို၎င်း၏မရှိခြင်းနှင့်အတူသကဲ့သို့, DLPFC နှင့်လက်ဗွေဤဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်စီမံကိန်းများအကြီးအကျယ်ကငျးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ OFC ပို anterior ဝေမျှသည်ဤကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစင်တာများအနည်းငယ်သာတိုက်ရိုက် output ကိုပြသပါ။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများမှ amygdalar output ကိုပြောင်းလဲပစ်ဘို့ Prefrontal Pathways ။ (ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အဆင်ပြေအောင်Barbas & Zikopoulos, 2006) ။ အဆိုပါ intercalated ထုဖို့ excitatory OFC Project (IM) (လမ်းကြောင်းကိုက) hypothalamus ၏ disinhibition မှဦးဆောင် ...
အဆိုပါ PFC အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းနှစ်ခုအဓိက phylogenetic ခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသ၏အမြင့်ဆုံးဆက်သွယ်မှုအတူတူလမ်းကြောင်းသစ်အတွင်းဒေသများ, ကွာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ဧရိယာကနေမပိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဦးစင်မြင့်ထက်ဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်အိမ်နီးချင်းဒေသများနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်အဘို့, posterior OFC အတွက် agranular နောက်ကျနေခဲ့သည်ဒေသများသည်အခြား agranular နှင့် dysgranular Orbital ဒေသများမှသိသိသာသာဆက်သွယ်မှုရှိသည်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဖြတ်ပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းသစ်, ဒါမှမဟုတ် dorsal ဧရိယာ 46 အတွင်းထိုကဲ့သို့သော ventral ဧရိယာ 46 အဖြစ် isocortical ဒေသများတွင်ဆက်သွယ်မှုမှုရှိပါတယ်။ ဘယ်မှာအကြားလမ်းကြောင်းသစ်ဆက်သွယ်မှုသူတို့ယေဘုယျအားဖြင့် architectonic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးထက်ပိုဇာတ်စင်ခုန်ကြဘူးပေါ်ထွန်း။ ဥပမာ, isocortical ventral ဧရိယာ 46 ပြင်းထန်စွာ mediodorsal လမ်းကြောင်းသစ်အတွက် isocortical dorsal ဧရိယာ 46 နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော subgenual cingulate (BA 25) အဖြစ်ကပိုညံ့ဖျင်းဖွံ့ဖြိုး medial မြို့ရိုးကိုဒေသများသို့မချိတ်ဆက်ထားဘူး။ ပိုများသော anterior နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC ဒေသများ ventral ဧရိယာ 46 နှင့်အိမ်နီးချင်းဧရိယာ 45 နှင့်အတူများပြားလှသောဆက်သွယ်မှုအပိုင်, ဒါပေမယ့်ဧရိယာ 46 ၏ dorsal တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှကျောင်းအုပ်ကြီး sulcus ခုန်ကြောင်းဆက်သွယ်မှုအများကြီးအလွန်ရှားပါးတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအများအပြား OFC ဒေသများအတွက် DLPFC နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုအပိုင်ပေါ်လာပါဘူး။ အထူးသဒေသများ 11m, 12o, 13a နှင့် 14r စီ DLPFC နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုဝင်စား။ ယင်း၏ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအကြားလမ်းကြောင်းသစ်ခုန်ကိုယ်စားပြုကြပါဘူးဒါကြောင့် (ဧရိယာ 14r ပါဝင်သော) ကို gyrus rectus, အ mediodorsal လမ်းကြောင်းသစ်၏ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သို့မဟုတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကြားတစ်ဦးသငြ်ကူးေူပာင်းမြဧရိယာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဒေသများ 11m, 12o နှင့် 13a အဆိုပါ basoventral လမ်းကြောင်းသစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့, ဒါကြောင့် DLPFC နှင့်အတူ၎င်းတို့၏လင့်များအချင်းချင်းလမ်းကြောင်းသစ်ဆက်သွယ်မှုကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ ဤဒေသများ၏အကြီးစားကွန်ယက်ကိုအနေအထားကိုနားလည်ရန်, က Orbital နှင့် medial ဒေသများခွဲခြားတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ system ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အသုံးဝင်သည်။ အဲဒီအစား phylogeny အပေါ်မော်ဒယ်များအခွခေံထက်, Carmichael နှင့်စျေးနှုန်း (1996) (ကြည့်ရှုပါတစ်ဦး Orbital နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြားဆက်သွယ်မှု၏ခွန်အားအပေါ်တင်းကြပ်စွာအခြေစိုက် medial ကွန်ယက်ကိုစ OFC နှင့် medial မြို့ရိုးကိုဝေယူ သဖန်းသီး။ 9) ။ အမျိုးအစားအစီအစဉ်၏ဤမျိုးပြီးသားဆွေးနွေးတင်ပြဆက်သွယ်မှု၏အဖွဲ့အစည်းပေးထားအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရာ basoventral နှင့် mediodorsal ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကြား phyolgenetic ကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူများပြားလှသောထပ်နေသည်ကိုပြသထားတယ်။ သို့သော်နှစ်ခုခွဲခြားစနစ်များကိုလုံးဝပြောရလျှင်မရှိကြပေ။ စိတ်ဝင်စားစရာ DLPFC ကိုချိတ်ဆက်သော Orbital ဒေသများအပေါငျးတို့သ Carmichael နှင့်စျေးဖွင့် medial ကွန်ယက်ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ရက်များအကြားကြားခံအဖြစ်ယူဆနေကြသည်။ က OFC ၏ကျန်နှင့်အတူထက် medial မြို့ရိုးအဒေသများနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးသောကြောင့်, ဥပမာ, ဧရိယာ 11m တစ် medial ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းစဉ်းစားသည်။ သူတို့ medial နှင့် Orbital နှစ်ဦးစလုံးဒေသများသို့မိုးသည်းထန်စွာဆက်သွယ်မှုဆံ့သောကွောငျ့ Carmichael နှင့်စျေး interface ကိုတိုင်းဒေသကြီးများအဖြစ်ဒေသများ 12o နှင့် 13a ခွဲခြား။ ဆက်သွယ်မှုဤ differential ကိုပုံစံများကိုအခြား prefrontal ဒေသများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ OFC များ၏စွမ်းရည်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ငျဒသေကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်မှတ်သားပါလိမ့်မည်ကွောငျးထငျရှားပါစေ။ အခြားအ Orbital ဒေသများသည်ဤတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကင်းမဲ့သော်လည်းအထူးသ, အ gyrus rectus အဖြစ် 11m, 12o နှင့် 13a တစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံး medial မြို့ရိုးအဒေသများ (ဥပမာပု cingulate) နဲ့ဆက်ဆံဖို့အနေအထားနှင့် DLPFC ဒေသများ၌ရှိကြ၏။
Orbital နှင့် Medial ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များစျေးနှုန်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အဆင်ပြေအောင်စျေး, 2006b) ။ ဒေတာပိုပြီး dorsolateral ဒေသများပြသသောညွှန်ပြပေမယ့်စျေး, ဤကွန်ရက်မှာ dorsal နှင့် ventral ဧရိယာ 46 မပါဝင်ပါဘူးမှတ်ချက် ...
Prefrontal ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုပု amygdala ဖို့လမ်းကြောင်း dictate
အဆိုပါ amygdala ဖို့ခိုင်မာတဲ့တိုက်ရိုက် output ကိုချို့တဲ့သောဒေသများတွင်အဘို့, amygdalar အပြောင်းအလဲနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအပေါ်အားကိုးရမယ်, ဤလမ်းကြောင်းအကြီးအကျယ်အဓိက prefrontal ကွန်ရက်များအတွင်းသူတို့၏အနေအထားကိုအားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာလိမ့်မည်။ အဆိုပါ amygdala ဖို့ subgenual cingulate ရဲ့ (BA 25) ပရိုဂျက်၏ခွန်အားပေးသောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော PFC ဒေသများအတွက် amygdala ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရာမှတဆင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသော relay ကိုပေးလိမ့်မည်။ ကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် ပုံ 9, BA ဘွဲ့ 25 အဆိုပါ medial ကွန်ယက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်သော Orbital မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် medial ကွန်ယက်ကိုဒေသများနှင့်ဒေသများထံမှသိသိသာသာစီမံချက်များလက်ခံ၏။ ဆနျ့ကငျြ, ပို dorsolateral စီမံချက်များအဘိုးထိုက်ဖြစ်ကြသည်။ Vogt နဲ့ Pandya (1987) BA ဘွဲ့ 25 အဆိုပါ DLPFC ထံမှစီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသတိပြုပါနှင့်အထူးသ DLPFC ၏သာလွန်သောအဘို့ကိုအတွက်ဧရိယာ9ဆီက input ကိုဖော်ပြရန်။ သို့သျောလညျး, ဒီကွန်နက်ရှင်၏ခွန်အားအားနည်းနေပုံရသည်နှင့်ရှင်းလင်းစွာ (အချို့လေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်ရသေးBarbas & Pandya, 1989) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, BA ဘွဲ့9(အလှည့်များတွင် BA ဘွဲ့ 32 နှင့်အတူအကြီးအကျယ်ချိတ်ဆက်သော medial နံရံတစ်လျှောက်တွင် BA ဘွဲ့ 25 နှင့်အတူကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါသည်Carmichael & စျေး, 1996; Barbas & Pandya, 1989) နှင့်အရှင် BA ဘွဲ့ 25 သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ DLPFC အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဖြစ်နိုင်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းပေးသည်။ အလားတူပင် dorsal BA ဘွဲ့ 46 BA ဘွဲ့ 25 နှင့်အတူများပြားလှသောဆက်သွယ်မှုကင်းမဲ့နှင့်ဖွယ်ရှိ BA ဘွဲ့ 32 ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ် cingulate cortex ၏ဖြစ်ကောင်းသည်အခြားဝေမျှ, BA ဘွဲ့ 25 နှငျ့ဆကျသှယျနိုင်ရန်အတွက်ပေသည်။
အဆိုပါ dorsal ACC (BA 24) ကိုလည်း amygdala ဖို့အရေးပါ output ကိုဇုန်ပေးပါသည်။ ဤဒေသ (ထို PFC ကနေသွင်းအားစု၏ကြွယ်ဝသောပုံစံရှိပါတယ်Carmichael & စျေး, 1996; Vogt & Pandya, 1987; Barbas & Pandya, 1989) ။ ဒါကသိသိသာသာအဆိုပါ DLPFC အတွက် BA ဘွဲ့9မှ၎င်း, အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာ BA ဘွဲ့ 46 မှ input ကိုက, medial မြို့ရိုးပေါ်မှာ BA ဘွဲ့ 32 နှင့် BA ဘွဲ့ 10 ၏ဝေမျှနှင့်အတော်ကြာ OFC ဒေသများ (အလယ်အလတ် / အထူးသဖြင့် medial ကွန်ယက်ကိုဒေသများတွင် 13a နှင့် IAI နှင့် 12o ပါဝင်သည် ) ။ ထို့ကြောင့် dorsal ACC မျိုးစုံဒေသများတစ်လျှောက်လည်ပတ် PFC ၏ရှုထောင့်ပေါင်းစည်းဖို့အထူးသဖြင့်ခိုင်မာတဲ့အနေအထားတွင်ပေါ်လာသည်။
ပေမယ့်ပိုပြီး anterior OFC နှင့် VLPFC ဒေသများသည်ဤစီမံချက်များအတော်လေးကျိုးနွံများမှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအ anterior ဒေသများဒါ့အပြင်အဆိုပါ amygdala ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအသုံးချစေခြင်းငှါ, ထို amygdala ဆီက input ထက် amygdala မှအထွက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအချိုးအစားရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ အဆိုပါ anterior OFC ဒေသများအဘို့, ဒီအရှိဆုံးဖွယ်ရှိ OFC ဒေသများ agranular အဆိုပါ posterior မှတဆင့်ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ ဆနျ့ကငျြ, ventrolateral ဒေသများအဘို့, posterior ဧရိယာ 12l အချင်းချင်းအပြန်အလှန် prefrontal နှင့် prefrontal-amygdala ကွန်ရက်များအတွင်းက၎င်း၏ထူးခြားသောအနေအထားပေးထားသည် amygdala ပါဝငျများအတွက်အတော်လေးတိကျတဲ့လမ်းကြောင်းပေးနိုငျသညျ။
4 ။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်
တစ်ဦး cortical ဒေသ၏ cytoarchitectural features တွေသိသိသာသာဒေသတွင်းကတခြားဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ အထူးသအသေးစိတ်မှုနှင့် laminar ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့် feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်စီမံကိန်း၏က၎င်း၏အဆင့် impact (Barbas & Rempel-Clower, 1997; Barbas 2000) ။ Barbas အားဖြင့်တင်ပြမော်ဒယ်အတွင်းမှာပဲ feedforward စီမံချက်များအပေါ်ယံအလွှာကနေဖြစ်ပေါ်လာနှင့် cortex ၏နက်ရှိုင်းသောအလွှာမှထုတ်လုပ်တဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အာရုံခံစနစ်များမှာအပြောင်းအလဲနဲ့စီး၏အစောပိုင်းအဆင့် (feedforward စီမံကိန်း၏ဒီအမျိုးအစားကတဆင့်နောက်ဆက်တွဲအဆင့်ဆင့်မှသတင်းအချက်အလက်များသည်Rockland & Pandya, 1979; Pandya, 1995) ။ သူတို့ (V1 ဖို့ဥပမာအားဖြင့် V2 များအတွက်) ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့စီးအတွက်မြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းတစ်ခုမူလတန်းဒေသကနေရွှေ့ကဲ့သို့သောအာရုံခံစနစ်များအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဆင့်ဆင့်, ပိုင်ဆိုင်စနစ်များအတွင်းမှာပဲ feedforward စီမံချက်များလည်းတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သတင်းအချက်အလက်၏ထိုကဲ့သို့သော forwarding ကိုရိုးရာသိမြင်မှုသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ (က Bottom-Up လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အမျှတံဆိပ်ကပ်ရာနှငျ့တသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Kastner & Ungerleider, 2000).
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, တုံ့ပြန်ချက် Project (တွေ့မြင် cortex ၏အလွှာ superficial မှ cortex နှင့်စီမံကိန်း၏နက်ရှိုင်းသောအလွှာစတင် ပုံ 10) ။ သူတို့နောက်ပိုင်းတွင်မှအအာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့စီး (V2 ဖို့ဥပမာ V1) ၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်သွားရောက်အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း hierarchical ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူအာရုံခံစနစ်များအတွက်ဤတုံ့ပြန်ချက် Project, ဆင်းအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ တုံ့ပြန်ချက်များ (အစောပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့အဆင့်ဖျော်ဖြေခံကွန်ပျူတာပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ဘက်လိုက်မှုမှအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်Raizada & Grossberg, 2003) ။ ပိုင်ရှင်မဲ့တ္ထုမှတုံ့ပြန်မှု attenuating သို့မဟုတ်နှိပ်ကွပ်နေချိန်မှာဥပမာ, ဤတုံ့ပြန်ချက်များ (တက်ရောက်ခဲ့သည်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်တည်နေရာ coding ဆဲလ်များ၏တုံ့ပြန်မှုကိုပေါ်လွင်ကိုကူညီပြုမူထာ et al ။ , 2000; Saalmann et al ။ , 2007) ။ ထိုကဲ့သို့သောပုံ-မြေပြင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု (အဖြစ်ကိုအခြေခံသိမှုဆိုင်ရာအာရုံလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထိုသို့သောတုံ့ပြန်ချက်အကူအညီအထောက်အပံ့များDomijan & Setic, 2008; Roland et al ။ , 2006), အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်စီးအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ဘာထိပ်-Down ထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြု (Grossberg, 2007) ။ သိမြင်မှုအသုံးအနှုန်းများ, ဒီထိပ်တန်း-Down ထိန်းချုပ်မှု (မျှော်လင့်ချက်များ, လက်ရှိပန်းတိုင်များနှင့်ညွှန်ကြားအာရုံစိုက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးအပြောင်းအလဲနဲ့၏မော်ဂျူဘို့ခွင့်ပြုGlibert နှင့် Sigman 2007).
အဆိုပါ PFC ၏တုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward ဆက်သွယ်မှု။ laminar ဇစ်မြစ်နှင့်တာမင်နယ်၏အဓိကပုံစံများအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့် Barbas နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဖော်ပြထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal အဓိကအား (LPFC) "feedforward" စီမံကိန်း ...
သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာဆိုလိုအဖြစ်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည် (ကိုမြင်ရ, အတက်လျက်ရှိနေသည်ကို / ဆင်း၏ဝေါဟာရများ, feedforward / တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် Bottom-Up / အထက်မှအောက်သို့အကြားခွဲခြားရန်အသုံးဝင်သည် ပဲန်နီ et al ။ 2004 ) တစ်ဦးဆွေးနွေးမှုအဘို့။ ကွှနှင့်ဆင်းစီမံချက်များတိကျတဲ့ hierarchical features တွေကိုရည်ညွှန်းလျက်, ဝေါဟာရများကိုကောင်းစွာသတ်မှတ်အပြောင်းအလဲနဲ့စီး၏အခြေအနေတွင်အထူးအသုံးဝင်သည်။ ကျနော်တို့အောက်ခြေ-up, ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏အမြင်အားဖြင့်မောင်းနှင်ကြသည်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ပိုပြီးအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များ, ရည်ညွှန်းနှင့်အထက်မှအောက်သို့ခွင့်ပြုယန္တရားများကိုရည်ညွှန်းအတူအထူးသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုရည်ညွှန်းဖို့အသုံးအနှုန်း Bottom-Up နှင့်ထိပ်တန်း-Down ကိုအသုံးပြုပါ လက်ရှိပန်းတိုင်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူအရတော့ processing ၏ adaptive modulation သည်။ သူတို့စီမံကိန်းများ၏တိကျသော laminar ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်သတ်မှတ်ကြသည်အတိုင်းဤအခြေအနေတွင်စည်းကမ်းချက်များ feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်, Dual အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ features တွေဆိုလို။
တုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward စီမံချက်များ laminar features တွေအားဖြင့်သတ်မှတ်ကြသည်သောကြောင့်, တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့စီးပြင်ပတွင် feedforward သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်အဖြစ်စီမံချက်များ characterizing များအတွက် Barbas နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသုံးပြုတဲ့တိကျတဲ့ laminar စံနှင့် ပတ်သက်. ထမြောက်တော်မူလိမ့်မည်။ ယင်းအမြင်အာရုံစနစ်၏မော်ဒယ်များခုနှစ်, feedforward စီမံချက်များပုံမှန်အားတက်လျက်ရှိနေသည်ကို feedforward စီမံချက်များအပေါ်ယံအလွှာမှာရှိတဲ့ပေါ်ထွက်လာသောနှင့်ပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်နက်ရှိုင်းသောအလွှာဆန့်ကျင်အဖြစ် (အလွှာ IV ရှိရပ်စဲအတူ laminar IV terminal များကိုလည်းသီးခြားစပ်လျဉ်းသတ်မှတ်ကြပါတယ်, Felleman & Van Essen, 1991) ။ ဆနျ့ကငျြ, Barbas အထူးအလွှာ IV နှင့် infragranular အလွှာများအကြားခွဲခြားမထားဘူးတဲ့ကျယ်ပြန့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အသုံးပြုသည်။ ဤ extension အားကြီးသော granular အလွှာနှင့်ဤဒေသများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိပိုမိုပျံ့ laminar ရပ်စဲပုံစံများကင်းမဲ့ကြောင်း prefrontal ဒေသများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပေးထားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ သို့သော်ဤ extension ၏အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေ elucidated ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောပြဿနာတုံ့ပြန်ချက်စီမံကိန်း၏အဓိပ္ပါယ်အတွက်ပေါ်ပေါက်။ တုံ့ပြန်ချက်၏ Barbas ရဲ့အဓိပ်ပါယျ၏မူလအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီ, အပေါ်ယံအလွှာအတွက်နက်ရှိုင်းသော (infragranular) အလွှာများနှင့် Terminal ထဲကနေပေါ်ပေါက်စီမံချက်များအပေါ်သီးသန့်အလေးပေး Rockland နှင့် Pandya (1979)။ သို့သျောလညျး Felleman နှင့်ဗန်အက်ဆင်း (1991) အခြို့သောအပိုဆောင်းဆင်းတုံ့ပြန်ချက်စီမံချက်များ infra- နှင့် supra-granular ဇစ်မြစ်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူ bilaminar ဇစ်မြစ်ရှိစေခြင်းငှါငြင်းခုန်။ Barbas ပိုရှေးရိုးစွဲချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား, ကတည်းကသူမ၏ critieria ၏လက်ခံမှုမဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့ PFC အတွက်တုံ့ပြန်ချက်အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာစီမံကိန်း၏အချိုးအစားပိုမိုလစ်ဘရယ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သုံးပြီးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါဘူး။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်တစ်ဦးဝေဖန်အင်္ဂါရပ်ဒေသများအကြားတုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward စီမံကိန်း၏အဆင့်ကိုသိသိသာသာဒေသ၏ cytoarchitectural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆွေမျိုးဒီဂရီကဆုံးဖြတ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးထူးခြား cortex ကနေ projections (ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုထူးခြားနှင့်သိပ်သည်း granular အလွှာ) လျော့နည်း cytoarchitecturally ဖွံ့ဖြိုး cortex ဟာ feedforward ပုံစံကိုလိုက်နာရန်, cytoarchitecturally ဖွံ့ဖြိုးလျော့နည်းထံမှထိုထက်ပိုသော cytoarchitecturally ဖွံ့ဖြိုးဖို့စဉ် cortex တုံ့ပြန်ချက်အမျိုးမျိုးလိုက်နာပါ။ ဒီပုံစံအာရုံခံစနစ်များတွင်တွေ့မြင်ဘာနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပုံစံမျိုးစုံစနစ်များကိုမှယေဘုယျပုံပေါ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PFC ခုနှစ်, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်တုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward ဆက်သွယ်မှုများ၏ဆွေမျိုးချိန်ခွင်လျှာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်နှစ်ခုဒေသများအကြား cytoarchitectural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခြားနားချက် ( သာ. ပိုပြီးအစွန်းရောက်ဖြစ်လာအတူ feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်စီမံကိန်း၏ချိန်ခွင်လျှာအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80% ခန့်မှန်းBarbas & Rempel-Clower, 1997).
ပစ္စုပ္ပန်ခေါင်းစဉ်ရန်အခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံများ၏အဓိက utility ကိုကပင်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်ဦးနှောက်ဒေသများအကြားဆက်သွယ်ရေး၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ခိုင်မာတဲ့ဟောကိန်းများမှဦးဆောင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဟုတ်ပါတယ်, နောက်ဆုံးမှာ, laminar သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုဆန်းစစ်နိုင်စွမ်း electrophysiological သို့မဟုတ်အခြားနည်းစနစ်ဟာ PFC အတွက်အနာဂတ်ပုံစံများအာရုံခံ cortical တွင်တွေ့မြင်သောအရာကိုမှ function အလားတူဖြစ်ကြောင်း laminar အတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်လိမ့်မည် (ဆိုလိုသည်မှာဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ်တုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward စီမံချက်များနှင့်ဆက်နွယ်နေသော အချက်အလက်များ၏ဆင်တူဂုဏ်သတ္တိများမသက်ဆိုင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စနစ်၏) စီးဆင်း။ ထိုသို့သော electrophysiological လေ့လာမှုများလည်းနောက်ဆုံးမှာဖွဲ့စည်းပုံပုံစံလုပ်ရန် feedfoward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်စီမံချက်များများအတွက်စံမွမ်းမံဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းမှာအခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံ PFC အတွက်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏သဘောသဘာဝခန့်မှန်းဘို့လက်ရှိရရှိနိုင်အင်အားအကောင်းဆုံးခန္ဓာဗေဒအခြေခံပေးပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ် PFC အတွင်းသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကို၎င်း၏စရိုက်လက္ခဏာတွေအတွက်တိကျမှန်ကန်သည်ဆိုပါက, ကစိတ်လှုပ်ရှားမှု-သိမှတ်ခံစားမှု interaction က၏မော်ဒယ်များများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Laminar ပုံစံများနှင့်အခ်ါ prefrontal ဆက်သွယ်မှု
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်နှင့်အတူတသမတ်တည်း, စီမံကိန်း၏ laminar ပုံစံများလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (dysgranular OFC အဆိုပါ PFC ပို cytoarchitecturally ဖွံ့ဖြိုးသောဒေသများနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့တုံ့ပြန်ချက် features တွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းညွှန်ပြBarbas, 2000) ။ အာရုံခံစနစ်များကိုမှနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်, ဒီ OFC စီမံချက်များ computing biasing သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံကိုဦးတည်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုပေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အ eulaminate DLPFC ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဦးနှောက်ဒေသများတွင်၎င်း၏ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ရလဒ်များကိုသို့မဟုတ် output ကိုအစာကျွေးဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ feedforward ပရိုဂျက်၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်များ၏ဤယေဘုယျပုံစံကိုလည်း OFC နှင့် DLPFC အကြားတိကျသောဆက်သွယ်မှုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။ (ထို feedforward ပုံစံကိုက်ညီသောအဆိုပါ OFC မှ lateral prefrontal ဆက်သွယ်မှုအထက် cortical အလွှာ (2-3) တွင်အများအားဖြင့်အစပြုနှင့်၎င်းတို့၏ axon နက်နဲအလွှာ (4-6) တွင်အများစုရပ်ဆိုင်းBarbas & Rempel-Clower, 1997) ။ ဆနျ့ကငျြဘမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC ဖို့ OFC ရဲ့ Project, သူတို့ရဲ့ axon အထက်အလွှာ (5-6) တွင်အများအားဖြင့်ရပ်စဲနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောအလွှာ (1-3) တွင်အဓိကအားတုံ့ပြန်ချက်တစ်ပုံစံဝိသေသအစပြုတာဖြစ်တယ်။ ဒီပုံစံစီမံကိန်းအကြမ်းဖျင်း 70-80% အထိလျှောက်ထားရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အခြားဦးတည်ချက်အတွက်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုအဓိကအားတစ် feedforward ပုံစံညီသော်လည်းထို့ကြောင့် PFC granular ဖို့ OFC မှသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု, တုံ့ပြန်ချက်များအများအားဖြင့်ပါဝင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်အကြားဒေသဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏သဘောသဘာဝ laminar ဆက်သွယ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်အဆိုတင်သွင်းကြောင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်လိုက်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်မှန်ကန်ပါကအကြားဒေသဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏ feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်သဘောသဘာဝမှတက်ရောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC အဓိကအားသို့မဟုတ်သီးသန့်ထိပ်တန်း-Down ယန္တရားများများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှတစ်ဆင့်ပြုမူကြောင်းအပြုသဘောဆောင်ကြောင်းမော်ဒယ်များက၎င်း၏ထင်ရှားသော feedforward features တွေနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ခက်ခဲသည်။ အလားတူပင်ရိုးရှင်းစွာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC မှ (ဆုလာဘ်တန်ဖိုးဥပမာအားဖြင့်များအတွက်) ကွန်ပျူတာ၏ရလဒ်များကိုသယ်ဆောင်အဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်း OFC ၏မော်ဒယ်များ, ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC ထွက်သယ်ဆောင်လျက်ရှိဘက်လိုက်မှုကှနျပြူတာဒေသ၏အလားအလာစွမ်းရည်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရန်ပျက်ကွက်။ သို့သျောလညျး, PFC ဒေသများအကြားအပြန်အလှန်၏လက်ရှိမော်ဒယ်, ဒီဆောင်းပါးအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, နှင့် "သိမြင်မှု" အပြောင်းအလဲနဲ့တသမတ်တည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်များ၏အလားအလာသက်ရောက်မှုတွေကိုလျစ်လျူရှု vs. "စိတ်ခံစားမှု" တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများအကြား။ အမှန်စင်စစ်အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌မော်ဒယ်များပုံမှန်အားဖြင့်အိပ်ရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC functions များ, အထူးသဖြင့် DLPFC functions များ, တည်ဆဲနှင့်ခဲ OFC တူသောလျော့နည်းဖွဲ့စည်းပုံဖွံ့ဖြိုးသောဒေသများတွင်ပိုပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC ဒေသများအပေါ်တစ်ဦးထိပ်တန်း-Down သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုအံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ချေစဉ်းစားပါ။
prefrontal-amygdalar ဆက်သွယ်မှု၏ Laminar ပုံစံများ
OFC cortex အပေါငျးတို့သအလွှာ enervate, ထို့ကြောင့်တင်းကြပ်စွာ feedforward ဖို့ကန့်သတ်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်အမျိုးအစား Project (မဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း posterior ဖို့ amygdala စီမံချက်များGhashghaei et al ။ , 2007) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ laminar စဲပေါ်အခြေခံပြီးကဤစီမံကိန်းအားကြီးသော feedforward အစိတ်အပိုင်းရှိကွောငျးထငျရှားသညျ။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, amygdala ဖို့ OFC ရဲ့စီမံချက်များအဓိကအား (သူတို့ဘက်လိုက်မှု amygdalar အပြောင်းအလဲနဲ့မှပြုမူကြောင်းအကြံပြုထက်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှု၏အာရုံခံဝိသေသလက္ခဏာများအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်) တုံ့ပြန်ချက်စီမံချက်များအဖြစ်သူတို့ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေညွှန်း, အလွှာ5ကနေပျေါပေါ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC ထံမှ feedforward အဆိုပြုချက်များကယင်း amygdala ဖို့ OFC ရဲ့စီမံချက်များပေါ်ထွန်းရာမှအဓိကထွက်ရှိအလွှာဖြစ်သည့် OFC ၏ 5, အလွှာဖို့ညွှန်ကြားနေကြပါတယ်။
ခန္ဓာဗေဒထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို prefrontal လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဆွေးနွေးမှုများအကြောင်းကြားနိုင်ပါသလား? နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်းများစွာကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာများအပြန်အလှန်ထားတဲ့အတွက်ထုံးစံ၌အကျိုးစီးပွားပေါက်ကွဲမှုကိုမျက်မြင်ပါပြီ။ ဤသည်အကျိုးစီးပွားအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မျက်မြင်လက်တွေ့ကျန်းမာလူသားတွေအတွက်ဦးနှောက်ဒေသများအကြားအပြန်အလှန်ဆန်းစစ်နိုင်စွမ်းများကို fMRI နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုဆန်းစစ်ဘို့နည်းစနစ်များပေါ်ပေါက်လာ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအချက်အလက်များ၏ဆွေးနွေးချက်များ, ဤဒေတာအထဲကပေါ်ထွန်းသောမော်ဒယ်များ, အစဉ်မပြတ်ခန္ဓာဗေဒအားဖြင့်သတ်ကြပြီမဟုတ်။ ဤအမော်ဒယ်များ ပို. ပို. သြဇာဖြစ်လာသကဲ့သို့, ငါတို့ကသူတို့အထက်ဖော်ပြထားသည့် neuroanatomy နှင့်အတူ fit ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးဝင်သည်ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များကွဲပြားခြားနားသော cortical နှင့် subcortical ဒေသများနှင့်ဤပုံစံများ၏တုံ့ပြန်ချက် / feedforward သဘောသဘာဝဆက်သွယ်ထားသောလူသိများ connection ပုံစံများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပါတယ်ကယုံကြည်ကြသည်။ မော်ဒယ်ကဤအခက်အခဲမှညီပါဘူးတဲ့အခါသူတို့ကယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ကင်းမဲ့, ဒါမှမဟုတ်နိမ့်ဆုံးမှာသူတို့ကဦးနှောက်၏လူသိများဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မကိုက်ညီပေးထားအလားအလာရှိနိုင်ပါသည်မည်သို့တစ်ဦးရှင်းပြချက်လိုအပ်သည်။
တစ်ဦးကကြီးထွားလာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာပေ "သိမြင်မှု" လုပ်ငန်းစဉ်များ "စိတ်ခံစားမှု" လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရသောထုံးစံနားလည်ရန်ကြိုးစားသည်။ သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအကြားတစ်ဦးအတုသွေးခွဲဖို့နှင့်ကန့်သတ် (ရှိပါတယ်နေစဉ်Pessoa, 2008), အဂုဏ်ထူးထိုကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း, လှုံ့ဆျောမှု, စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုယန္တယား၏ညှနျကွားအဖြစ်အပြုအမူတွေတစ်အကွာအဝေး characterizing အတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြခဲ့သည်။ အတိုင်းလိုက်နာသောကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့ခန္ဓာဗေဒဒေတာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုပေါ်မှာအာရုံစိုက်နှင့်အတူ, memory နဲ့ dorsal-ventral prefrontal interaction ကအလုပ်လုပ်ကိုင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများအတွက်ထွန်းသစ်စအချက်အလက်များနှင့်မော်ဒယ်များကိုဖော်ပြရန်။ ဒီစာပေ ပို. ပို. psychopathology နှင့် psychotherapeutic ကုသမှုဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကိန်းဂဏန်းများအဖြစ်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်, ထိုစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းစာပေအာရုံစိုက်ပါ။
5 ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းဥပဒေ
စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း (အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုစတင်ခြင်း, ကြာချိန်, ပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးစုစုပေါင်း, 1998; စုစုပေါင်း, 2008) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်များသူတို့အားဖြစ်စဉ်များမှ, ထိုကဲ့သို့သောအခွအေနေရွေးချယ်ရေးအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ်ပေါက်မတိုင်မီရှည်လျားယူလုပ်ရပ်များမှအထိမယ့်ကြိုတင်အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်စေစေ့စပ် (ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကိုဖြန့်ကျက်သို့မဟုတ်သိမြင် reappraisal အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်နေပြီစုစုပေါင်း, 1998) ။ ဒါဟာသိမြင်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်လာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်သူတို့နှင့်အတူဆက်စပ်ဒေသများအကြားဆက်ဆံရေးသို့ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမဟာဗျူဟာ၏ဤအဆုံးစွန်သောအမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်စေလုံးလုံးလြားလြားသို့မဟုတ်အတိအလင်းဒါတွေကအထက်မှအောက်သို့၏ဖြန့်ကျက်အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းကိုဖော်ပြရန်ဆင်း Bottom-Up ကိုထိန်းညှိဖို့ PFC ၏ '' အအေး '' မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်ဒေသများတွင်ယင်း amygdala ကဲ့သို့ subcortical limbic ဒေသများတွင်ပါဝင်သော '' ပူ '' ဓာတ်ပြုဖြစ်စဉ်များ။ အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးယန္တရားများသို့မဟုတ် overactive Bottom-Up amygdala ဖြစ်စဉ်များ psychopathology အတော်ကြာပုံစံများကိုအထောက်အကူပြုဖို့အဆိုပြုထားပြီ PFC ၏အောင်မြင်သောဖြန့်ကျက် (များတွင်အောင်မြင်မှုများRottenberg & စုစုပေါင်း, 2003; Rottenberg & Johnson, 2007).
အဆိုပါ neuroimaging စာပေများတွင်အများဆုံးအာရုံစိုက်မှုလက်ခံရရှိကြောင်းအဆိုပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာသိမြင် reappraisal ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာသိမြင်မှု (အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်စိတ်ခံစားမှုသတင်းအချက်အလက် reinterpreting ပါဝငျစုစုပေါင်း, 1998) ။ Reappraisal ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ကျယ်ပြန့်လူတန်းစားလွှမ်းခြုံ။ ဥပမာ, reappraisal ပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း Self-သက်ဆိုင်ရာအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္တုများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဓိပ္ပာယ်ကို၏အဓိပ္ပာယ်အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တစ်ဦး reappraisal အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲအကြောင်းမရှိ, အကျိုးဆက်, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏လက်တွေ့ဘဝ reinterpreting အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်လုံခြုံစွာသွားအဖြစ်အပျက်ကနေလမ်းလျှောက်အားလုံးပါတီများနှင့်အတူအဆုံးသတ်အဖြစ်လမ်းဘက်မှာနေတဲ့ကားတစ်စီးမတော်တဆမှု reappraise နိုင်ဘူး။ အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုတစ်ဦးကအရေအတွက်အားယခု reappraisal တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြခြင်း, စာရင်းဝင်နေကြတယ် စားပွဲတင် 1အတွက်ပြသ PFC Active ၏တည်နေရာနှင့်အတူ ပုံ 11။ သော့ချက်စကားလုံးများကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း, အာရုံနှင့် reappraisal အသုံးပြုခြင်း, မိမိဆန္ဒအလျောက်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းတိုင်းတာပင်ကိုယ်မူလဆောင်းပါးများပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား fMRI လေ့လာမှုများ Non-လက်တွေ့လူဦးရေအတွက်ညွှန်ကြားသိမြင် reappraisal, စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်မှုများနှင့်အာရုံလေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းလေ့လာမှုများဒီစာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ, ဥပမာအားဖြင့်ကစိတ်ဓါတ်များစည်းမျဉ်းများကဲ့သို့ related သဘောတရားများမပါဝင်ပါဘူး။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဇယားအတွက်ကျနော်တို့ကမူလစာတမ်းများ၏စာရေးဆရာများအသုံးပြုတဲ့ nomenclature (လျှောက်ထား Brodmann တံဆိပ်များ, သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာ / မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဖော်ပြချက်) ထိန်းသိမ်းထားပြီသတိပြုပါ။ မေးခွန်းများကိုတံဆိပ်များ၏တိကျသောလျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြီးပြင်းနိုင်ပေမယ့်တစ်ဦးထုတ်ဝေခဲ့သည် "ရွှေကိုစံ" အများဆုံး prefrontal ဒေသများအဘို့အမှုစနစ်ကိုသြဒိနိတ်ချို့တဲ့ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်စာသားထဲမှာကျနော်တို့အထူး VLPFC Active မှတ်သားသောချွင်းချက်နှင့်အတူတံဆိပ်များ, ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြပြီမဟုတ်ရှိရာအချို့ကိစ္စရှိပါတယ် BA ဘွဲ့ 47 / 12 ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်း။ လူသားများတွင်သိသာထင်ရှားသော amygdala ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ BA ဘွဲ့ 47 / 12 ၏အဘို့ကိုတစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းမချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်ကျနော်တို့ယေဘုယျအား posterior BA ဘွဲ့ 32 / 47 ကိုယ်စားပြုအဖြစ်က y = 12 မှ posterior ကြောင်းယင်းဒေသ၏အဘို့ကိုစဉ်းစားပါ။ OFC foci BA ဘွဲ့ 13 (မသက်ဆိုင်၎င်းတို့၏မူလသတ်မှတ်ရေး၏) ၏တည်နေရာနှင့်ကိုက်ညီသောအခါကျွန်ုပ်တို့လည်းစာသားထဲမှာညွှန်ပြ။
အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု၏စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း activated ဒေသများ။ အဆိုပါစိမ်းပြာရောင်အမှတ်အသားများကိုပိုမို non-စညျးမဉျြးစညျးကမျးအခွအေနေထက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျော့ချဖို့ reappraisal အတွက်စေ့စပ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်ကိုသြဒီနိတ်၏မျက်နှာပြင်ပြန်ဆိုဖြစ်ကြသည်။ အပြာရောင်အမှတ်အသားများကိုသြဒီနိတ်များမှာ ...
Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေစဉ်အတွင်းစုဆောင်း Prefrontal နေရာများ
reappraisal လေ့လာနေဘို့အသုံးအများဆုံးပါရာဒိုင်း Eippert et (အဓိကအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာ valenced အလွန်နှိုးဆွသော, ငြိမ်ပုံရိပ်တွေ (ဥပမာ, ဖြတ်တောက်မှု, ချေမှုန်းရေး, ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းနှင့်ကျင်ကြီးစွန်) ကြည့်ရှုရန်သင်တန်းသားများကိုမေးတယ်နှင့် passive ကြည့်ဘို့ cued စမ်းသပ်မှုတွေသိမြင် reappraisal များအတွက် cued စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းအာရုံကြော activation နှိုင်းယှဉ် အယ်လ်, 2006 ။ ကင်မ် et al ။ , 2007; Ochsner et al ။ , 2002; Ochsner et al ။ , 2004; ဖန် et al ။ , 2005; Urry et al ။ , 2006; ဗန် Reekum et al ။ , 2007) ။ လေ့လာဖို့လေ့လာမှုကနေ reappraisal ညွှန်ကြားချက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတွက်မူကွဲရှိပါတယ်နေစဉ်, သူတို့တသမတ်တည်းအဓိပ္ပာယ်ကိုအကြောင်းမရှိ, အကျိုးဆက်ဒါမှမဟုတ် reappraisal စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းပုံရိပ်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအရေးပါမှု၏အသစ်တစ်ခုအနက်ကိုဖန်တီးရန်သင်တန်းသားများကိုလိုအပ်သည်။ အနုတ်လက္ခဏာပုံရိပ်တွေကိုစည်းကမ်းတကြည့်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် Reappraisal နှစ်နိုင်ငံ DLPFC နှင့် VLPFC (မကြာခဏပိုပြီးအကြီးအကျယ်လက်ဝဲဘက်) အပါအဝင် PFC ၏ကျယ်ပြန့်ဒေသများ, စုဆောင်းလေ့ကျင့်လျက်, dorsal ACC ၏ဒေသများနှင့် / သို့မဟုတ် reappraisal ၏သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရှုထောင့် supporting အဖြစ် PFC medial ။ ပုံ 11 အထက်ပါကိုးကားလေ့လာမှုများကနေ reappraisal related Active (စိမ်းပြာရောင်အဆိုး valenced လှုံ့ဆော်မှုလျော့ကျလာများအတွက်အမှတ်အသားများနှင့်အပြုသဘောနှိုးဆွသောလှုံ့ဆော်မှုလျော့ကျလာများအတွက်အဝါရောင်) ၏တည်နေရာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဆက်စပ်ပါရာဒိုင်းအစားငြိမ်ပုံပြောင်းလဲနေသောရုပ်ရှင်ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုသည်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများကိုလည်းသိမြင် reappraisal စဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံ DLPFC ၏စုဆောင်းမှုကိုသရုပ်ပြပေမယ် ACC ၏ဒေသများနှင့် PFC medial ဒါ့အပြင် (ဝမ်းနည်းမှု, ရွံရှာသို့မဟုတ်လိင်စိတ်နိုးထလျော့ချဖို့စုဆောင်းနေကြသည်ရှိမရှိအဖြစ်ကွဲပြားBeauregard et al ။ , 2001; Goldin et al ။ , 2008; Levesque et al ။ , 2003, 2004).
ငြိမ်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်စေပုံရိပ်တွေအသုံးချဖို့အများအပြား reappraisal လေ့လာမှုများမှာတော့ amygdala လျှောက်လျော့နည်းအချို့လေ့လာမှုများ (ထဲမှာ insula စုဆောင်းမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာ valence နှင့် arousal အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု proxy ကိုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်Goldin et al ။ , 2008; Levesque et al ။ , 2003; Ochsner et al ။ , 2002; 2004; ဖန် et al ။ , 2005) ။ ကျနော်တို့ကိုထိခိုက်အပျက်သဘောနှင့်အတူ amygdalar လှုပ်ရှားမှု၏ရိုးရှင်းညီမျှခြင်း 1) က amygdala အနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်အခြေအနေများတွင်တက်ကြွစွာဖြစ်လာသည်နှင့် 2) အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အတွေ့အကြုံများဟာ amygdala ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်ကြောင်း cortical နှင့် subcortical အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်ကြောင်းပေးထား, ပြဿနာကြောင်းသတိပြုပါ။ သို့သော်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် interaction က၌အကြှနျုပျတို့၏အကျိုးစီးပွားပေးထားသည် amygdalar လှုပ်ရှားမှုများ၏ဆင်း-စည်းမျဉ်းမသက်ဆိုင်အနုတ်လက္ခဏာကိုအကျိုးသက်ရောက်နှင့်အတူ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေပါသည်သောအတိုင်းအတာ၏ prefrontal-limbic interaction ကတိုင်းတာများအတွက်အသုံးဝင်သောအညွှန်းကိန်းပေးပါသည်။ နှိမ့်ချအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ထိန်းညှိဖို့ reappraisal အသုံးချဖို့အခါလေ့လာမှုများအများစုဟာ, လက်ဝဲ amygdala အတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်မကြာခဏနှစ်နိုင်ငံ amygdalae ရှာပါ။ လေ့လာမှုတစ်ခုသာစုံတွဲအပြုသဘော valenced လှုံ့ဆော်မှု၏ reappraisal ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ reappraise သို့မဟုတ်ဆင်းအပြုသဘောသို့မဟုတ်လိင်လှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွထိန်းညှိဖို့တောင်းသောအခါ, လှုံ့ဆော်မှုခွင့် amygdala ကို Activation အဆင့် (လျော့နည်းသွားBeauregard et al ။ , 2001; Kim & Hamann, 2007) ။ ဤသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများ၏နောက်ပိုင်းတွင်မှအဖြစ်ထင်ကြေးမြှင့်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့် amygdala အကြာတွင်နှင့်တရားဝင်အပြန်အလှန်အဘို့စမ်းသပ်ချို့တဲ့နေကြသည်လေ့လာနေလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာဖြစ်စေသဘာဝထံမှသို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့အတိတ်ထဲကနေဖြစ်စေအပြုသဘောသို့မဟုတ်ပွော့ပုံရိပ်တွေကိုသတိရအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အစားထိုးရန်သို့မဟုတ်တန်ပြန်ရန်ယူလာပါဝငျသညျ။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက် (စိတ်ဓါတ်များ incongruent အမှတ်တရများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုပြန်ခေါ်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်လျော့နည်းစေကြောင်းသရုပ်ပြErber & Erber, 1994; Joormann, Seimer & Gotlib, 2007; Parrott & Sabini, 1990; Rusting & DeHart, 2000) ။ နှစျခု neuroimaging လေ့လာမှုများတဦးတည်းရဲ့ထိတ်လန့်များ၏စည်းကမ်းတမျှော်လင့်နေတဲ့ငြိမ်သက်ပုံသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်သတိရခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်စေထိန်းညှိနှိုင်းယှဉ်။ Kalisch နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2005) သူတို့အားစမ်းသပ်မှုတွေသို့မဟုတ်မအပေါ်ထိတ်လန့်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခဲ့သည်ရှိမရှိညွှန်ပြတန်ချိန်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေ cued ။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့သင်တန်းသားများကိုစိုးရိမ်ပူပန်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထံမှ detach အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဖော်ထုတ်အထူးအရပျစဉ်းစားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ non-စည်းမျဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်။ နှင့်စည်းမျဉ်းစိုးရိမ်စိတ်များရှိနေခြင်းအတွက် medial PFC နှင့် rostral ACC (-42, 48, 18) ၏ဒေသများတွင်စုဆောင်း: Roi စည်းမျဉ်းများဤပုံစံကိုညာဘက် anterolateral တိုကျရိုကျ cortex (4, 46, 28 MNI) ၏ဒေသစုဆောင်းကွောငျးဖျောပွခဲ့လေ့လာဆန်းစစ်။ အလားတူလေ့လာမှု၌, Delgado နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2008b) ဖြစ်နိုင်သမျှသောထိတ်လန့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေသတ်မှတ်ပေးဖို့အရောင်လုပ်ကွက်သုံးခြင်းနှင့်သဘာဝနှစ်ခု Pre-ဖော်ထုတ်သောနေရာများထဲကတစ်ခုသတိရခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်သူတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုထိန်းညှိရန်သင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ရွယ်စိတ်ကိုသဘာပုံရိပ်တွေဖို့တောင်းဆိုထိတ်လန့်ထားချက်အရတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်အလယ်တိုကျရိုကျ gyrus (-43, 28, 30 Talairach) စုဆောင်းလေ့ကျင့်ကြောင်းပြသလေ့လာဆန်းစစ်။ အရာများ၏လွှဲခွင်စည်းမျဉ်းအောင်မြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုလည်း ventral medial နံရံနဲ့ subgenual cingulate (; -32 3, -36 နှင့် BA ဘွဲ့ 8; BA ဘွဲ့ 25 0, 14, -11) တွင် activation အတွက်ရလဒ်မျိုးသုဉ်းနှင့်အတူစာရေးသူထောက်ပြဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ရာ, (Phelps et al ။ , 2004) နှင့်လက်ဝဲ amygdalar လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းစေပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေနှစ်ခုစလုံးအလားတူ Paradigm employ နေစဉ်, ROIs ၏ရွေးချယ်မှုနှင့် phasic သက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်လုပ်သူများ၏မော်ဒယ်အပါအဝင်၎င်းတို့၏သရုပ်ခွဲချဉ်းကပ်နိုင်သမျှအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေနှင့်ဆက်စပ်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတန်ပြန်ရန်အပြုသဘောသို့မဟုတ်ပွော့ပုံရိပ်တွေအပေါ်သို့ဆွဲဘို့အစီရင်ခံဒေသများအတွက်ကွဲပြားမှုအချို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည် ထိတ်လန့်။
ကြိုတင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာဆင်တူ, အာရုံတဦးတည်းရဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကြားနေနှင့်ဆီလျှော်သတင်းအချက်အလက်ကိုကိုင်ပြီးပါဝငျသညျ။ အမူအကျင့်သုတေသနအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားအနုတ်လက္ခဏာ dysphoric နှင့် nondysphoric တစ်ဦးချင်းစီ (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေလျော့ကျကွောငျးဖျောပွသFennell, Teasdale, Jones, & Damle, 1987; Lyubomirsky, ဝဲလ်နှင့် Nolen-Hoeksema, 1998; Teasdale & Rezin, 1978) ။ ခံစားချက် incongruent သိမြင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုတက်ယူပြီးအသုံးပြုပုံခံစားချက်အရတော့အတှေး (အာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းမြစ်များဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှုမှကာကွယ်နေကြပါတယ်Siemer, 2005) ။ အာရုံ၏ Neuroimaging လေ့လာမှုများနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော Paradigm အသုံးပြုသွားမည်ပါပြီ။ အားဖြင့်အလုပ်, ပထမဦးဆုံး Kalisch et al ။ (2006), အစားပါဝင်သူတစ်ဦးသာယာသောသို့မဟုတ်လုံခြုံမှတ်ဉာဏ်မှတ်မိရှိခြင်း၏, ထိုပါဝင်သူဖြစ်နိုင်ချေထိတ်လန့်ထက်အခြားဘာမှမစဉ်းစားရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည့်အတွက်ပွင့်လင်းအာရုံညွှန်ကြားချက်ရှိခဲ့သည် မှလွဲ. စျေးမှာပါရာဒိုင်းတွေရဲ့မျှော်လင့်, အသုံးပြုသွားမည်။ သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူမျှမအာရုံစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံမှညွှန်ကြားခဲ့သည်ရသောစမ်းသပ်မှုများတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာဖွစျကွောငျး: (-56, 30, 22 MNI) ဤပါရာဒိုင်းလက်ဝဲ PFC တစ်ဒေသဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအာရုံပါရာဒိုင်းအနှုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်ကြားနေငြိမ်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုပြီးတော့ပုံထဲက offset အောက်ပါနေစဉ်ပါဝင်သူအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာစာလုံးတစ်ခုစီးရီးရရှိထားသူရသောတစ်ဦးတာဝန်ပေးအပ်အာရုံတာဝန် (Sternberg အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်) တစ်ခုတည်းစာတစ်စောင်၌ရှိ၏ရှိမရှိတုံ့ပြန်ရန်ရှိပြီးပါဝင် သူတို့စိတျထဲမှာကိုင်ထားခဲ့အစုံ။ McRae et al ။ -2009, 6,6နှင့် -10, -62; BA56: passive ကြည့်ရှုဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါကအနုတ်လက္ခဏာဆလိုက်ကြည့်ရှုနေစဉ်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ် task ထဲမှာပါဝငျလက်ဝဲနှင့်လက်ယာသာလွန်ခြင်းနှင့်အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ gyri (MNI အတွက် BOLD တုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးကြောင်း (4) အစီရင်ခံစာ , 48 နှင့် 48, 42, 32; BA ဘွဲ့ 9; -42, 22, 30 နှင့် 42, 30, 34; BA ဘွဲ့ 10; -36, 62, 12 နှင့် 38, 64, 14) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ညာဘက်ယုတ်ညံ့ PFC (BA47 / 12p; 36, 20, -4) ။
သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအချို့ကိုမျိုးအတွက်စေ့စပ်နှင့် amygdala နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ပြိုင်တည်းလျှောက်လျော့နည်း attributing အကြောင်းကိုသတိထားနေကြသည်ခံအဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းအတိအလင်းပစ္စုပ္ပန် DLPFC ဒေသအတော်များများ neuroimaging အစီရင်ခံစာများ။ ဤအဖြစ်စဉ်များဟာ PFC (အနှံ့ဖြန့်ဝေနေကြသည် foci ထုတ်လုပ်ကတည်းက reappraisal နှင့်အာရုံ၏အမှု၌, ဒီသတိအထူးသဖြင့်မျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံ 11) ။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, cortex ကနေခန္ဓာဗေဒစီမံကိန်း၏ပုံစံ DLPFC ၏ဒေသများထံမှတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း amygdala အပြောင်းအလဲနဲ့၏အားကြီးသောထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC အတွက်အတန်အသင့်သိပ်သည်းစီမံချက်များနှင့်အတူ PFC ဒေသများတွင်သာအထူး BA ဘွဲ့ 47 / 12 ၏ပိုပြီး posterior ဒေသများအတွက် VLPFC ၏သေးငယ်တဲ့အဘို့ကိုမှာတွေ့ရှိရသည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်က amygdala နှင့်အတူဆက်သွယ်မှု၏မေးခွန်းများကိုမှကြွလာသောအခါကံမကောင်းစွာပဲအများစုလေ့လာမှုများ၌ဤဒေသအတွက် Active အစီရင်ခံရန်အသုံးပြုသော nomenclature မရေရာဒွိဟဖန်တီးပေးပါတယ်။ reappraisal ၏လေ့လာမှုများ, အပြုသဘောမှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အာရုံလေ့ (VLPFC ၏အထွေထွေဒေသများတွင် Active သတင်းပို့နှင့် OFC medialEippert et al ။ , 2007; Goldin et al ။ , 2008; Kim & Hamann, 2007; Lieberman et al, 2007 ။ McRae et al, 2009 ။ Ochsner, Ray et al ။ , 2004) ။ အနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်အပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် reappraisal လေ့လာမှုအများအပြား BA ဘွဲ့ 47 / 12 ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် Active သတင်းပို့ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း BA ဘွဲ့ 47 / 12 ကြီးမားတဲ့နှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဧရိယာနှင့်သာ posterior ဖြစ်ပါတယ် BA ဘွဲ့ 47 / 12 ၏ဒေသများတွင်သိသိသာသာ amygdalar စီမံကိန်း၏က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် amygdala အပေါ်တိုက်ရိုက်သိမြင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းကိုခိုင်ခံ့သောထုတ်ပြန်ချက်များ BA ဘွဲ့ 47 / 12 ၏ဤတိကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက် Active ရှိသူများလေ့လာမှုများပိုမိုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါ PFC ၏ Medial ဒေသများတွင်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သော amygdala အဖြစ် subcortical ဒေသများမှအခွင့်ထူးခံ access ကိုရှိခြင်းအဖြစ်ကုသနေကြသည်။ သို့သော် amygdala ဖို့တစ်ခုသို့ဆက်စပ် medial တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုအရသိရသည်သူတို့သာ subgenual cingulate ၏ဒေသများ (BA 25) နှင့် dorsal ACC (BA 24) က amygdala နှင့်အတူသိပ်သည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ သာလေ့လာမှုများအားဖြင့် Delgado နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2008a, 2008bတိုင်းဒေသကြီးများတွင်ကျယ်ပြန့်သည့် amygdala impact မှနေရာယူထားကြသည်သော medial မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်) အစီရင်ခံစာ foci ။ အဆိုပါခန္ဓာဗေဒဒေတာပေးထားသောကြောင့် BA25 ၏လှုပ်ရှားမှုများသည်ဤလေ့လာမှုများပိုမိုမကြာခဏပေါ်ထွန်းတော်မမူကြောင်းအံ့သြစရာထင်ရပေမည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ signal ကို VMPFC ဤဒေသတွင်ပိုပြီးတသမတ်တည်း activation သရုပ်ပြထံမှလေ့လာမှုများတားဆီးသည့် posterior ထွက် drop ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ ပိုများသောမကြာခဏ, တားစီး / ဖိနှိပ်မှု, အာရုံနှင့် reappraisal ၏လေ့လာမှုများကိုသာ amygdala မှ BA ဘွဲ့ 32 input ကို၏ပိုပြီး circumscribed သဘာဝပေးထားသောအဆိုပါ amygdala ၏တစ်ဦးထက်ပိုတိကျတဲ့မော်ဂျူရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာ, BA ဘွဲ့ 32 အတွက် foci သတင်းပို့ပါ။
amygdala Deactivate ၏ဆက်စပ်မှုလေ့လာရေး
စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းဟာ amygdala နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပုံကိုထိပ်ဆုံး-Down အသေးစိတ်နားလည်ရန်အလို့ငှာ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းလေ့လာမှုများ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင် amygdala လှုပ်ရှားမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်း၏တိကျသောဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထိန်းချုပ်မှုထူးခွားသညျ့သာရှိပြီးပြည်ပမှတာဝန်ထက်နောက်ထပ်ပြီ (ကိုကြည့်ပါ စားပွဲတင် 2) ။ အဲဒီအစားဒေသများချ amygdala လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိဖို့လူသိများနေတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်စေ့စပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတောင်းဆိုနေတာ၏, သူတို့ကအတိအလင်းအဆိုပါဆက်စပ်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း amygdala နှင့်တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ / ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုစမ်းသပ်ပြီးဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အချို့လေ့လာမှုများဆက်နွယ်နေကြောင်း amygdala အဓိကစည်းမျဉ်းထူးခွားသညျ့ထံမှပြီးသားဖော်ထုတ် prefrontal ဒေသများနှင့်အတူလျော့နည်းစေပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ amygdalar လျှောက်လျော့နည်းအဆိုး PFC လှုပ်ရှားမှုအများအပြားဒေသများဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အထူးသမှတ်စု၏ BA ဘွဲ့ 11m / 14r (5, 37, -12 အပါအဝင် VMPFC အတွက် Active ဖြစ်ကြ၏; -6, 46, -20: Urry et al ။ , 2006, Ochsner et al ။ , 2002 အသီးသီး) ။ ထို့အပြင် subgenual နှင့် pregenual cingulate ဒေသများအဆိုးစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း amygdala လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Urry နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2006) ventrally နှင့် medially တိုးချဲ့ကြောင်း BA ဘွဲ့ 32 / 10 တစ်ဒေသ (-23, 43, -10 မှာအများဆုံး) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ Delgado et al ။ (2008b) ထို့အပြင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ amygdala လျော့ကျ BA ဘွဲ့ 32 (0, 35, -8) အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုသတင်းပို့ပါ။ လည်းအဆိုး amygdala Deactivate (-13, 24, -28 ဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါ OFC ၏ Posterior (BA 14) ဒေသများ; 26, 24, -22: ဘဏ်များ et al, 2007: -30, 22, -16; 34, 24 - 16: Ochsner, Ray et al ။ , 2004) ။ BA ဘွဲ့ 47 (34, 54, 12) နှင့် BA46 (-54, 12, 12 အတွက် PFC ၏လျော့နည်း ventral ဒေသများ: Urry et al ။ , 2006; -54, 42, 12: Ochsner et al ။ , 2002), ဤလေ့လာမှုများထ။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများကစာရင်းအင်းထို့နောက် amygdala တုံ့ပြန်လျော့ကျဖို့စာအဆက်အသွယ်သောဒေသများ medial မှတိကျတဲ့ DLPFC ဒေသများနှင့်ဆက်စပ်။ ကလေ့လာမှုမှာ Urry et al ။ (2006)တစ်ဖျန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် amygdala, BA ဘွဲ့ 10 (3, 63, 18) နှင့်တစ်ဦး DLPFC ဒေသ (-50, 23, 19) အကြားဆက်သွယ်မှုကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ Delgado et al ။ (2008b) တနည်းထို့နောက်လက်ဝဲ amygdala ဒေသနှင့်တစ်ဦး DLPFC ဒေသဖော်ထုတ်သောထိုသူတို့၏ PPI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အမြိုးအနှယျအဖြစ် medial BA ဘွဲ့ 32 ဒေသကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာကအဲဒီလေ့လာမှုများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သော dorsal anterior cingulate, subgenual cingulate နှင့် posterior orbitofrontal cortex အဖြစ် amygdala မှထုတ်လုပ်တဲ့အဖြစ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ပွီ amygdala လျှောက်လျော့နည်းစေရန်သက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင်ဖော်ထုတ်ရန်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွား amygdala လှုပ်ရှားမှုနဲ့ prefrontal ဒေသတိုးအကြားဆက်စပ်မှုသတင်းပို့ကြောင်းလေ့လာရေး။
ဤအဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်လေ့လာဆန်းစစ်ရာမှအစီရင်ခံသည်ယင်းဒေသ, သူတို့ထဲကတစ်ဦးကန့်သတ်အရေအတွက် amygdala သို့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ အဆိုး amygdala တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအသုံးအများဆုံးဒေသများအတွက် posterior OFC ၏ဒေသများနှင့် subgenual cingulate နှင့် VLPFC (များမှာပုံ 12) ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal ဒေသများတွင်သာ BA ဘွဲ့ 47 / 12 ၏ posterior နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဘို့ကို၎င်း amygdala ဖို့ခိုင်မာတဲ့စီမံချက်များရှိပါတယ်။ anterior BA ဘွဲ့ 32 ၏နေရာများလည်းပါ (amygdala ၏ assessory နှင့် Basal နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နျူကလိယမှပရိုဂျက်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည့်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်နေကြCheba et al, 2001).
အတွင်းဖော်ထုတ်သြဒီနိတ် စားပွဲတင်2စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း amygdala အတွက် Deactivate ဆက်နွယ်နေကြောင်းအဖြစ် template ကိုဦးနှောက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကြံစည်မှု (ထိပ် left နှင့်ညာဘက်) နှင့်တစ်ဦးဖန်ကဦးနှောက် (အောက်ခြေအမြင်နှင့်လက်ဝဲဘက်မြင်ကွင်း) ရက်နေ့မှာပွနျဆိုထားသော။ အဆိုပါစိမ်းပြာရောင်အမှတ်အသားများများမှာ ...
ယနေ့အထိ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများအများဆုံးခေတ်မီမောင်းနှင်ဒေတာမော်ဒယ်အားဖြင့်အပြုသဘော reappraisal ၏လေ့လာမှုတစ်ခုကနေကြွလာ အာမခံနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2008)။ အကျိုးစီးပွားရလဒ်ကို variable ကို Self-အစီရင်ခံအနုတ်လက္ခဏာအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ တစ်ဦးကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းနည်းစနစ်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုဆင်တူတဲ့ reappraisal ပါရာဒိုင်းကနေ neuroimaging Datasets မှလျှောက်ထားခဲ့သည် Ochsner et al ။ (2002; 2004)။ လက်ျာ VLPFC plausibly အဆိုပါ amygdala မှ projections ဖြင့်ဧရိယာ 47 / 12 ၏ posterior သောအဘို့ကိုလည်းပါဝင်သည်တစ်ခုဧရိယာ၌ဗဟိုပြုကိုသြဒီနိတ်နှင့်တကွ, ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက် Starting Point သို့အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာပထမဦးဆုံးလက်ျာ VLPFC အကြားပြုပြီအဖြစ် amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစမ်းသပ်ဖို့တစ်ရွယ်ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးခြင်းနှင့်အပျက်သဘောယုတ်လျော့ reappraisal အောင်မြင်မှု၏အဓိကမက်ထရစ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဒီရွယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦများတွေ့မြင် (အကျိုးသက်ရောက်စေညာဘက် VLPFC နှင့်အနုတ်လက္ခဏာအတွက် Self-အစီရင်ခံကျဆင်းခြင်းများအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြသခဲ့ကြသည် ပုံ 13).
အနုတ်လက္ခဏာအတွက်ညာဘက် VLPFC အကြားဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်နှင့်လျော့ကျကြားဝင်ဖြန်ဖြေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ပုံဟာ amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် activation ကကမကထပြုခဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ကနေခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အဆင်ပြေအောင်ပုံ အာမခံ, Davidson, Hughes က Lindquist, ...
အဆိုပါစာရေးဆရာထို့နောက်တွေ့မြင် (အကျိုးသက်ရောက်စေ Self-အစီရင်ခံအနုတ်လက္ခဏာအတွက် VLPFC နှင့်အပြောင်းအလဲများကြားဆက်ဆံရေး၏ဖြစ်နိုင်သောပြုပြီအဖြစ်နှစ်ခုကွန်ရက်များသိရှိနိုင်ဖို့တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် nonparametric အခြကိုအသုံးပြု ပုံ 14) ။ တဦးတည်းကွန်ယက်ကိုအနုတ်လက္ခဏာအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုထိခိုက်တိုးမြှင့်ဆီသို့ဦးတည်ကာသွယ်ဝိုက်အပြုသဘောဘက်လိုက်မှုရှိပါတယ်။ (25, 24, 41 MNI) နှင့်သာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus (40, 24, 21) ဤကွန်ယက်သည်နျူကလိယ accumbens, subgenual cingulate (BA 58), Pre-SMA, precuneus, DMPFC ၏ဒေသများပါဝင်သည်။ ဤအဒေသများအကြား, အနျူကလိယ accumbens နှင့် subgenual cingulate အဆိုပါ amygdala နှင့်အတူပါဆုံးဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ဖော်ထုတ်ဒုတိယကွန်ယက်ကိုအနုတ်လက္ခဏာအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုထိခိုက်လျော့ကျလာခြင်းနှင့် reappraisal အောင်မြင်မှုလျှော့ချဆီသို့ဦးတည်ကာသွယ်ဝိုက်အနုတ်လက္ခဏာဘက်လိုက်မှုရှိပါတယ်။ ဤသည်ကွန်ရက် rostral dorsal ACC, amygdala (နှစ်နိုင်ငံ) နှင့် posterior-lateral OFC (48, 24, -18) တို့ပါဝင်သည်။ အနာဂတ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအပြန်အလှန်ဘယ်လိုနှင့်ဤကွန်ယက်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမဟာဗျူဟာ၏ဤအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားမှတိကျတဲ့ရှိမရှိ elucidate မှရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ VLPFC နှင့် Self-အစီရင်ခံအနုတ်လက္ခဏာအတွက်ကျဆင်းခြင်းကိုထိခိုက်ကြားဆက်ဆံရေးဖြန်ဖြေအပြာရောင်အဝါရောင်နှင့်အဆိုးဘက်လိုက်ကွန်ယက်ကိုအတွက်အပြုသဘောဘက်လိုက်ကွန်ယက်၏လမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ်။ ကနေခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အဆင်ပြေအောင်ပုံ အာမခံ, Davidson, Hughes က Lindquist, ...
အများအပြားကစုံစမ်းစစ်ဆေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းနောက်ကွယ်မှအာရုံကြောယန္တရားများအဖြစ်သီအိုရီမော်ဒယ်များထွက်ထားကြပြီ။ ဤအမော်ဒယ်များ၏အရိုးရှင်းဆုံးဒေသများ၏ကန့်သတ်အရေအတွက် amygdala အပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်းအဆိုတင်သွင်း။ Delgado et al ။ (2008b), ပိုယ်ဗွန် Kanel (2008) နှင့် Quirk နှင့်ဘီယာ (2006) တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ventromedial PFC ချ amygdala ၏ဒေသများတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတင်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များအရေးကြီးတာက (မျိုးသုဉ်းအပေါ်ကျယ်ပြန့်တိရိစ္ဆာန်စာပေလူ့စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများ၏ neuroanatomical အခြေစိုက်စခန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြေဖို့ကြိုးစားနှင့် basolateral amygdala အတွက် intercalcated ထုဖို့ ventromedial PFC ရဲ့ဆက်သွယ်မှုမော်ဂန်, Romanski & LeDoux, 1993; Likhtik et al ။ , 2005; Quirk et al ။ , 2000). Quirk နှင့်ဘီယာ (2006) excitatory နှင့်လူသားများနှင့်ကြွက်များတွင် amygdala ရန် "ventral" medial PFC စီမံကိန်း၏ inhibitory သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ရှေ့မှောက်တွင်အပေါ်တည်ဆောက်။ အဆိုပါ subgenual cingulate ဒေသ, BA ဘွဲ့ 25, ပို dorsal သော်လည်းပိုပြီး inhibitory ဖြစ်နှင့် BA ဘွဲ့ 32 အဆိုပါ amygdala နှင့်အတူ excitatory ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဖို့အဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် anterior မှစောဒကတက်သည်။ BA ဘွဲ့ 25 နှင့် 32 နှစ်ဦးစလုံးဟာ amygdala နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ BA ဘွဲ့ 32 သို့သော်အများကြီးပိုကန့်သတ်ဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ်။
Phillips က et al (2008) (ကြည့်ရှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း၏မျိုးစုံအမျိုးအစားများများ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆားကစ်မော်ဒယ်တီထွင်ခဲ့ကြ ပုံ 15) ။ အဆိုပါမော်ဒယ် DLPFC, OFC, VLPFC, DMPFC နှင့် ACC ၏အစိတ်အပိုင်းဒေသများပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွား, စာရေးသူဆန္ဒအလျောက်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်း (DLPFC နှင့် VLPFC) အတွက်စုဆောင်းကြသည် (subgenual နှင့် rostral ACC အတွက်) အော်တိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြားခွဲခြား။ သူတို့ဟာ phylogenetically အသစ်များနှင့်အဟောင်းများစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်များမှတုံ့ပြန်ချက်ပေးအဖြစ်ဤအဆုံးစွန်သောဒေသများသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ OFC, DMPFC နှင့် ACC, အခြားတစ်ဖက်တွင် phylogenetically အဆိုပါ DLPFC နှင့် VLPFC မှပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်သတင်းအချက်အလက်ထပ်ဆင့်လွှင်မှ feedforward ဖြစ်စဉ်များမှတဆင့် operating အဖြစ်ဖော်ပြကြသည်အဟောင်းတွေဒေသများဖြစ်ကြသည်။ စာရေးသူဟာ OFC ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ဦးနှောက်၏ neocortical ဒေသများမျှော်တန်ဖိုးကိုသတင်းအချက်အလက် feeds ရာမှတဆင့်ပြွန်အဖြစ် DMPFC ထားပါ။
Phillips က et al ။ (2008) prefrontal amygdala interaction က၏မော်ဒယ်က) OFC, subgenual ACG (ACC), နှင့် rostral ACG (ACC) feedforward အချက်အလက်များကို MdPFC ဖို့, ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC ဒေသများဖြစ်သည်။ ခ) ထံမှတုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်စဉ်များ ...
ဒီ model တမူထူးခြားတဲ့ရှုထောင့် feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပီသသောပါပဲ။ အဆိုပါမော်ဒယ်အလိုလိုဆွဲဆောင်နှင့်ရှင်းလင်းစွာပိုပြီး "စိတ်ခံစားမှု" ဒေသများတွင်ကျော်အထက်မှအောက်သို့ထိန်းချုပ်မှုအားထုတ်သည့် DLPFC အကြောင်းကိုရိုးရာအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူကိုက်ညီနေသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ PFC ဆက်သွယ်မှု၏ laminar ဖြန့်ဖြူး (ပေးထားသည့်အခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံနှင့်အတူဤစိတ်ကူးပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ခက်ခဲသည်Barbas & Rempel-Clower, 1997; Barbas, 2000) ။ အမှန်မှာထိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်အများစုတုံ့ပြန်ချက်အဖြစ်အများစုသွင်ပြင်လက္ခဏာ, နှင့် DLPFC အတွက်ပေါ်ပေါက်ရှိသူများနှင့် OFC သွားသည့် DLPFC နှင့် OFC အကြားသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် OFC ထဲမှနှင့် DLPFC သွားအတူဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်အတွက်အမှန်တကယ်ကြောင်းအကြံပြု feedforward အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။
အဆိုပါ Phillips က et al ။ မော်ဒယ်ထိုကဲ့သို့သောပိုပြီး phylogenetically အသစ်များဒေသများဖြစ်သော amygdala အဖြစ် limbic ဒေသများ impact အရာကနေတဆင့်မူလတန်းကျောင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း subgenual cingulate နှင့် OFC သကဲ့သို့ခေါ် "အော်တိုစည်းမျဉ်း" ဒေသများတွင်၎င်း၏နေရာချထားလည်းမှတ်သားလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကွန်ယက်အစီအစဉ်များနှင့်အတူ (အထူးသဖြင့် subgenual cingulate ဒေသ) အကြီးအကျယ်တသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာအလျောက်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်ဒေသများတွင် amygdala အပြောင်းအလဲနဲ့ impact နိုင်သည့်မှတဆင့်တစ်ဦးထက်ပိုလမ်းကြောင်းရှိစေခြင်းငှါ, သို့သော်, ခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်, ထို posterior VLPFC တိုက်ရိုက် amygdala အရေးပါရန်၎င်း၏တိုက်ရိုက်သွင်းအားစုပေးထားပို medial "အော်တိုစည်းမျဉ်း" ဒေသများတွင်၏တဦးတည်း၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမလိုဘဲ amygdala ဖြစ်စဉ်များ impact နိုင်ပေမည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒေတာတစ်ခုဥစ္စာဓန amygdala လှုပ်ရှားမှုချ-ထိန်းညှိနိုင်စွမ်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များဖေါ်ပြခြင်းဒေသများ၏တစ်ဦးထက်ပိုရွေးချယ်ထားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ (BA 47 / 12, BA25 နှင့် BA ဘွဲ့ 32) တွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း PFC တိုင်းဒေသကြီးများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖော်ပြသည်။ ပို. ပို. ခေတ်မီမော်ဒယ်သည်ဤဒေတာကိုရှင်းပြဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပြုထား connection ကွန်ရက်များ၏ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဘို့မိမိတို့စာရေးဆရာများအားဖြင့်ပြစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်သကဲ့သို့ဤသူတို့မော်ဒယ်များပေါ်ပေါက်ရေး, နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေ့စွဲရန်မမော်ဒယ်များကွဲပြားခြားနားသော PFC ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုများ laminar ပုံစံအတိအလင်းဝန်ခံကြပြီ, သို့သော်, မှတ်သားကြပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အာမခံ et al (2008) တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းနည်းဗျူဟာများအတွက်အများဆုံးရှုပ်ထွေးမော်ဒယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်အစိတ်အပိုင်းဒေသများအကြားသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု၏သဘောသဘာဝဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။ Phillips က et al ။ ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်အချက်အလက်များ၏ concept ကိုထည့်သွင်းပေမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအတွက်ဒေသများတွင်တုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward စီမံကိန်း၏လေ့လာတွေ့ရှိပုံစံနှင့်အတူဤအတွေးအခေါ်များပြန်လည်သင့်မြတ်ကြဘူး။ ကျနော်တို့ကဤကိစ္စများပွနျလညျသငျ့မွစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောအလွှာနားလည်ရန်ကြိုးစားနေသုတေသီများများအတွက် key ကိုစိန်ခေါ်မှုများတစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
6 ။ စိတ်ခံစားမှုအာရုံ၏သိမှုထိန်းချုပ်ရေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း၏လေ့လာမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်နေစဉ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်စာပေစဉ်းစားသောအခါများစွာသောအလားတူကိစ္စများပေါ်ထွန်း။ အမြင်ကျယ်, သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရည်မှန်းချက်ဆီလျှော်အပြောင်းအလဲနဲ့ဟန့်တားနေစဉ်, ရည်မှန်းချက်သက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့မြှင့်တင်ရန်သောအဆင့်မြင့်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအထူးသဖြင့်ဝင်လာသောရည်မှန်းချက်-သက်ဆိုင်ရာအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရည်မှန်းချက်ဆီလျှော်အာရုံခံအချက်အလက်များ၏တားစီးနှင့်ရည်မှန်းချက်-မြှင့်တင်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ရည်မှန်းချက်-မသင့်လျော်တုံ့ပြန်မှုယှဉ်ပြိုင်၏ဖိနှိပ်မှုများပူးတှဲပါရွေးချယ်ရေးဖို့ရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်တာဝန်များကိုဖို့လျှောက်ထားရန်အသုံးပြုသည်။ ထိုသို့သောရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမကြာခဏအတိအလင်းအပြောင်းအလဲနဲ့လမ်းကြောင်းထိပ်-Down မော်ဂျူနှင့်ဘက်လိုက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပေးအပ်သည်။ စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းလေ့လာမှုကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲအာရုံစိုက်ကြောင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် SUBCATEGORY အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဆနျ့ကငျြ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှုများအများစုသည်အခြားအမျိုးအစားများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်အာရုံကိုကျော်လွှားနိုင်စွမ်းအာရုံစိုက်ပါ။ သောကြောင့်သူတို့ရဲ့မွေးရာပါ (မကြာခဏအလိုအလျောက်) အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းယူရညျအသှေး (၏အများစုမှာ et al ။ , 2005; 2007; Pessoa, 2008), စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမကြာခဏရည်မှန်းချက်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ရန်အတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အားကြီးသောလိုအပ်နှိုးဆော်ခြင်း။ အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်အာရုံကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဤလိုအပ်ချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည်အခြားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအခြားလုပ်ငန်းတာဝန်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူ incongruent ဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ပြတ်တောက်အချက်အလက်များ၏ on-line ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်တာဝန်များကို, စဉ်အတွင်းတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်ဘယ်မှာလေ့လာမှုများကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ခေတ္တမျှထိုစိတ်ခံစားမှု-စည်းမျဉ်းစာပေနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ convergence ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အတွက်ဒီလေ့လာမှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ဒီစာပေစာဖတ်သူများတစ်ဦးထက်ပိုသောစေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရည်ညွှန်းနေကြ Banich et al ။ (2009).
အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး (က nonemotional နှိုးဆွဖို့တက်ရောက်ရန်သင်တန်းသားများကို (ထိုကဲ့သို့သောအရောင်ကဲ့သို့) တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတာဝန်-သက်ဆိုင်ရာ nonemotional feature ကိုတုံ့ပြန်ရန်ရှိသည်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်ခံစားမှုစကားများ) ကအာရုံမရသည့်အတွက် Paradigm အလုပ်, ဒါမှမဟုတ်ကြပါပြီ အိမ်သူအိမ်သား) တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ (ကကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာ) လျစ်လျူရှုနေစဉ်။ ဥပမာ, rostral (dorsomedial pregenual နှင့် dorsal ACC) ဒေသများနှင့် DLPFC နှင့် VLPFC နှစ်ဦးစလုံးဒေသများအားလုံးဘာသာရပ်များ (စကားလုံးများ၏စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာအားဖြင့်အာရုံခံကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်သည့်အတွက်စိတ်ခံစားမှု Stroop Paradigm အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီWhalen et al ။ , 1998; Compton et al ။ , 2003; ဟယ်ရင်တန် et al ။ , 2005; ဟန် et al ။ , 2007) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်အတူတူ neurocognitive အလွှာဟာစာဖတ်သူတွေကိုပါဝင်ပတ်သက်နေပုံကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောစေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရည်ညွှန်းနေကြ ဘလဲနှင့်မစ်ချယ် (၂၀၀၉) နှင့် မစ်ချယ် (2011).
ဒါကြောင့်သူတို့ကသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအားထုတ်နေကြသည်ကြောင့်ဤဒေသများစေ့စပ်လျက်ရှိသည်ရှိမရှိအမြဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးကြောင်းကိုအတွက်သော်လည်းထိုအ Paradigm များစွာ၏စကားပြန်န့်အသတ်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်, ပေါ်ထွန်း, သေချာပေါက်ပဋိပက္ခ / အာရုံကိုထိန်းချုပ်စရာမလိုဘဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သာ. ကြီးမြတ်ပဋိပက္ခ / အာရုံ၏စေ့စပ်နေကြတယ်, ဒါမှမဟုတ် ရိုးရှင်းစွာလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခံစားမှုသဘာဝတုံ့ပြန်နေကြသည်။ ဥပမာ, ဟန်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2007) လှပသော၎င်း pregenual cingulate ဒေသ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် BA ဘွဲ့ 24 / 32) စိတ်ခံစားမှုစကားနှင့်တစ်ဦး Stroop တာဝန်စဉ်အတွင်းတိုးချဲ့ဖွင့်သုံးပြသထားတယ်, ဤတာဝန်အတွက်တိုးချဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ distractors ကျော်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွိုးစားအားထုနိုင်ရန်အတွက်စေ့စပ်ခံရမှုဟာ rACC ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနက်နိုငျသညျ။ သို့သော်ဤဒေသ၏ activation သာ. ကြီးမြတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းပေးထား, activation ၎င်း၏အဆင့်အဆိုပါ distractors ၏အောင်မြင်သောတားစီးနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ ထို့အပွငျကသိသာသည့် rACC အဆိုပါ amygdala တစ်ဦးကဆင်း-စည်းမျဉ်းကားမောင်းသောအယူအဆနှင့်အတူကိုက်ညီမှုသော amygdala နှင့်အတူတိုးပွားလာအလုပ်လုပ်တဲ့နားချင်းဆက်မှီပြသခဲ့သည်။ အမှန်မှာကရေးသားသူအစား amygdala ၏ rACC စည်းမျဉ်းထင်ဟပ်ထက်ကြောင်းအကြံပြုကြောင်းသိသာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ distractors ထိတွေ့စဉ်အတွင်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုပု rACC မှမဟုတ်ဘဲအခြားလမ်းပတ်ပတ်လည်ထက် amygdalar ၏စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်း input ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ amygdala အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ကျော် prefrontal သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်သေအထောက်အထားများ၏ပိုပြီးဒီကဗျာကိုအပိုင်းပိုင်းများထဲတွင်တစ်ဦးလေ့လာမှုကနေကြွလာ Etkin et al ။ (2006), သောသင်တန်းသားများကိုစိတ်ခံစားမှုမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေစကားစိတ်လှုပ်ရှားမှုနာမည်နှင့်အတူအရတော့သို့မဟုတ် incongruent ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထားတဲ့အတွက် Stroop-ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ဒီဇိုင်းကိုစာရေးသူကြားနေစမ်းသပ်မှုတွေသို့မဟုတ် incongruent vs. အရတော့စမ်းသပ်မှုတွေ vs. စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့နှိုင်းယှဉ်မအာရုံစူးစိုက်အဖြစ်အတော်လေးရှုပ်ထွေးခဲ့ပေမယ့်အစားအထူးသဖြစ်စေတစ်ဦးအရတော့သို့မဟုတ် incongruent ရုံးတင်စစ်ဆေးနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်း incongruent စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အသာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus အတွက် DLPFC တစ် DMPFC ဒေသနှင့် rostral (pregenual) ACC ကြိုတင်စမ်းသပ်မှုအရတော့ဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်မရှိမရှိအပေါ်သို့မှီခိုခဲ့ incongruent စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်း Active ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ rostral ACC အခြား incongruent ရုံးတင်စစ်ဆေးနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းစမ်းသပ်မှုတွေပိုမိုတုံ့ပြန်သော်လည်းအဆိုပါ DLPFC (နှင့် DMPFC), တစ်ဦးအရတော့ရုံးတင်စစ်ဆေးနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းစမ်းသပ်မှုတွေ incongruent ပိုမိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအထူး psychophysiological အပြန်အလှန်ဆန်းစစ်သုံးပြီး amygdala လှုပ်ရှားမှု (ရန် prefrontal cortical ဒေသများဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်သောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစာပေအတွက်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများတဦးဖြစ်ပါသည်, Friston et al ။ 1997) ။ ထူးခြားသည် rostral ACC အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းပြန်ညာဘက် amygdala လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ amygdala တုံ့ပြန်မှုများ၏ပုံစံအပေါ်အခြေခံပြီး, စာရေးသူ amygdala လှုပ်ရှားမှုပေးထားသောရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ပဋိပက္ခ၏ဒီဂရီဆက်နွယ်နေကြောင်းသည်, amygdala လှုပ်ရှားမှုနှိပ်ကွပ်ခြင်းအားဖြင့် rostral ACC ဒီပဋိပက္ခအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းငြင်းခုန်။ ဒီအယူအဆများအတွက်ပံ့ပိုးမှု incongruent စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းပြန် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသသောသူတို့အားသောအမူအကျင့်ဒေတာမှလာ task ကိုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် သာ. ကြီးမြတ်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းပြသခဲ့သည်။ တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာ Etkin et al ။ (2010) amygdala လှုပ်ရှားမှု၏ဤဖိနှိပ်မှုဒီလူနာလူဦးရေအတွက်စိတ်ခံစားမှုအာရုံသို့မဟုတ်ပဋိပက္ခထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲတစ်ခုအလားအလာအာရုံကြော Correlate ပေး, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှ generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါဆွေမျိုးနှင့်အတူလူနာအတွက်အားနည်းပေါ်လာလေ့လာသည်။
အရေးပါတဲ့အတွက်အသိပေးချက်ဒီစာပေမှကိစ်စတှငျမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Etkin ရဲ့အဖွဲ့ကလေ့လာမှုများစိတ်ခံစားမှုသတင်းအချက်အလက်ပဍိပက္ခကာလအတွင်း PFC ဒေသများအားဖြင့် amygdala တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သူများတားစီး၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြံပြုသို့မဟုတ် "သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဒေသများ," တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမဟုတ်ဘဲ၏အဆငျ့အပျေါမှာမူတည်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တားစီးကြဘူး ချက်ချင်းကြိုတင်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားပဋိပက္ခ။ အဆိုပါ pregenual cingulate (သို့မဟုတ်အခြား PFC ဒေသများ) တို့အကြားပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့များကိုစောငျ့ရှောကျမှန်ကန်သောလျှင်, စွမ်းရည်နှင့် amygdala အလွန်အမင်းတာဝန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိကျတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။
သက်သေအထောက်အထား၏အခြားလိုင်းများလည်း, အထူးသဖြင့် ACC dorsal အခြား prefrontal ဒေသများသောဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်သည့် amygdala ကျော် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ, Etkin et al ကဲ့သို့တူညီသောပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုတစ်ခုပါ။ (Chechko et al ။ , 2009), ထိတ်လန့်ရောဂါနှင့်အတူလူနာထိတ်လန့်ရောဂါမလုံလောက်သော DMPFC / dorsal ACC ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းအကြံပြုချက်မှဦးဆောင်စိတ်ခံစားမှု incongruent စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက် သာ. ကြီးမြတ်လျှော့ချအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မား amygdala, ဒါပေမယ့်နိမ့် dorsal ACC / DMPFC လှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည်။ အလားတူပင် Hariri et al ။ , (2003) ဘာသာရပ်များ (amygdala လှုပ်ရှားမှုပွဲအခွအေနေအဘို့အတိုးပွားလာလျက်, VLPFC နှင့် dorsal ACC တံဆိပ်အခွအေနေစဉ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုတိုးပွားလာနှင့်အတူ) ပွဲစဉ်စိတ်ခံစားမှုဓာတ်ပုံများကို vs. တံဆိပ်ကပ်ခဲ့အခါ amygdala နှင့် dorsal ACC (နှင့် VLPFC) အကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုလေ့လာသည်။ ဒါဟာအစ dACC ပင်တိကျသောပဋိပက္ခတစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုကို၏စိတ်ခံစားမှုအာရုံ၏မရှိခြင်းအတွက် amygdala ကျော်စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုစေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pezawas et al ။ (2005) အလုပ်တခုကိုကိုက်ညီမယ့်ခြိမ်းခြောက်မှုမျက်နှာစဉ်အတွင်း dACC နှင့် amygdala လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့များလေ့လာသည်။ ဒါဟာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ထို Pezawas လေ့လာမှုအတွက် subgenual ACC အပြုသဘောကွဲပြားခြားနားသည့် cingulate ဒေသများတွင်နှင့် amygdala တို့အကြားထူးခြားတဲ့ဆက်စပ်မှုတွေအကြံပြုခြင်း, amygdala လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်ထပ်မံအကြံပြုခဲ့လည်းမှတ်သားစေခြင်းငှါ Monhaty et al ။ (2007) အဆိုပါ rACC အနည်းဆုံးတချို့အခြေအနေတွေအတွက် amygdala နှင့်အတူ coupled, အစားအပျက်သဘောထက်အပြုသဘောကြောင်းစာရွက်။
သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစမ်းသပ်မှု၏နောက်ထပ် subclass အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းစိတ်ခံစားမှုအာရုံဖိနှိပ်နိုင်စွမ်းအပေါ်အာရုံစိုက်။ On-line ကိုကျင်းပများနှင့်ခြယ်လှယ်နိုင်အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုကန့်သတ်ထားသည်ကို ထောက်. (Cowan, 2010), ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီသင့်လျော်စွာဒီအပေါ်လိုင်းစတိုးဆိုင်ထဲသို့ဝင်ရသောသတင်းအချက်အလက်များဦးစားပေးကြောင်းဝေဖန်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ကျနော်တို့လျော့နည်းအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များမှဆွေမျိုးရည်မှန်းချက်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်, ဒါပေမယ့်လည်း သာ. အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကြိုတင်ရည်မှန်းချက်များ်ယူတဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ရဲ့ contents အရေးပေါ်သိမ်းထားနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များအတွက် DLPFC နှင့် VLPFC ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ (ပေးသော, စိတ်လှုပ်ရှားမှု-သိမှတ်ခံစားမှု interaction ကဆန်းစစ်များအတွက်အလားအလာအသုံးဝင်သောဒိုမိန်းကိုထောက်ပံ့ပေးBadre et al ။ , 2005; Blumenfeld et al ။ , 2010; Curtis & D'Esposito, 2004; Jonides et al ။ , 2005; Levy & Goldman-Rakic, 2000, Nee & Jonides, 2010; Postle, 2006; Thompson က-Schill et al ။ , 2002).
သူတို့အထူးသဖြင့်အောင်မြင်သောစွမ်းဆောင်ရည်မှဦးနှောက် Active လင့်ထားသည်သို့မဟုတ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိစ္စရပ်များသို့ကိုအသာပုတ်အဖြစ် Dolcos နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကနှစ်ဦးအားအစီရင်ခံ (မှတ်ချက်ဖြစ်ကြ၏Dolcos နှင့် McArthy 2006; Dolcos et al ။ , 2006) ။ နှစ်ဦးစလုံးအစီရင်ခံစာများရိုးရှင်းတဲ့မျက်နှာကိုက်ညီခြင်းကနေဒေတာတွေကိုစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ကြားနေပုံရိပ်တွေတာဝန်များ၏နှောင့်နှေး (ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု) ကာလအတွင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်တာဝန်သောတုန့်ပြန်နှောင့်နှေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမှာတော့သူတို့ ventrolateral cortex (BA 45 / 47) ကြားနေ distractors ဖို့စိတ်ခံစားမှုဆွေမျိုးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသ activated ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ခံစားမှု distractors ၏ရှေ့တော်၌ သာ. ကြီးမြတ် ventrolateral လှုပ်ရှားမှုပြခဲ့သူသင်တန်းသားများကိုလျော့နည်းစိတ်အာရုံထွေပြားအဖြစ်သူတို့အား distractors သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကိုအောင်မြင်စွာ vs. မအောင်မြင် (မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မမှန်ကန်ကြောင်းနှောင့်နှေးတုန့်ပြန်စွမ်းဆောင်မှုများကသရုပ်ပြအဖြစ်) ကို distractor လျစ်လျူရှုထားတဲ့အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေအကြားမတူညီကြောင်းလက်ဝဲ BA ဘွဲ့ 45 လှုပ်ရှားမှု (သို့သော်မဖြောင့် BA ဘွဲ့ 45) လှုပ်ရှားမှုပြသသည်။ Dolcos et al ။ (2006) လည်းနှစ်ဦးစလုံးဒေသများကြားနေ distractor စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့စိတ်ခံစားမှုဆွေမျိုးစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု amygdala VLPFC- အပေါ်သတင်းပို့ပါ။ အရေးကြီးတာကဒီဆက်သွယ်မှုအပြုသဘောဦးတည်သည်နှင့် amygdalar ပစ်ခတ်ရန်၏ဖိနှိပ်မှုထင်ဟပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမရနိုင်ပါ။
Dolcos နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအဆိုပါလေ့လာမှုများကိုလည်းတိုကျရိုကျဒေသများဖြတ်ပြီး activation နှင့် Deactivate ၏ dissociable ပုံစံများအဘို့သက်သေသာဓကသည်။ DLPFC (BA9/ 46) ဤဒေသများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာအကြံပြုခြင်း, ယုတ်လျော့နေချိန်တွင်အထူးသ ventrolateral ဒေသများ, စိတ်ခံစားမှုအာရုံပြံ့လှငျ့နှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးများကလေ့လာတွေ့ရှိ ventral ပုံစံ vs. တစ်ခုပြောင်းပြန် dorsal ကိုပဲ့ Perlstein et al ။ (2002) ဘာသာရပ်များတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု valence ဓါတ်ပုံတွေကိုတာဝန်သည်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖြစ်ပေါ်ထွန်းသောအရာအတွက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်တာဝန် [စိတ်ဝင်စားစရာသည်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာနီးကပ်စွာ DLPFC ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ventral ဒေသများ (BA 10 / 11) နဲ့ဖွင့်မယ့်အတူ valence နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ] အနုတ်လက္ခဏာလှုံ့ဆော်မှုသည်။ ပိုပြီး dorsal နှင့် ventral PFC ဒေသများအကြားပြောင်းပြန်ပုံစံလည်း သာ. ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ဝန် (နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ ventral တိုကျရိုကျလှုပ်ရှားမှုပိုမို DLPFC ဆွေမျိုးနှင့်အတူအခြားအလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ် Paradigm အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Rypma et al ။ , 2002; Woodward et al ။ , 2006), ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်တိကျသော ventral PFC ဒေသများကွဲပြားပေမယ့်။ ventral နှင့် dorsal တိုင်းဒေသကြီးများ၏သရုပ်ပြောင်းပြန်ပုံစံသည်ဤဒေသများအကြားအတိုက်အခံတင်းမာမှုအကြံပြုပေမယ့်ဆက်ဆံရေးမျိုး၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သဘောသဘာဝညွှန်ပြကြဘူး။ Ranganath (2006) အဆိုပါ dorsal / rostral PFC ပို caudal ventral တိုကျရိုကျဒေသများထိန်းချုပ်ပေးပါသည်နေစဉ်။ / caudal ventral PFC ဒေသများ, posterior စနစ်များကိုထိန်းချုပ်ထိပ်တန်းချပေးသည့်အတွက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဦး hierarchical ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဆိုတင်သွင်း ဒီရှုထောင့်အတွင်းမှာပဲ Ranganath ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ dorsal / rostral PFC ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည် ventral / caudal PFC အတွက်လှုပ်ရှားမှု၏ Module ပါဝငျသညျ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့မည်သို့ပင်ဆို, ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည် Module ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခိုင်လုံ။
7 ။ သိမြင်မှုဒေသများ၏အကျိုးသက်ရောက်စေစည်းမျဉ်း
အစောပိုင်းကကဏ္ဍများကိုကွပ်ထားတယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ပေး DLPFC အပါအဝင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC မှ OFC Project, အများစုတုံ့ပြန်ချက်ပေးအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ကဲ့သို့သောဤစီမံချက်များ biasing နှင့်ပိုပြီး cytoarchitecturally ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒေသစည်းမျဉ်းများကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကျော်ရာအရပ်ကိုကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်းဒဿနအမြင်များမှထင်ရသောကိုကန့်ကွက်သော်လည်း, အကျိုးသက်ရောက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဧရိယာသည်အခြားသိမြင် interaction ကပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများကျော်တုံ့ပြန်ချက် type ကိုဘက်လိုက်မှုပေးအံ့သောငှါစိတ်ကူးဦးစားပေးလုပ်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏စွမ်းရည်ကိုအလေးပေးကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ခေတ်သစ်အမြင်များနှင့်အတူအလွယ်တကူကိုက်ညီခြင်းနှင့်ဘက်လိုက်မှု ဇီဝနှင့်လူမှုရေးအရသိသိသာသာရည်မှန်းချက်များလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များအပြောင်းအလဲနဲ့။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဤမြင်ကွင်းကိုလှပသော Grey ကများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (နေဖြင့်တင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်မီးခိုးရောင်, 2001, မီးခိုးရောင်, Braver, Raichle, 2002), ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆုတ်ခွာပြည်နယ်များ adapter ကိုပိုမိုထိရောက်စွာခွအေနမြေားတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်စေရန်နှစ်ဦးစလုံး, တိကျတဲ့သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ထိရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့သူ။ သိမှတ်ခံစားမှု၏ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုမော်ဂျူအဘို့သက်သေသာဓကကောင်းကောင်း (ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်လက်ခံသည်Delgado et al ။ , 2003; Grabenhorst & Rolls, 2009; Hardin, ထင်းရူး & Ernst, 2009; Piech et al ။ , 2010), ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဥာဏ်ကဲ့သို့သောအခြား prefrontal ကမကထပြုခဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ, Spatial vs. နှုတ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းပြန် Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ဆုတ်ခွာစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များအားဖြင့်တိုးမြှင့်ခံရခြင်းနှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်များ vs. အပြုသဘော၏ induction အားဖြင့် modulated နှင့်ချဉ်းကပ်ပြည်နယ်များအားဖြင့်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း, ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းနှုတ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်မီးခိုးရောင်, 2001) ။ ထို့အပြင်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုသတင်းအချက်အလက် (ကြားနေသတင်းအချက်အလက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလုပ်မလုပ်မှတ်ဉာဏ်ရောက်စွက်ဖက်လျော့ကျစေပါတယ်Levens & Phelps, 2008; 2010) ။ လက်ျာ OFC (33 24 -8) နှင့်လက်ဝဲ anterior insula (-32 21 2) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက် resolution ကိုပိုမိုတုံ့ပြန်ကြသည်။
အလားတူပင်တစ်ဦးအမူအကျင့်သိမြင် Set-switching တာဝန်အတွက်အပြုသဘော၏ induction ကြားနေသို့မဟုတ်အပျက်သဘောနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်, အကျိုးသက်ရောက်စေ, (သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်လျှော့ဇွဲရာထူးတိုးပေမယ့်လည်းတိုးလာအာရုံမှဦးဆောင်ထိခိုက်စေDreisbach & Goschke, 2004) ။ ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက် (ကအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်ပြည်နယ်များကိုထပ်တိုးနိုင်မအထောက်အထားကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ကျဉ်းမြောင်းသောအာရုံကိုစိတ်ပြည်နယ်၏ချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းဝိသေသလက္ခဏာများ၏ခွန်အားအပျေါမှာမူတည်ပြီးနှင့်ကိုက်ညီများမှာFredrickson & Branigan, 2005; Gable & သဟဇာတ - ဂျုံးစ်, 2008; 2010; Gasper, & Clore 2002).
ပြင်းထန်စွာ, သက်သေအထောက်အထားတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုတစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်တာဝန်စဉ်အတွင်း DLPFC အတွက် BOLD တုံ့ပြန်မှု (BA 9) impact ကွောငျးဖျောပွသ (Grey က, Braver, & Raichle, 2002; Savine & Braver, 2010) ။ တကယ်ပါပဲ, Savine & Braver (၂၀၁၀) လက်ဝဲ DLPFC (BA 9) အတွင်း, ငွေကြေးဆုလာဘ်မက်လုံးပေးအထူးတာဝန်-cue-related Active တိုးမြှင်, ဤ activation စမ်းအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိခန့်မှန်းကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အတူတူယူ, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအကြားဆက်ဆံရေး unidirectional အမြင်များတစ် reframing လိုအပ်သည်။
လူပျိုဆဲလ်လေ့လာမှုများဆုချစပ်လျဉ်း ventral နှင့်ပိုပြီး dorsal ဒေသများအကြားဆက်သွယ်ရေး၏အချိန်သင်တန်းသို့အခြို့သောအပိုဆောင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။ မျောက်ဝံများကနေဒေတာကို (အခြားတိုကျရိုကျဒေသများထက်ဆုလာဘ်တစ်ခုသန့်ရှင်းအဘိုးပြတ်သည် Orbital ဒေသများကုဒ်အကြံပြုလျက်, OFC ပိုပြီး dorsal prefrontal ဒေသများတွင်ဤအဘိုးပြတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းHikosaka & Watanabe, 2000; Wallis & Miller က, 2003; Rushworth et al, 2005) ။ အရေးကြီးတာက, OFC အာရုံခံ (အ DLPFC အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှု precedes သတင်းအချက်အလက်ဆုချမှတုံ့ပြန်မှုကိုပြသWallis & Miller က, 2003) ။ ဒါက OFC ပထမဦးဆုံး codes တွေကိုသောစိတ်ကူးအကျိုးကိုတန်ဖိုး jives ပြီးတော့လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အကျိုးကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်လိုအပ်သောသည်အခြားဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဤအချက်အလက်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းဒေသများသို့ဤအချက်အလက် feeds ။ ကျနော်တို့ OFC အချို့ 30% အဖြစ်, DLPFC စီမံချက်များ feedforward အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, ဒီမက်လုံးပေးသတင်းအချက်အလက်တိတိကျကျတုံ့ပြန်ချက်အမျိုးအစားစီမံကိန်း၏အသုံးအနှုန်းများအတွက် DLPFC ရောက်ရှိ, ဒါမှမဟုတ်သဘာဝ feedforward ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါအဘယျသို့အတိုင်းအတာအထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးကြောင်း, သို့သော်သတိပြုပါ သဘာဝ (Barbas & Rempel-Clower, 1997) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်အဆိုအရဒီဂုဏ်ထူး DLPFC ဆဲလ်များ၏အကျိုးကို sensitivity ကို DLPFC တစ်ဦးတုံ့ပြန်ချက် type ကိုဘက်လိုက်မှုထင်ဟပ်ဒါမှမဟုတ် DLPFC အပေါ်သို့လည်ပတ်နိုင်သောအဘိုးပြတ်အပေါ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးထက်ပိုရိုးရှင်းသော (feedforward အမျိုးအစား) ဂီယာကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပြု. ရည်ညွှန်းပါ မစ်ချယ် (2011) ဆုလာဘ်များ၏အာရုံကြောအလွှာဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများသူတို့နှင့်အတူထပ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်။
အဆိုပါ amygdala နှင့် prefrontal ဒေသများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့လွှမ်းမိုးမှုသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများလည်းအသုံးဝင်သောဖြစ်မည်အကြောင်းစိတ်ကူး။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း PFC ဒေသများ (အထူးသဖြင့် pregenual cingulate နှင့် VLPFC) အကြားအပြုသဘော functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (အတိတ်လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Pezawas et al ။ , 2005; Dolcos et al ။ , 2006) ။ ကျနော်တို့ကဤအခြေအနေများအတွက် amygdala ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပထမဦးဆုံးအခွအေနကေို၏ salience တွက်ချက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမယ်လို့ထဲမှာ, စတငျဖြစ်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ထက်ဝန်းကျင်အခြားလမ်းအပေါ်အခြေခံပြီး PFC ဒေသများထိန်းညှိဖို့ကြိုးစားစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ယနေ့အထိအနည်းငယ်ကြိုးစားမှုဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခပုံစံစေပြီ။
8 ။ ဆွေးနွေးချက်
ကျနော်တို့အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-သိမှတ်ခံစားမှု interaction ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါထို PFC အတွင်းခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှင့် amygdala သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းမော်ဒယ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်အရှင်တိသက်သေပြဖို့များပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, neurocircuitry များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်မသာစိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအကြားအပြန်အလှန်ပိုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မော်ဒယ်များဘို့ပေးနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းမဟုတ်ရင်မှတက်ရောက်ခဲ့သည်မရမယ်လို့အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများထုတ်ဖေါ်လိမ့်မည်။
Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေအဘို့အ Insights
အဆိုပါ PFC နှင့် amygdala တို့အကြား neuroanatomical လမ်းကြောင်း၏ရွေးချယ်သဘောသဘာဝအပေါ်အခြေခံပြီးလိုအပ်မှု PFC မော်ဂျူ၏ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မော်ဒယ်မော်ဂျူပါဝင်, ဒါမှမဟုတ်မှတဆင့်ထပ်ဆင့်လွှင်ရမယ်, dorsal anterior cingulate, အ gyrus rectus သို့တိုးချဲ့သည့် subgenual ဒေသ, ဒါမှမဟုတ်ဧရိယာ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှတဆင့် 47 / 12 ။ လယ်ပြင်၌ရှိသောဤအဆင့်မှာ PFC စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းရိုးရှင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များအသုံးဝင်သောဖြစ်မလုံလောက်အသေးစိတ်များကိုပေးစွမ်းနှင့် PFC ဒေသအများစုအတွက် amygdala ဖို့ခိုင်မာတဲ့စီမံချက်များကင်းမဲ့အဖြစ်အများအပြားကိစ္စများတွင်တကယ်တော့, အထင်အမြင်မှားစေပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအာမခံ et al နေဖြင့်အဆိုပြုနှင့်စမ်းသပ်ပြီးသည့်မော်ဒယ်အဖြစ် amygdala မှထုတ်လုပ်တဲ့ key ကို node များအာရုံစိုက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ်များ၏ပေါ်ပေါက်ရေး။ နှင့် Phillips က et al ။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက်အားတက်စရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများအတွက် amygdala ကိုထိန်းညှိအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း, အ dorsal anterior cingulate ၏ဆွေမျိုးအခန်းကဏ္ဍ, posterior 47 / 12 နှင့် subgenual ဒေသအတွက် PFCs ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကိုနားလည်ထားခံရဖို့သံသယ။
တစ်ဦးက key ကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုသာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PFC functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအကဲဖြတ်သကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်းပေါ်ထွန်းသောအလွန်ကျယ်ပြန့် PFC Active အဲဒီ key ကို node များဆက်စပ်ပုံကိုနှင့် ပတ်သက်. နေဆဲဖြစ်သည်။ ခန္ဓာဗေဒဤ PFC ဒေသများအတွက် dorsal anterior cingulate, posterior 47 / 12 ဒါမှမဟုတ် subgenual ဒေသမှအညီအမျှမချိတ်ဆက်ရသေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့်ရွေးချယ်သည့် amygdala မှကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့များပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းအတွက်အပြည့်အဝနားလည်မှုဟာ PFC ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရွေးချယ် limbic အပြောင်းအလဲနဲ့ modulate ဖို့လုံလောက်သောစီမံချက်များရှိပြုကြသောအခြား PFC ဒေသများနှင့်အတူအပြန်အလှန်မည်မျှတိုက်ရိုက် limbic စီမံချက်များကင်းမဲ့သောထို PFC ဒေသ၏ elucidation လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုသံသယရှိကြသည်။
သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ directionality အပေါ် Insights
ကျနော်တို့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်တစ်ဦးတင်းကျပ် unidirectional အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတို့အကြားကြောင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PFC နှင့် PFC-amygdala interaction က၏ကြီးစိုးမော်ဒယ်များကဤဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုများ laminar ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုဖြစ်ကြောင်း။ စောဒကတက်ခဲ့ကြ ဤအစဉ်အလာ PFC-amygdala ထိပ်-Down မော်ဒယ်များနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PFC interaction ကဆန့်ကျင်ကျွန်ုပ်တို့၏အငြင်းအခုံစီမံကိန်း၏ laminar ပုံစံစီမံကိန်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏တုံ့ပြန်ချက်ကဲ့သို့ဘက်လိုက်မှုကိုကိုယ်စားပြု, ဒါမှမဟုတ်ရှိမရှိ dictate ရသော Barbas နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဖော်ပြထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်အပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခို သတင်းအချက်အလက် feedforward စီးအနင်း။ မှန်ကန်သောလြှငျ, ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဒေသများအတွက် PFC ၏ပိုပြီးအစဉ်အလာသိမြင်ဒေသများထက်အောက်ခြေအထိအချက်အလက်များ၏ feedforward စီးအနင်းမှ သာ. ကြီးမြတ်အထက်မှအောက်သို့တုံ့ပြန်ချက်ထိန်းချုပ်မှုဆွေမျိုးများကိုပေါ်လာပါသည်။
ကျနော်တို့အထက်မှအောက်သို့စည်းမျဉ်းများ၏ဝေါဟာရများဦးနှောက်ဒေသများနှင့်သိမြင်မှု-စိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုနားလည်အတွက်အယူအဆရေးရာဘက်လိုက်မှုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဤသည်ဘက်လိုက်မှုပိုမို animalistic စိတ်ခံစားမှုအထက်တွင်သိမှတ်ခံစားမှုနေရာက "သိမြင်မှု" နှင့် "စိတ်ခံစားမှု" လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဒဿနအမြင်နှင့်အတူကိုက်ညီ။ သို့သော်ဤဘက်လိုက်မှုကဦးနှောက်သတင်းအချက်အလက် process လုပ်တယ်ရသောထုံးစံတစ်ခုအပြည့်အဝနားလည်မှုရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ဘက်လိုက်မှု "သိမြင်မှု" စစ်ဆင်ရေးလြှငျ, အဖြစ်တာသို့မဟုတ်ပတ်ပတ်လည်အခြားလမ်းထက်ပိုပြီးအဖြစ်ထိပ်တန်း-Down နှင့် Bottom-Up ၏ဝေါဟာရများစိတ်လှုပ်ရှားမှု-သိမှတ်ခံစားမှု interaction ကထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်မသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံမှာကနေ function ကို inferring အတွက်ကန့်သတ်
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်၏ကြော့ရှင်းကကြားဒေသဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ခိုင်မာတဲ့ဟောကိန်းများမှဦးဆောင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့သော်အများအပြားဝေဖန်မှုများချက်ချင်းခန္ဓာဗေဒ features တွေအပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ကောက်ချက်ဆွဲထဲမှာကြီးပြင်းလာနိုင်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် cytoarchitecture အပေါ်အခြေခံပြီး laminar ဆက်သွယ်မှုပုံစံများက၎င်း၏ခန့်မှန်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပံ့ပိုးပေမယ့်ပထမဦးစွာဤ laminar ဆက်သွယ်မှုပုံစံများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အခြအာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့စီးပြင်ပတွင်ဆားကစ်အတွက်ပုံမှန်စမ်းသပ်ပေးခံခဲ့သည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ features တွေဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးစီမံကိန်း၏ laminar ပုံစံများရဲ့အနှစ်သာရကယူဆကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်း, ဒီသေချာပေါက်အမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်စီမံကိန်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများအသင်းအဖွဲ့ cortical တစ်လျှောက်လုံးကျင်းပရန်သက်သေပြနေလျှင်ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, PFC အတွက်ဆက်သွယ်မှုများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပတ်သက်. အခြသာတရားဝင်ဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အထက်မှအောက်သို့စည်းမျဉ်းများနှင့် feedforward နှင့် Bottom-Up လုပ်ငန်းစဉ်များအကြားတစ်ဦးအလားတူခိုင်မာတဲ့ link ကိုအကြားခိုင်မာသောချိတ်ဆက် posited ပါပြီ။ စည်းကမ်းချက်များတုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward ပြောင်းလဲနေသောစနစ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားနေရသောထိန်းချုပ်မှုသီအိုရီကနေအစပြုတာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးစည်းမျဉ်းကိုထိန်းချုပ်ပေးတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများနှင့် feedforward ယန္တရားများ၏အယူအဆတစ်ခုအပြောင်းအလဲနဲ့စီးအဆင့်မြင့်ဒေသများသို့သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းပေးအဖြစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်စိတ်ပညာရှင်များကဤဝေါဟာရများ၏မွေးစား unsurprising ဖြစ်ပါတယ်အလိုလိုသိသည်။ သို့သော် feedforward နှင့်အတူတုံ့ပြန်ချက်နှင့် Bottom-Up နှင့်အတူထိပ်တန်း-Down စည်းမျဉ်း၏ရိုးရှင်းညီမျှခြင်းနောက်ထပ် features တွေအထက်မှအောက်သို့နှင့် Bottom-Up Conceptual အားဖြင့်ဆိုလိုသောအတိုင်းအတာအထိပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအပိုဆောင်း features တွေမရှိသလောက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလုပ်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့လမ်းကြောင်း conceptualizing အတွက်အရေးပါသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်သီအိုရီကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်အချို့သောသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward ယန္တရားများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာထိပ်ပိုင်း-Down နှင့် Bottom-Up စည်းကမ်းချက်များအသုံးချကြောင်းသံသယပေမယ့်ထိုကဲ့သို့ရှေ့နောက်မညီခဲစာပေအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလုပ်နေကြသည်။
အဆိုပါ PFC ၏တုံ့ပြန်ချက်နှင့် feedforward စီမံချက်များ characterizing ခုနှစ်တွင်, ငါတို့ရှိသမျှသည်စီမံချက်များအတူတူပင်မျိုးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒေသများတုံ့ပြန်ချက်, feedforward နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်သွယ်မှုပေါင်းစပ်ရှိသည်, ဒါပေမဲ့အဲဒီဆက်သွယ်မှုများ၏အချိုးအစားဒေသများဖြတ်ပြီးသိသိသာသာကွာခြား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်မှုများ၏ကြီးစိုးပုံစံများ characterizing ကြသည်, သို့သော်ဤကျန်ရှိနေသေးသောဆက်သွယ်မှု function သိသိသာသာမဟုတ်မဆိုလိုပါ။ ဥပမာ, eulaminate PFC ဒေသများဆက်ဆက်ဒီဒေသများအကြားဆက်သွယ်ရေး၏ကြီးစိုး mode ကိုမဖြစ်ရင်တောင်ဒီထက် granular ဒေသများရှုထောင့်ကိုထိန်းညှိကူညီဖို့လုံလောက်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်များရှိသည်။
ထိုမှတပါး, feedforward အမျိုးအစားစီမံချက်များဆက်သွယ်မှုအချို့ကိစ္စများတွင်မဟုတ်ဘဲရိုးရိုးသတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်ထက်ပစ်မှတ်ဒေသများတွင်အပြောင်းအလဲနဲ့ modulate နိုင်ဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် feedforward မော်ဂျူ၏ဤမျိုး၏အကောင်းဆုံးဥပမာ (ဘက်ပေါင်းစုံယှဉ်ပြိုင်မော်ဒယ်များအတွက်ပေါ်ပေါက်Desimone နှင့် Duncan က 1995; Duncan က et al ။ 1997) သောတဦးတည်းကိုယ်စားပြုများ၏အမြတ်အခြားများ၏ဖိနှိပ်မှုအတွက်ရလဒ်များ။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များမှာပေးထားသောကိုယ်စားပြုမှု၏ရှေ့ဆက်နို့တိုက်ကျွေးမှု (ထိုလှုံ့ဆော်မှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ခုတိုးမြှင့်, အခြားသောလှုံ့ဆော်မှုများ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နှိပ်ကွပ်နေတာတွေကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်Desimone နှင့် Duncan က 1995) ။ ဒီထုံးစံ၌အဘယျအရှေ့သို့ကျွေးမွေးရရှိပစ်မှတ်ဒေသများတွင်အပြောင်းအလဲနဲ့ modulate မှပြုမူနိုင်ပါတယ်။ PFC လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏အခြေအနေတွင်တစ် DLPFC signal ကိုအရှင် feedforward စီမံကိန်း၏ဒီစီကနေတဆင့် OFC အတွက်အလားအလာရှိသောကိုယ်စားပြုအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ကတိကျသောကွန်ပျူတာ features တွေဆိုလိုလို့ယှဉ်ပြိုင်ယန္တရား၏ဤအမျိုးအစား (စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်Walther & Koch, 2006), ကြောင်းယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများ၏မော်ဒယ်များသို့ထည့်သွင်းရကြပြီမဟုတ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်စဉ်းစားမှာ, feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်ဆက်သွယ်မှုသတ်မှတ်ပေးရန် Barbas နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသုံးပြုတဲ့စံ laminar စီမံကိန်း၏ hierarchical အစီအစဉ်ဆန်းစစ်သည်အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးအသုံးပြုသောခဲ့ကြသောစံနှုန်းများနှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုတင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်ရှေ့ဆက်ဆက်သွယ်မှု၏အဓိပ္ပာယ်မကြာခဏ IV layer အားရည်ညွှန်းနဲ့သတ်မှတ်ကြပါတယ်တုံ့ပြန်ချက် (ဆင်း) ပရိုဂျက် layer ရဲ့ပြင်ပမှာရပ်ဆိုင်းနေချိန်တွင်အထူးသ, ထိုကဲ့သို့သောကြောင်း feedforward (တက်လျက်ရှိနေသည်ကို) Project, အလွှာ IV အတွက် (သို့မဟုတ်အများစုနေထိုင်ပြီးအလွှာ IV အတွက်) မိမိတို့၏ရပ်စဲခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ကြသည် IV ။ ဒီပုံစံများမှခြွင်းချက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီအဖြစ်အလွှာ IV အုပ်ချုပ်မှုကိုတစ်တင်းကျပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုဖြစ်ကောင်းနေမကောင်း (အကြံပေးနေစဉ်Pandya နှင့် Rockland, 1979; Felleman နှင့်ဗန်အက်ဆင်း, 1991), infragranular အလွှာ V နှငျ့ VI ကိုအတွက်ရပ်စဲစီမံချက်များ feedforward စီမံချက်များအဖြစ်ကုသခံရဖို့ခွင့်ပြုစံသတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးချဲ့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်။ ပွဲတစ်ပွဲကွဲပြားခြားနား PFC cortical အလွှာအတွက်ပစ်ခတ်၏အချိန်ကိုက်၏လေ့လာမှုများဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း, သို့သော်ဤပြဿနာအပေါ်ဒေတာချို့တဲ့နေကြသည်။
စံ၏မေးခွန်းကို OFC-DLPFC အမှန် OFC အဆိုပါ DLPFC ထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိအဖြစ်ကုသထားရမည်, ထိုသို့ထိုကဲ့သို့သောငြင်းခုန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဟုတ်သောအရာတစ်ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာယူဆမတိုင်မီခေတ္တနားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကရှင်းလင်းစွာစီမံကိန်းများ၏ပုံစံများအကယ်စင်စစ် DLPFC မူလတန်းအာရုံခံဒေသများအထက်တွင်ထိုင်လျက်အဆင့်မြင့်အာရုံခံဒေသများဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌, OFC အထက်တစ် hierarchical အနေအထား၌တစ်ဦး hierarchical အဖွဲ့အစည်းကမှညီမဖော်ပြထားနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, PFC အဖှဲ့အစညျး၏မော်ဒယ်များ PFC ဒေသများတစ်ဦးအဆင့်ဆင့်၏ထိပ်ထိုင်နေသည်အဖြစ် DLPFC ၏နေရာအနှံ့ positioning ကိုရှောင်ရှားရန်ပညာရှိဖြစ်လိမ့်မယ်။
feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်ဆက်သွယ်မှု၏ modeling
စိတ်လှုပ်ရှားမှု-သိမှတ်ခံစားမှု interaction က၏လက်ရှိမော်ဒယ်အကဲဖြတ်ထဲမှာယနေ့အထိအနည်းငယ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများစီမံကိန်းများကလွဲရင်နှင့်အတူ (တုံ့ပြန်ချက်, feedforward သို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စီမံချက်များရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိ၏တိကျသောစမ်းသပ်မှုပါဝင်သည်ပြီသတိပြုဖွယ်ဖြစ်ပါသည် Seminowicz et al ။ 2004) ။ သင်တန်းအများစုဟာ neuroimaging လေ့လာမှုများဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ကြောင်း laminar တိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်မပေးပါဘူး။ သို့သော်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုမော်ဒယ်များအတွက်နည်းစနစ်များတွင်မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်ဦးတည်ချက်ပုံစံရန်အသုံးပြုနိုင် tools များကိုပေး။ ဥပမာအားဖြင့်, မိသားစုအဆင့်ကိုအခြနှင့် Bayesian မော်ဒယ်ပျမ်းမျှအား အသုံးပြု. ပြောင်းလဲနေသောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ် (DCM) သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများ (၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဂျူ၏ညှနျကွားနှင့်သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. စမ်းသပ်ယူဆချက်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်Friston et al ။ 2003; ချန် et al ။ 2009; Daunizeau et al ။ 2009; Friston & Dolan 2010; ပဲန်နီ et al ။ 2010) ။ DCM လည်းထိုကဲ့သို့သော DLPFC တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်အချို့ကြားခံဖွဲ့စည်းပုံမှာမှတဆင့် amygdala ကိုဆင်း-ထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိ၏ဦးခေါင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခေါင်းကိုမပေးအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်မော်ဒယ်များကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့အထိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောသာအနည်းငယ် DCM လေ့လာမှုများ (ထုတ်ဝေခဲ့ကြEthofer et al ။ 2006; Smith က et al ။ 2006; ရိုဝီက et al ။ 2008; Almeida et al ။ 2009), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာမရှိလေ့လာမှုများစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောနည်းစနစ်များ၏လျှောက်လွှာကိုသိသိသာသာလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု-သိမှတ်ခံစားမှု interaction ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်ဖွယ်ရှိသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဦးနှောက်ဒေသများအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတခြားဧရိယာ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုတက်သို့မဟုတ်ဆင်းရွေးချယ်ဇီဝကမ္မကာလအတွင်းတဦးတည်းဒေသများ၏စာမေးပွဲအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာ, DLPFC အမှန်တကယ် OFC အပြောင်းအလဲနဲ့လြော့ဖို့အလုပ်လုပ်တယ်လျှင် DLPFC အော့ဖ်လိုင်းယူသောအခါတ OFC အတွက်ပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်မယ်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေ DLPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက် fMRI နှင့်အတူ OFC လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်။ တနည်းအား transcranial သံလိုက်ဆွ (TMS) ယာယီ OFC လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ် DLPFC ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြောင်းလဲပစ်ရန်အ DLPFC ကျော်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ပါပဲ, Knoch et al ။ (2006) မကြာသေးမီက TMS ညာဘက် DLPFC ကျော်တစ်ဦးအကြိမ်ရေမှီခိုထုံးစံ၌ posterior OFC လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်က prefrontal cortex ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကွန်ယက်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက် processing အကျိုးသက်ရောက်စေပုံကိုသိရန်စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ OFC စင်ကြယ်သောဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ဘို့အရေးကြီးပါတယ်လျှင် OFC ဖယ်ရှားအခါဥပမာ, ဘယျအရာကပို dorsal ဒေသများသို့ဖြစ်သွားမလဲ Saddoris et al ။ (2005) OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်များတွင်ပစ်ခတ် amygdalar ပြောင်းလဲပေမယ့်ဒီချဉ်းကပ်နည်းယူသည်အခြားလေ့လာမှုများလည်းမရှိခဲ့ချေဖို့ရှားပါးပုံကိုဆနျးစစျဖို့ချဉ်းကပ်မှု၏ဤအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုကြသည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုအပေါ်ကြီးထွားလာစာပေ, ဤအရေးပါသောဦးနှောက်ဒေသများအပြန်အလှန်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးပွားစေဖို့အလားတူဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤ interaction ကတစ်ဦးအပြည့်အဝနားလည်မှုသာသည်ဤဆားကစ်၏တိကျသော neuroanatomical features တွေဖို့သတိထားအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူရောက်ရှိပါလိမ့်မည်။
တိကျတဲ့ prefrontal ဆက်သွယ်မှုပု amygdala ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း dictate
Laminar projection ပုံစံများ prefrontal cortex အတွက်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်
Feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်များစိန်ခေါ်မှု prefrontal အဖှဲ့အစညျး
ဤလုပ်ငန်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုမှထောက်ပံ့ကြေး T32MH018931-21, T32MH018921-20, & 5R01MH074567-04 ကထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောစာမူကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် Tawny Richardson ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
et al Aggleton JP ။ အဆိုပါမျောက်တွေကို (Macaca mulatta) ဦးနှောက် Res ၏ amygdala မှ cortical နှင့် subcortical afferents ။ 1980; 190: 347-368 ။ [PubMed]
Almeida JR, et al ။ ပျော်ရွှင်မျက်နှာများမှပုံမှန်မဟုတ်သော amygdala-prefrontal ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါကနေစိတ်ကြွခွဲခြား။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 66: 451-459 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Amar DG, D- ၏ Insausti R. Retrograde သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [3H] ကမျောက် amygdaloid ရှုပ်ထွေးသို့ထိုးသွင်း -aspartate ။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1992; 88: 375-388 ။ [PubMed]
Amar DG, စျေး JL ။ မျောက်အတွက် Amygdalo-cortical Project (Macaca fascicularis) J ကို comp Neurol ။ 1984; 230: 465-496 ။ [PubMed]
et al Amar DG ။ အဆိုပါမျောက် amygdaloid ရှုပ်ထွေးသော၏ခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းက။ ခုနှစ်တွင်: Aggleton JP, အယ်ဒီတာ။ Emotion, မှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ Neurobiological aspect ။ Wiley-Liss; နယူးယောက်: 1992 ။ စစ။ 1-66 ။
တစ်ဦးက X, et al ။ ဟာ Macaque မျောက်အတွက် midbrain periaqeductal မီးခိုးရောင်အတွက် longitudinal ကော်လံမှ Prefrontal cortical စီမံကိန်းများ။ J ကို comp Neurol ။ 1998; 401: 455-479 ။ [PubMed]
Badre: D, et al ။ Dissociable ventrolateral prefrontal cortex အတွက်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အထွေထွေရွေးချယ်ရေးယန္တရားများထိန်းချုပ်ထား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47: 907-918 ။ [PubMed]
Banich MT, et al ။ သိမှုထိန်းချုပ်ရေးယန္တရားများ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်: psychopathology များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေနဲ့အာရုံကြောရှုထောင့်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009; 33: 613-630 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အဆိုပါမျောက်တွေကိုအတွက် basoventral နှင့် mediodorsal အမြင်အာရုံလက်ခံရရှိသူ prefrontal ဒေသ Barbas အိပ်ချ်ခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းက။ J ကို comp Neurol ။ 1988; 276: 313-342 ။ [PubMed]
သိမှတ်ခံစားမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်မျောက် prefrontal cortical အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ပေါင်းစပ်အခြေခံ Barbas အိပ်ချ် Connections ကို။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2000; 52: 319-330 ။ [PubMed]
Barbas H ကို, De OJ ။ အဆိုပါမျောက်တွေကိုအတွက် basoventral နှင့် mediodorsal prefrontal ဒေသများဖို့ amygdala ကနေ projections ။ J ကို comp Neurol ။ 1990; 300: 549-571 ။ [PubMed]
Barbas H ကို, Pandya DN ။ ဗိသုကာနှင့်မျောက်တွေကိုအတွက် prefrontal cortex ၏အခ်ါဆက်သွယ်မှု။ J ကို comp Neurol ။ 1989; 286: 353-375 ။ [PubMed]
Barbas H ကို, Rempel-Clower N. cortical ဖွဲ့စည်းပုံမှာ corticocortical ဆက်သွယ်မှုများ၏ပုံစံခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Cereb Cortex ။ 1997; 7: 635-646 ။ [PubMed]
Barbas H ကို, et al ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများမှမျောက် prefrontal cortex ကနေ serial လမ်းကြောင်းစိတ်ခံစားမှုစကားရပ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ BMC neuroscience ။ 2003; 4: 25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barbas H ကို, ခုနှစျတှငျ Zikopoulos ခ: မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အဆင့်ကဲများနှင့်အပြိုင်ဆားကစ်။ Zald DH, Rauch SL, အယ်ဒီတာများ။ Orbitofrontal Cortex အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2006 ။
Beauregard M က, et al ။ အာရုံကြောစိတ်လှုပ်ရှားမှုမသိ Self-စည်းမျဉ်း၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ အဆိုပါ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 1-6 ။ [PubMed]
ဆရာတော် SJ ။ စိုးရိမ်စိတ်များ Neurocognitive ယန္တရားများ: တစ်ခု Integrated အကောင့်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2007; 11: 307-316 ။ [PubMed]
တိုနီဘလဲ RJR, Mitchell က DGV ။ Psychopathy, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2009; 39: 543-555 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Blumenfeld RS, et al ။ အတူတကွအပိုင်းပိုင်းချပြီး: relational မှတ်ဉာဏ် encoding ကအတွက် dorsolateral prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Cogn neuroscience ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2010 ။ [PubMed]
Brodmann K. ဇီဝကမ္မဗေဒ des Gehrins ။ Neue Deutsche Chirugie Neue Deutsche Chirugie ။ 1914; 2: 85-426 ။
Carmichael ST, စျေး JL ။ ယင်းဟာ Macaque မျောက်အတွက် Orbital နှင့် medial prefrontal cortex ၏ Architectonic subdivision ။ J ကို comp Neurol ။ 1994; 346: 366-402 ။ [PubMed]
Carmichael ST, စျေး JL ။ ဟာ Macaque မျောက်များ၏ Orbital နှင့် medial prefrontal cortex ၏ Limbic ဆက်သွယ်မှု။ J ကို comp Neurol ။ 1995; 363: 615-641 ။ [PubMed]
Carmichael ST, စျေး JL ။ ဟာ Macaque မျောက်များ၏ Orbital နှင့် medial prefrontal cortex အတွင်း connection ကွန်ရက်များ။ J ကို comp Neurol ။ 1996; 346: 179-207 ။ [PubMed]
et al Chechko N ကို။ ငွေလွှဲထိတ်လန့်ရောဂါအတွက်အနိမ့် limbic အဆောက်အဦများနှင့် brainstem ၏စိတ်ခံစားမှုပဋိပက္ခနှင့် activation ဖို့မတည်မငြိမ် prefrontal တုံ့ပြန်မှု။ PLos တစ်ခုမှာ။ 2009; 4: e5537 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chen က CC ကို, et al ။ ရှေ့ဆက်နှင့်ဦးနှောက်အတွက်နောက်ပြန်ဆက်သွယ်မှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ asymmetries တစ် DCM လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2009; 45: 453-462 ။ [PubMed]
et al Chiba T က။ ဂျပန်မျောက်အတွက် medial prefrontal cortex ၏ infralimbic နှင့် prelimbic ဒေသများ၏ Efferent Project, Macaca fuscata ။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 888: 83-101 ။ [PubMed]
Cisler JM, Koster EHW ။ စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်အတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ mechanisms: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Clin Psychol ဗျာ 2010; 30: 203-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Compton RJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှသတိထားရမှာ: သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ stroop အလုပ်များကိုတစ်ခု fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2003; 3: 81-96 ။ [PubMed]
Cooney RE, et al ။ ကောင်းမွန်သောကြိမ် Remembering: များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်စည်းမျဉ်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Neuroreport ။ 2007; 18: 1771-1774 ။ [PubMed]
Cowan N. မှော်နက်နဲသောအရာလေး: ဘယ်လိုကန့်သတ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အလုပ်လုပ်ကိုင်, ဘာကွောငျ့လဲသလဲ? Curr ညွှန် Psychol သိပ္ပံ။ 2010; 19: 51-57 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Curtis အီး, D'Esposito အမ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သီအိုရီအလုပ်လုပ်အပေါ် prefrontal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2004; 4: 528-539 ။ [PubMed]
Daunizeau J ကို, ဒါဝိဒ်က, အို Stephan Ke ။ dynamic ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်: အဇီဝရူပဗေဒနှင့်စာရင်းအင်းရိုးအမြစ်ကိုတစ်ဦးဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ စာနယ်ဇင်းများတွင် Neuroimage ။ [PubMed]
et al Delgado MR ။ ဆုချခြင်းနှင့် puishment မှ Dorsal striatum တုံ့ပြန်မှု: valence နှင့်ပြင်းအားထိန်းသိမ်းရေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2003; 3: 27-38 ။ [PubMed]
et al Delgado MR ။ သိမြင်မှုနည်းဗျူဟာများမှတဆင့်ဆုလာဘ်၏မြော်လင့်ထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2008a; 11: 880-881 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Delgado MR ။ conditional ကြောက်ရွံ့မျိုးသုဉ်းရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခြေခံအာရုံကြော circuitry ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008b; 59: 829-838 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Desimone R ကို, ရွေးချယ်အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှု၏ Duncan ကဂျေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ။ အမ်းဗြာ neuroscience ။ 1995; 8: 193-222 ။ [PubMed]
et al Dolcos F ကို။ စိတ်အာရုံထွေပြားစိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းထဲမှာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex ၏အခန်းက္ပ။ Neuroreport ။ 2006; 17: 1591-1594 ။ [PubMed]
Dolcos က F, စိတ်ခံစားမှုအာရုံအားဖြင့်သိမြင်မှုနှောင့်အယှက်ဖြန်ဖြေဆက်မက်ကာသီ G. အဦးနှောက်စနစ်များကို။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 2072-2079 ။ [PubMed]
et al Dombrowski သည် SM ။ quantitative ဗိသုကာဟာမျောက်တွေကိုအတွက် prefrontal cortical စနစ်များကိုခွဲခြား။ Cereb Cortex ။ 2001; 11: 975-988 ။ [PubMed]
et al မိုးခုံး, G, ။ စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2010; 31: 758-769 ။ [PubMed]
Domijan: D, Setic အမ်ကိန်းဂဏန်း-မြေပြင်တာဝန်ကျတဲ့နေရာတစ်တုံ့ပြန်ချက်မော်ဒယ်။ J ကို Vis ။ 2008; 8: 10-27 ။ [PubMed]
Dreisbach, G, Goschke တီဘယ်လိုအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး modulates: တိုးမြှင့်အာရုံ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဇွဲလျှော့ချ။ J ကို Exp Psychol Mem ကို Cogn လေ့လာပါ။ 2004; 30: 343-353 ။ [PubMed]
et al Drevets WC ။ ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါ၏တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှု။ J ကို neuroscience ။ 1992; 12: 3628-3641 ။ [PubMed]
Duncan က J ကို, Humphrey, G, အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုအတွက်ရပ်ကွက် R. ယှဉ်ပြိုင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု။ Curr Opin Neurobiol ။ 1997; 7: 255-61 ။ [PubMed]
et al Eickhoff SB ။ neuroimaging အချက်အလက်များ၏ activation ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း Meta-analysis သည်-based Coordinate: Spatial မသေချာမရေရာ၏ပင်ကိုယ်မူလခန့်မှန်းချက်အပေါ်အခြေခံတဲ့ကျပန်းဆိုးကျိုးများချဉ်းကပ်။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2009; 30: 2907-2926 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Eippert F ကို။ ခြိမ်းခြောက်မှု-Related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်ချက်၏စည်းမျဉ်း။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2007; 28: 409-423 ။ [PubMed]
et al Ethofer T က။ အကျိုးသက်ရောက်စေ prosody ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်နှောက်လမ်းကြောင်း: တစ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2006; 30: 580-587 ။ [PubMed]
Erber R ကို, Erber မဂ္ဂါဝပ်။ ခံစားချက်နှင့်လူမှုရေးတရားသဖြင့်စီရင်ကျော်လွန်: Mood incongruent ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ခံစားချက်စည်းမျဉ်း။ EUR J ကို Soc Psychol ။ 1994; 24: 79-88 ။
Etkin တစ်ဦးက, et al ။ စိတ်ခံစားမှုပဋိပက္ခဖြေရှင်း: အ amygdala အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် rostral anterior cingulate cortex တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 871-882 ။ [PubMed]
Etkin တစ်ဦးက, et al ။ generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏သွယ်ဝိုက်စည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း amygdala နှင့်အတူ anterior cingulate activation နှင့်ဆက်သွယ်မှုများပျက်ကွက်ခြင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 167: 545-554 ။ [PubMed]
et al Fales CL ။ ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဦးနှောက် circuitry အတွက်ပြောင်းလဲစိတ်ခံစားမှု်ရောက်စွက်ဖက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 377-384 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Felleman DJ သမား, ဗန်အက်ဆင်း DC က။ အဆိုပါမျောက်နှောက် cortex processingin heierarchical ဖြန့်ဝေ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 1991; 1: 1-47 ။ [PubMed]
et al စမုန်နက် MJ ။ neurotic နှင့် endogenous စိတ်ကျရောဂါအတွက်အာရုံ: အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်အနုတ်လက္ခဏာစဉ်းစားတွေးခေါ်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ Psychol Med ။ 1987; 17: 441-452 ။ [PubMed]
Fredrickson BL, Branigan C. အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတွေး-action ကို repertoire ၏အတိုင်းအတာကိုထပ်တိုး။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion ။ 2005; 19: 313-332 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Friston KJ ။ neuroimaging အတွက်ဇီဝကမ္မနှင့် modulatory interaction က။ NeuroImage ။ 1997; 6: 18-29 ။ [PubMed]
Friston KJ, Harrison L ကို, ပဲန်နီဒဗလျူ Dynamic ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်လ်။ NeuroImage ။ 2003; 19: 1273-1302 ။ [PubMed]
Friston KJ, Dolan RJ ။ neuroimaging အတွက်ကွန်ပျူတာနှင့်ပြောင်းလဲနေသောမော်ဒယ်များ။ Neuroimage ။ 2010; 52: 752-765 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Fusar-Poly P ကို။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) -tetrahydrocannabinol နှင့် cannabidiol အားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းထိရောက်သောဆက်သွယ်မှု၏ Modulation ။ Neuropsychopharmacology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2010; 13: 421-432 ။ [PubMed]
Fuster JM ။ အဆိုပါ Prefrontal Cortex ။ နယူးယောက်: Raven စာနယ်ဇင်း; 1989 ။
Gable PA ဆိုပြီး, သဟဇာတ-Jones ကအီးချဉ်းကပ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုသဘောအာရုံစိုက်မှုများ၏အနံလျော့ကျစေပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Psychol သိပ္ပံ။ 2008; 19: 476-82 ။ [PubMed]
Gable PA ဆိုပြီး, သဟဇာတ-Jones ကအီးမြင့်မားသောချဉ်းကပ်နည်း-လှုံ့ဆော်မှုအပြုသဘောနှိုင်းယှဉ်အနိမ့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Peripheral ဗဟိုတင်ပြသတင်းအချက်အလက်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Emotion ။ 2010; 10: 599-603 ။ [PubMed]
Gasper K ကို Clore GL ။ ကြီးရုပ်ပုံမှမတက်ရောက်: Mood နှင့်အမြင်အာရုံအချက်အလက်များ၏ဒေသခံအပြောင်းအလဲနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ။ Psychol သိပ္ပံ။ 2002; 13: 34-40 ။ [PubMed]
et al Ghashghaei HT ။ prefrontal cortex နဲ့ amygdala အကြားခန္ဓာဗေဒတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ခံစားမှုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ sequence ။ Neuroimage ။ 2007; 34: 905-923 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gilbert က CD ကို, Sigman အမ်ဦးနှောက်စတိတ်: အာရုံခံအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ထိပ်တန်း-Down လွှမ်းမိုးမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007; 54: 677-96 ။ [PubMed]
Goldin PR စနစ်, et al ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းများ: Reappraisal နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများဖိနှိပ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 577-586 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Grabenhorst က F, Rolls ET ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆွေမျိုးများနှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာပုဂ္ဂလဒိဋ္တန်ဖိုးကို၏ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်စားပြုမှု။ NeuroImage ။ 2009; 48: 258-268 ။ [PubMed]
မီးခိုးရောင် JR ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏စိတ်ခံစားမှုမော်ဂျူ: ချဉ်းကပ်-ဆုတ်ခွာနှုတ် Two-ကျောတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကနေကို double-dissociate Spatial ကဖော်ပြသည်။ J ကို Exp Psychol ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 2001; 130: 436-52 ။ [PubMed]
မီးခိုးရောင် JR, et al ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏ပေါင်းစည်းမှု။ PNAS ။ 2002; 99: 4115-4120 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စုစုပေါင်း JJ ။ Antecedent- နှင့်တုန့်ပြန်-အာရုံစူးစိုက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း: အတွေ့အကြုံ, စကားရပ်များနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်များအတွက်မတူကွဲပြားအကျိုးဆက်များ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 1998; 74: 224-237 ။ [PubMed]
စုစုပေါင်း JJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း။ ခုနှစ်တွင်: Lewis က M ကို, Haviland-ဂျုံးစ် JM, Barrett LF, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ခံစားမှုများလက်စွဲစာအုပ်။3။ Guilford; နယူးယောက်: 2008 ။ စစ။ 497-512 ။
neocortex တစ်စုစည်းသီအိုရီဆီသို့ Grossberg အက်စ်: ရူပါရုံကိုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအဘို့အ Laminar cortical ဆားကစ်။ prog ဦးနှောက် Res ။ 2007; 165: 79-104 ။ [PubMed]
ပိုယ်တစ်ဦးက, ဗွန်Känel R. အဆိုပါ ventro-medial prefrontal cortex: အကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအကြားအဓိက link ကို? Biopsychosocial Med ။ 2008; 2: 21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Hardin MG ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များများ၏အာရုံကြောနိုင်တဲ့ coding ထဲမှာအခြေအနေတွင် valence ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ NeuroImage ။ 2009; 48: 249-257 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Hariri AR ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ amygdala တုံ့ပြန်မှု: မျက်နှာများနှင့်မြင်ကွင်းများ၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ NeuroImage ။ 2003; 17: 317-323 ။ [PubMed]
et al Hayes JP ။ အမှုအရာပူရလာသောအခါအေးမြတည်းခို: စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းမှတ်ဉာဏ် encoding က၏အာရုံကြောယန္တရားများ modulates ။ လူ့အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2010; 4: 1-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ဟယ်ရင်တန် JD ။ လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-modulated စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လှုပ်ရှားမှု။ Emotion ။ 2005; 5: 200-207 ။ [PubMed]
Hikosaka K သည်ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်နှင့်အတူကွဲပြားမျောက်များ၏ Orbital နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal အာရုံခံ၏ Watanabe ကအမ်နှောင့်နှေးလှုပ်ရှားမှု။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 263-271 ။ [PubMed]
et al Jackson က DC က။ မနှစ်မြို့ဖွယ်ဓါတ်ပုံတွေကိုမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖိနှိပ်မှုများနှင့်တိုးမြှင့်။ Psychophysiology ။ 2000; 37: 515-522 ။ [PubMed]
et al ဂျွန်စ T က။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်ထိပ်တန်း-Down prefrontal-subcortical circuitry ၏ Counterproductive စုဆောင်းမှု: ထိန်းညှိရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 8877-8884 ။ [PubMed]
et al Jonides J ကို။ စိတ်နှင့်ဦးနှောက်အတွက်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များ, Curr ။ dir Psychol သိပ္ပံ။ 2005; 14: 2-5 ။
et al Joormann J ကို။ စိတ်ကျရောဂါအတွက်ခံစားချက်စည်းမျဉ်း: ဝမ်းနည်းခံစားချက်အပေါ်ပျော်ရွှင်အမှတ်ရစရာ၏အာရုံနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏ Differential ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 2007; 116: 484-490 ။ [PubMed]
Kalisch R ကို, et al ။ ကှာခွငျးမှတဆငျ့စိုးရိမ်စိတ်လျှော့ချရေး: Subject ဇီဝကမ္မနှင့်အာရုံကြောဆိုးကျိုးများ။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2005; 17: 874-883 ။ [PubMed]
Kalisch R ကို, et al ။ အာရုံကြောစိုးရိမ်စိတ်နှင့်သိမြင်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်ကနေ Self-အာရုံ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2006; 18: 1266-1276 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kanske P ကို, et al ။ စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? reappraisal နှင့်အာရုံဘို့အာရုံကြောကွန်ရက်များ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2011; 21: 1379-1388 ။ [PubMed]
Kastner S က, Ungerleider LG က။ လူ့ cortex အတွက်အမြင်အာရုံကို၏ mechanisms ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2000; 23: 315-41 ။ [PubMed]
et al Kilpatrick LA က။ အနားယူအခြေအနေများစဉ်အတွင်း amygdala functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်လိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ Soc neuroscience Abst ။ 2003: 85.1 ။
ကင်မ် SH, Hamann အက်စ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်း၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2007; 19: 776-798 ။ [PubMed]
Knoch: D, et al ။ ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအပေါ် prefrontal rTMS ၏နောက်ပိုင်းတွင်နှင့်ကြိမ်နှုန်း-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Neuroimage ။ 2006; 31: 641-648 ။ [PubMed]
Knutson B, et al ။ နျူကလိယကို Activation ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအပေါ်ဆုလာဘ်တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု mediates accumbens ။ Neuroreport ။ 2008; 19: 509-513 ။ [PubMed]
et al Koenigsberg HW ။ အာရုံကြောလူမှုရေးအခြေအနေများစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့ဝေးကွားနေမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuropsychologia ။ 2010; 48: 1813-1822 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kringelbach ML, Rolls ET ။ လူ့ orbitofrontal cortex ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: neuroimaging နှင့် neuropsychology ထံမှအထောက်အထား။ prog Neurobiol ။ 2004; 72: 341-372 ။ [PubMed]
Levens သည် SM, Phelps EA ၏။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဝင်ရောက်စွက်ဖက် resolution ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှု processing စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ Emotion ။ 2008; 8: 267-280 ။ [PubMed]
Levens သည် SM, Phelps EA ၏။ Insula နှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု်ရောက်စွက်ဖက် resolution ကိုအခြေခံ orbial တိုကျရိုကျ cortex လှုပ်ရှားမှု။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2010; 22: 2790-2803 ။ [PubMed]
Levesque J ကို, et al ။ Sadness စေတနာအလျောက်နှိမ်နင်းရေးအရင်းခံကျတာကတော့အာရုံကြော Circuitry ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 53: 502-510 ။ [PubMed]
Levesque J ကို, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်စိတ်ခံစားမှု Self-စည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ neuroscience ။ 2004; 129: 361-369 ။ [PubMed]
Levy R ကို, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ အဆိုပါ dorsolateral prefrontal cortex အတွင်းမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလုပ်လုပ်အသားအရောင်ခွဲခြား။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 2000; 133: 23-32 ။ [PubMed]
et al Lieberman MD ။ စကားများသို့ခံစားချက်တွေကိုချပြီး: တံဆိပ်ကပ်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် amygdala လှုပ်ရှားမှု disrupts ။ Psychol သိပ္ပံ။ 2006; 18: 421-428 ။ [PubMed]
Likhtik အီး, et al ။ အဆိုပါ amygdala ၏ Prefrontal ထိန်းချုပ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 7429-7437 ။ [PubMed]
Lyubomirsky S က, et al ။ autobiographical အမှတ်တရများ၏ပြန်လည်ရယူခြင်းအပေါ်စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်မှမွေးမြူရေးနှင့်စိတ်အာရုံထွေပြားတုံ့ပြန်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 1998; 75: 166-177 ။ [PubMed]
et al Mak AKY ။ အာရုံကြောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများစည်းမျဉ်းများဆက်နွယ်နေပါသည်။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု။ 2009; 457: 101-106 ။ [PubMed]
Mathews, G, ဝဲလ် A. အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမှုသိပ္ပံ။ ခုနှစ်တွင်: Dalgleish T က, Power MJ, အယ်ဒီတာများ။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ်။ John Wiley & Sons Ltd; Chichester, အင်္ဂလန်: 1999 စစ 171-192 ။ ။
et al Mayberg HS ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် fluoxetine ၏ဒေသဆိုင်ရာဇီဝဖြစ်စဉ်သက်ရောက်မှု: လက်တွေ့တုန့်ပြန်မှ Serial အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000; 48: 830-843 ။ [PubMed]
et al McRae K သည်။ အာရုံနှင့် Reappraisal ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံထားပါသည်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2010; 22: 248-262 ။ [PubMed]
ထာအေဒီ, et al ။ မျောက်တွေကို Intermodal ရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှု။ II ကို: မော်ဂျူ၏ဇီဝယန္တရားများ။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 359-370 ။ [PubMed]
Mitchell က DGV ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများအကြားအဆိုပါ Nexus: convergence neurocognitive အလွှာတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2011; 217: 215-231 ။ [PubMed]
ဟန်တစ်ဦးက, et al ။ schizotypy အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေဝင်ရောက်စွက်ဖက်၏အာရုံကြောယန္တရားများ။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 2005; 114: 16-27 ။ [PubMed]
ဟန်တစ်ဦးက, et al ။ သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအဘို့အ anterior cingulate cortex subdivisions ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု Differential ။ Psychophysiology ။ 2007; 44: 343-351 ။ [PubMed]
မော်ဂန်, MA, Romanski LM, LeDoux je ။ စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှု၏မျိုးသုဉ်း: medial prefrontal cortex ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ neuroscience လက်တ။ 1993; 163: 109-113 ။ [PubMed]
အများစုမှာ SB, Chun ဟာ MM, Widders DM, Zald DH ။ အာရုံစူးစိုက်မှု rubbernecking: စိတ်လှုပ်ရှားမှု-သွေးဆောင်မျက်စိကွယ်အတွက်သိမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ Psychonom Bull ဗျာ 2005; 12: 654-661 ။ [PubMed]
SB အများစု၊ Smith SD၊ Cooter AB၊ Levy BN, Zald DH အချည်းနှီးသောအမှန်တရား။ သိမှတ်ခံစားမှု & စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ 2007; 21: 964-981 ။
Nee DE, ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်မှ prefrontal cortex နှင့် hippocampus ၏ Jonides ဂျေ Dissociable ပံ့ပိုးမှုများကို: မှတ်ဉာဏ်တစ် 3-ပြည်နယ်မော်ဒယ်အထောက်အထား။ NeuroImage ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2010 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နယူး AS, Goodman က M, Triebwasser J ကို, Siever LJ ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်များ၏ဇီဝလေ့လာမှုမှာမကြာမီကတိုးတက်လာ။ မြောက်အမေရိက Amercia ၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ 2008; 31: 441-61 ။ [PubMed]
Ochsner KN, Bung လုပ် SA, စုစုပေါင်း JJ, Gabrieli JD ။ ခံစားချက်တွေကို Rethinking: စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2002; 14: 1215-1229 ။ [PubMed]
Ochsner KN, Ray RD, Cooper က JC, Robertson က ER, Chopra က S နဲ့, Gabrieli JD, စုစုပေါင်း JJ ။ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များသိမြင် down- ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဖွင့်-စည်းမျဉ်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏: ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့ဘို့။ NeuroImage ။ 2004; 23: 483-499 ။ [PubMed]
Ohira H ကို, Nomura က M, Ichikawa N ကို, Isowa T က, Iidaka T က, Sato တစ်ဦးက, Fukuyama က S, Nakajima T က, မိမိဆန္ဒအလျောက်စိတ်ခံစားမှုဖိနှိပ်မှုစဉ်အတွင်းအာရုံကြောနှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု၏ Yamada ဂျေအသင်းမှ။ NeuroImage ။ 2006; 29: 721-733 ။ [PubMed]
Ohman တစ်ဦးက, Flykt တစ်ဦးက, Esteves အက်ဖ် Emotion အာရုံကိုမောင်း: မြက်ပင်များတွင်မြွေကိုထောကျလှမျး။ J ကို Exp Psychol ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 2001; 130: 466-478 ။ [PubMed]
Ongur: D, ကြိုပို့ယာဉ်ကို AT, စျေး JL ။ လူ့ Orbital နှင့် medial prefrontal cortex ၏ Architectonic subdivision ။ J ကို comp Neurol ။ 2003; 460: 425-449 ။ [PubMed]
Ouimet AJ, Gawronski B, Dozois DJA ။ စိုးရိမ်စိတ်မှသိမှုအားနည်းချက်: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုတစ်ခုနှင့် Integrated မော်ဒယ်။ Clin Psychol ဗျာ 2009; 29: 459-470 ။ [PubMed]
Pandya DN ။ ယင်းအာရုံ cortex ၏ခန္ဓာဗေဒ။ ဗြာ Neurol (ပဲရစ်) 1995; 151: 486-494 ။ [PubMed]
Parrott WG ကို, Sabini ဂျေ Mood နှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုသဘာဝအခြေအနေများအောက်တွင်: ခံစားချက် incongruent ပြန်လည်သိမ်းဆည်းများအတွက်အထောက်အထား။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 1990; 59: 321-336 ။
ပဲန်နီ, et al ။ ပြောင်းလဲနေသောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်များနှိုငျးယှဉျ။ NeuroImage ။ 2004; 22: 1157-1172 ။ [PubMed]
et al ပဲန်နီ WD ။ ပြောင်းလဲနေသောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မော်ဒယ်များ၏နှိုင်းယှဉ်မိသားစုများ: PLoS computing ။ Biol ။ 2010; 6: e1000709 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Perlstein WM, Elbert T က, Stenger VA သို့။ မှတ်ဉာဏ်-related လှုပ်ရှားမှုအလုပ်လုပ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေလွှမ်းမိုးမှု၏လူ့ prefrontal cortex အတွက် Dissociation ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002; 99: 1736-1741 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအကြားဆက်ဆံရေးတွင် Pessoa L. ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008; 9: 148-158 ။ [PubMed]
Petrides M က, လူ့ OFC ၏ Mackey အက်စ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်။ ခုနှစ်တွင်: Zald DH, Rauch SL, အယ်ဒီတာများ။ Orbitofrontal Cortex ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2006 ။
Pezawas L ကို, Meyer-Lindenberg တစ်ဦးက, Drabant EM, Verchinski BA, Munoz Ke, Kolachana BS, Egan MF, Mattay VS, Hariri AR, Weinberger DR ။ 5-HTTLPR polmorphism သက်ရောက်မှုလူ့ cingulate-amygdala interaction က: စိတ်ကျရောဂါများအတွက်တစ်ဦးကမျိုးဗီဇလွယ်ကူစွာထိခိုက်ယန္တရား။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 828-834 ။ [PubMed]
ဖန် KL, Fitzgerald DA, နေသန် PJ, Moore က GJ, Uhde T က, Tancer ME ။ အပျက်သဘောဆောင်သောစေတနာအလျောက်နှိမ်နင်းရေးဘို့အာရုံကြောအလွှာအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 57: 210-219 ။ [PubMed]
Phelps ကို EA, Delgado MR, Near KI, LeDoux je ။ လူသားတွေဟာအတွက်သင်ယူခြင်းမျိုးသုဉ်း: အ Amygdala နှင့် vmPFC ၏အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 43: 897-905 ။ [PubMed]
Phillips က ML, Ladouceur CD ကို, Drevets WC ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်နဲ့ automatic စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောမော်ဒယ်: စိတ်ကြွရောဂါ၏ pathophysiology နှင့် neurodevelopment ကိုနားလည်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 13: 833-857 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Piech RM, Lewis က J ကို, ပါကင် CH, Owen လေး, Roberts သည် AC အ, ဒေါင်းနင်း PE, ပါကင်ဂျေအေ။ အာရုံကြောရွေးချယ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010; 72: 282-288 ။ [PubMed]
Postle BR ။ စိတ်ကိုနှင့်ဦးနှောက်၏အရေးပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ neuroscience ။ 2006; 139: 23-38 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စျေး JL ။ အဆိုပါ Orbital နှင့် Medial Prefrontal Cortex ၏ Architectonic ဖွဲ့စည်းပုံ။ ခုနှစ်တွင်: Zald DH, Rauch SL, အယ်ဒီတာများ။ Orbitofrontal Cortex ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: 2006a ။ စစ။ 3-18 ။
စျေး JL ။ အဆိုပါ Orbital Cortex ၏ connections ။ ခုနှစ်တွင်: Zald DH, Rauch SL, အယ်ဒီတာများ။ Orbitofrontal Cortex ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: 2006b ။ စစ။ 39-56 ။
Quirk GJ, Russo GK, Barron JL, Lebron K. ငြိမ်းအေးကွောကျရှံ့ခွငျး၏ပြန်လည်နာလန်ထူအတွက် ventromedial prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 6225-6231 ။ [PubMed]
Quirk GJ, ဘီယာ JS ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် Prefrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု: ကြွက်၏ Convergence နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2006; 16: 723-727 ။ [PubMed]
Raichle ME, MacLeod လေး, Snyder AZ, လုပ်ပိုင်ခွင့်များ WJ, Gusnard DA, Shulman GL ။ ဦးနှောက် function ကိုတစ်က default mode ကို။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2001; 98: 676-682 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Raizada RD, ဦးနှောက် cortex ၏ laminar ဗိသုကာတစ်ဦးသီအိုရီဆီသို့ Grossberg အက်စ်: အအမြင်အာရုံ system ထဲကနေတွက်ချက်သဲလွန်စ။ Cereb Cortex ။ 2003; 13: 100-113 ။ [PubMed]
ယုတ်ညံ့ယာယီ၏လိုက်ဖက်သောအခန်းကဏ္ဍ, medial ယာယီနှင့် prefrontal cortex: အမြင်အာရုံတ္ထုများအတွက် Ranganath C. အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်။ neuroscience ။ 2006; 139: 277-289 ။ [PubMed]
ray R ကို, Wilhelm FH, စုစုပေါင်း JJ ။ ဒေါသမွေးမြူရေးနှင့် reappraisal: အားလုံးစိတ်ကိုဖွင့်မျက်စိထဲမှာ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2008; 94: 133-145 ။ [PubMed]
Rempel-Clower NL, အမျောက်တွေကိုအတွက် hypothalamus နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုများ Barbas အိပ်ချ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဖွဲ့အစည်းက။ J ကို comp Neurol ။ 1998; 398: 393-419 ။ [PubMed]
Rockland KS, Pandya DN ။ အဆိုပါမျောက်တွေကိုအတွက် occipital ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ cortical ဆက်သွယ်မှု၏ Laminar ဇစ်မြစ်နှင့်နေလ။ ဦးနှောက် Res ။ 1979; 179: 3-20 ။ [PubMed]
Roland PE, Hanazawa တစ်ဦးက, Undeman ကို C, Eriksson: D, Tompa T က, Nakamura H ကို, et al ။ cortical ရဲ့တုံ့ပြန်ချက် depolarization လှိုင်းတံပိုး: အစောပိုင်းအမြင်အာရုံဒေသများအပေါ်အထက်မှအောက်သို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦးကယန္တရား။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 12586-12591 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rottenberg J ကို, စုစုပေါင်း JJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကမှားသွားသည့်အခါ: အကျိုးသက်ရောက်စေသိပ္ပံ၏ဂတိဆိုတာကိုသဘောပေါက်။ Clin Psychol သိပ္ပံ Pract ။ 2003; 10: 227-232 ။
Rottenberg J ကို, ဂျွန်ဆင် SL, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် psychopathology: ပေါင်းကူးထိခိုက်စေခြင်းနှင့်လက်တွေ့သိပ္ပံပညာ။ ယားစာအုပ်များ; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2007 ။
et al ရိုဝီက J ကို။ နည်းဥပဒေ-ရွေးချယ်ရေးနှင့်အရေးယူ-Selection ကိုလူ့ prefrontal နှင့် parietal cortex အတွက် shared neuroanatomical အခြေခံရှိသည်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2008; 18: 2275-2285 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ခံစားချက်အရတော့မှတ်ဉာဏ်အဘို့အအကျိုးဆက်များ: CL, DeHart တီအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ထိန်းညှိရန်အပြုသဘောအမှတ်တရများရယူခြင်း Rusting ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2000; 78: 737-752 ။ [PubMed]
Rypma B, Berger JS, D'Esposito အမ်အလုပ်လုပ်-မှတ်ဉာဏ်ဝယ်လိုအားနှင့် prefrontal cortical လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ဘာသာရပ်စွမ်းဆောင်မှုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2002; 14: 721-731 ။ [PubMed]
Saalmann YB, Pigarev IN, Vidyasagar TR ။ အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုများ၏အာရုံကြောယန္တရားများ: တုံ့ပြန်ချက်သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်မီးမောင်းထိုးပြမည်သို့ထိပ်ဆုံး-Down ။ သိပ္ပံ။ 2007; 316: 1612-1615 ။ [PubMed]
Saddoris အမတ်, Gallagher M က, basolateral amygdala အတွက် Schoenbaum G. အ Rapid ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ encoding က orbitofrontal cortex နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 321-331 ။ [PubMed]
အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ neocortex နှင့်၎င်းတို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အနက် Sanides အက်ဖ်နှိုင်းယှဉ်ဗိသုကာ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1969; 167: 404-423 ။
Savine AC အ, Braver TS ။ လှုံ့ဆော်မှုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး: ဆုကြေးမက်လုံးပေးတာဝန်-switching စဉ်အတွင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု modulate ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 10294-10305 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Seminowicz DA, Mayberg HS, McIntosh AR, Goldapple K သည်, ကနေဒီက S, Segal Z ကို, et al ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် Limbic-တိုကျရိုကျ circuitry: တစ်လမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ် metanalysis ။ Neuroimage ။ 2004; 22: 409-418 ။ [PubMed]
Shulman GI, Fiez J ကို, Corbetta M က, Buckner RL, Miezin FM ရေ, Raichle M က, et al ။ II ကို: အမြင်အာရုံတာဝန်များကိုဖြတ်ပြီးဘုံသွေးစီးဆင်းမှုအပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက် cortex အတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို Cogn neuroscience ။ 1997; 9: 648-663 ။
Siemer အမ် Mood-အရတော့သိမြင်မှုစိတ်ဓါတ်များအတွေ့အကြုံကိုပါဝင်သည်။ Emotion ။ 2005; 5: 296-308 ။ [PubMed]
et al Smith က APR ။ Task ကိုနဲ့ content စိတ်ခံစားမှုပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် amygdala-hippocampal ဆက်သွယ်မှု modulate ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 49: 631-638 ။ [PubMed]
Stefanacci L ကို, Amar DG ။ ယင်းဟာ Macaque မျောက် amygdala များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နျူကလိယမှ cortical သွင်းအားစု၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဖှဲ့အစညျးမြား: A retrograde သဲလွန်စလေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 2000; 421: 52-79 ။ [PubMed]
Stefanacci L ကို, Amar DG ။ ယင်းဟာ Macaque မျောက် amygdala မှ cortical သွင်းအားစုအပေါ်တချို့ကလေ့လာတွေ့ရှိချက်: လေ့လာမှု tracing တစ်ခု anterograde ။ J ကို comp Neurol ။ 2002; 451: 301-323 ။ [PubMed]
Stuss ၎င်းကို, Benson DF ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး။ ကျီး; နယူးယောက်: 1986 ။
Talairach J ကို, လူ့ဦးနှောက်၏ Tournoux P. Co-ပြို Stereotaxic Atlas ။ Thieme; နယူးယောက်: 1988 ။
တေလာ Tavares ဖက်စပ်, Clark က L ကို, Furey ML, Williams က GB ကို, Sahakian BJ, Drevets WC ။ unmedicated စိတ်ဓါတ်များမမှန်အတွက်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်မှပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်မှုအာရုံကြောအခြေခံ။ Neuroimage ။ 2008; 42: 1118-1126 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Teasdale &, Rezin V. စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာများ၏ခံစားချက်အပေါ်အပျက်သဘောအတွေးများ၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - စိတ်ကျဝေဒနာသိမြင်မှုပုံစံ၏စမ်းသပ်မှုများ။ Brit J ကို Soc Clin Psychol ။ 1978; 17: 65-74 ။ [PubMed]
Thompson က-Schill SL, Jonides J ကို, Marshuetz ကို C, Smith က EE, D'Esposito M က, ကံရဲ့ IP, နိုက် RT ကိုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, Cogn အတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဆိုးကျိုးများအပေါ်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ Swick ဃအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ neuroscience အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ 2002; 2: 109-120 ။ [PubMed]
Urry HL, ဗန် Reekum CM, ဂျွန်စသည် T, Kalin နယူးဟမ်းရှား, Thurow ME, Schaefer HS, ဂျက်ဆန်, CA, Frye CJ, Greischar ll အလက်ဇန္ဒား AL, Davidson RJ ။ Amygdala နှင့် prefrontal cortex ventromedial ပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အထက်လူကြီးများအကြား cortisol Secret ၏ diurnal ပုံစံကိုခန့်မှန်းအနုတ်လက္ခဏာ၏စည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း coupled နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 4415-4425 ။ [PubMed]
ဗန် Reekum CM, ဂျွန်စသည် T, Urry HL, Thurow ME, Schaefer HS အလက်ဇန္ဒား AL, Davidson RJ ။ fixation ရုပ်ပုံ-သွေးဆောင်အနုတ်လက္ခဏာများ၏ဆန္ဒအလျောက်စည်းမျဉ်းကိုထိခိုက်နေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြည့်။ NeuroImage ။ 2007; 36: 1041-1055 ။ [PubMed]
Vertes RP ။ ကြွက်များတွင် infralimbic နှင့် prelimbic cortex ၏ differential စီမံကိန်းများ။ synapses ။ 2004; 51: 32-58 ။ [PubMed]
Vogt BA, Pandya DN ။ II ကို: အမျောက်တွေကို၏ Cingulate Cortex ။ cortical afferents ။ J ကို comp Neurol ။ 1987; 262: 271-289 ။ [PubMed]
အာမခံ TD, Davidson ML, Hughes BL, Lindquist MA, Ochsner KN ။ အောင်မြင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းဖြန်ဖြေ Prefrontal-subcortical လမ်းကြောင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 1037-1050 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Walker က AE ။ ယင်းဟာ Macaque မျောက်များ၏ prefrontal ဧရိယာ၏တစ်ဦးက cytoarchitectural လေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1940; 73: 59-86 ။
Wallis ဟာ JD, Miller က ek ။ အကျိုးကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းမျောက် dorsolateral နှင့် Orbital prefrontal cortex အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 2069-2081 ။ [PubMed]
Walther: D, အဓိက proto-တ္ထုမှ Koch C. မော်ဒယ်လင်းအာရုံကို။ အာရုံကြောကွန်ယက်။ 2006: 1395-1407 ။ [PubMed]
ဝမ် XJ, Tegner J ကို, Constantinidis ကို C, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တစ် cortical microcircuit အတွက် inhibitory အာရုံခံ၏ကွဲပြား Subtype အကြားလုပ်အား၏ဌာနခွဲ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004; 101: 1368-1373 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Whalen PJ, ဘုရှ်, G, McNally RJ, Wilhelm က S, McInerney SC, Jenike MA, Rauch SL ။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေတွက် Stroop ပါရာဒိုင်း: အ anterior cingulate ထိခိုက်စေဌာနခွဲတစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 44: 1219-1228 ။ [PubMed]
Williams က JMG, Mathews တစ်ဦးက, MacLeod C. အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ stroop တာဝန်နှင့် psychopathology ။ Psychol Bull ။ 1996; 120: 3-24 ။ [PubMed]
Woodward TS, ကိုင်ရိုက TA, Ruff CC ကို, Takane Y ကို, Hunter, MA, ဂျွန်ငန် ET ။ functional ဆက်သွယ်မှုနှုတ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကုဒ်ပြောင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံဝန်မှီခိုအာရုံကြောစနစ်များကိုဖော်ပြသည်။ neuroscience ။ 2006; 139: 317-325 ။ [PubMed]
Yeterian Eh, Pandya DN ။ မျောက်တွေကိုအတွက် cortical architectonic အဖွဲ့အစည်းစပ်လျဉ်း Prefrontostriatal ဆက်သွယ်မှု။ J ကို comp Neurol ။ 1991; 312: 43-67 ။ [PubMed]
Zald DH ။ dorsolateral prefrontal cortex နှိုင်းယှဉ် Orbital: အ prefrontal cortex ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားမော်ဒယ်များနှိုင်းယှဉ် content ထဲကို Anatomical ထိုးထွင်းသိမြင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1121: 395-406 ။ [PubMed]
Zald DH, Donndelinger MJ, Pardo JV ။ Positron ထုတ်လွှတ် tomographic ဒေတာကိုဖြတ်ပြီး - ဘာသာရပ်များဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလဲနေသော ဦး နှောက် interaction က Elucidating - olfactory တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်း amygdala နှင့် orbitofrontal cortex ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု။ J ကို Cereb သွေး Flow Metab ။ 1998; 18: 896-905 ။ [PubMed]
Zald DH ကင်မ် SW ။ obsessive-compulsive ရောဂါမှအမည်နှင့်ဆက်စပ်မှု: အ Orbital တိုကျရိုကျ cortex, II ၏ခန္ဓာဗေဒနဲ့ function ကို။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 1996; 8: 249-261 ။ [PubMed]
Zald DH, Mattson DL, Pardo ဖက်စပ်။ ventromedial prefrontal cortex အတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအနုတ်လက္ခဏာအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002; 99: 2450-2454 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]